Uploaded by: Aung Min Thin
Download & View 126628790-မြန်မာအင်းစက်-၃.pdf as PDF for free.
မြန်မာအင်းစက်ဝတ္ထုများစုစည်းမှု (၃) မှတခ်ျက်။
။သွေးသားရင်များကြား အချစ်နယ်ကျွံသွားသော ဇာတ်လမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ မဖတ်ချင်က ဒီနေရာကပဲ PDF ဖိင်ုကို ပိတပ်စ်လကို ပ်ါ။
ပါဝင်သောဇာတ်လမ်းများ ခရီးလမ်းဆံုး အရမ်းကောင်းတာပဲ သားရယ် ကျွန်တော့် မိန်းမ အန်တီဦး
ခရီးလမ်းဆုံး ကျမကတော့ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှာ လက်ထောက်ရာထူးနဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူပါ၊ ယောင်္ကျားကတော့ ဘဏ်မှာ မန်နေဂျာအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူပေါ့၊ တစ်ခါတော့ အားလပ်ရက် ခရီးအနေနဲ့ မိသားစုတွေ ရွာကို အလည်သွားခဲ့ကြတယ်၊ နေ့ခင်းဘက် ယောက်ခမက အနားယူနေတယ်၊ ယောင်္ကျားက အပြင်သွားနေပြီး ခလေးတွေကတော့ အိပ်ပျော်နေတုန်း အိမ်ခေါ်မိုး ပေါ်က လှမ်းထားတဲ့ အဝတ်တွေ သွားရုပ်နေတုန်းမှာ ခြံထဲမှာ တစ်ခုခုလှုပ်ရှားမှုကို သတိထားလိုက်မိတယ်၊ သေသေချာချာကြည့်လိုက်တော့ ယောက်ခထီးကြီး အိမ်က အိမ်ဖော်တစ်ယောက်ကို ခပ်တင်းတင်းဖက်လို့ နှစ်ယောက်လုံးလဲ အဝတ်အစားတွေ မရှိတော့ကြတော့ဘူး၊ မိုးကရွာတော့မှာမို့ ထင်တယ် အားလံုး ကို ခပ်မြန်မြန်ပဲ လှုပ်ရှားနေကြတယ်၊ အိမ်ဖော်ကို ရှေ့ကို ကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီး နောက်ကနေ ယောက္ခထီးက သူရဲ့လိင်တံကို ထိုးထဲ့နေတယ်၊ ဖြည်းဖြည်းချင်းကနေ အရှိန်တွေမြန်လာတော့ ယောက္ခထီးရဲ့ လိင်တံကို ကြည့်မိလိုက်တာ တော်တော်ကို ရှည်တာပဲ၊ ကျမဖြင့် ကြည့်နေရင်းနဲ့ လိင်စိတ်တွေတောင် ထနေမိတော့တယ်၊ ကျမတော့ ယောက္ခမရဲ့ လိင်တံ ရှည်ရှည်ကြီးကြီးကို တွေ့လိုက်ရတာ့ အရမ်းအံ့သြသွားပြီး ပိပိထဲမှာ အရည်တွေတောင် စိမ့်ထွက်လာပြီး ယောက္ခမရဲ့ လိင်တံနဲ့ ဆက်ဆံခြင်စိတ်တွေ ဖြစ်နေမိတော့တယ်၊ ဒါပေမယ် ကျမ ဘယ်လို ချည်းကပ်ရမလဲ မသိသေးဘူး၊ ၁၅ မနစ်လောက်အကြာမှာ ယောက္ခမက လိင်ဆက်ဆံတာပြီးသွားခဲ့ပြီး မိုးကစရွာလာတော့ အိမ်ထဲကို မြန်မြန်ဝင်လိုက်ပြီး ဘာမှ မသိသလို နေနေလိုကတယ်လေ၊ တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ ယောင်္ကျားက အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်သွားတော့ အဲဒီအချိန်မှာ ယောက္ခမကို ချည်းကပ်နေချင်ခဲ့သော်လဲ အချိန်ကလဲမရ ကြောက်စိတ်တွေကလဲ ရှိနေခဲ့တယ်၊ ရုတ်တရပ် အကြံတစ်ခုရလို့တော့…………… ယောင်္ကျားနောက်ကို လိုက်လည်ဖို့ ယောက္ခထီးအပါအဝင် ခလေးတွေအတွက်ရော ရထားလက်မှတ် ဝယ်လိုက်ပြီး ယောင်္ကျားကိုလဲ လှမ်းအကြောင်းကြားထားလိုက်တယ် ယောက္ခထီး ကိုလဲ အလည်ခေါ်ခဲ့မယ်ပေါ့၊ ကျမလဲ
ရုံးကနေခွင့်ယူထားပြီး ခရီးသွားမယ့်နေကို စောင့်မျှော်နေမိတော့တယ်၊ အဲဒီနေ့ရောက်တော့ ကျမရဲ့ အကြံအစည်ကို တွေးမိပြီး နဲနဲတောင် တုန်လှုပ်နေမိခဲ့ရတယ်လေ၊ ရထားပေါ်ရောက်တော့ ခလေးနှစ်ယောက်နဲ့ ယောက္ခထီးရယ် ကျမတို့ရယ် အတွက် အထူးတန်းအိပ်ခန်းရတယ်၊ ကျမစတင်ပြီး ချည်းကပ်သော်လည်း ယောက္ခထီးက မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်၊ သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကျမမရှိလို့လာဆိုတာ တွေးနေရင်း ညသန်းခေါင်အထိ အိပ်မပျော်ခဲ့ဘူး၊ အိပ်နေရင်း ယောက္ခထီးရဲ့ ကိုယ်လုံးကို ကြည့်နေရင်း ကိုင်ကြည့်ဖို့ ကြောက်နေမိခဲ့တယ်၊ မနက် ၄ နာရီလောက်ရောက်တော့ ကျမလဲ အိပ်ပျော်သွားရော၊ မနက် ၇ နာရီ အိပ်ရာနိုးလာတော့ ယောက္ခထီးက အိပ်စင်ရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်နေပြီး ကျမက အပေါ်ဘက် အိပ်စင်မှာ လှဲနေတော့ အကြံတစ်ခုရလိုက်တော့ အိပ်စင်ပေါ်ကမဆင်းတတ်ချင်ယောင်ဆောင်လိုက်ပြီး ယောက္ခမကို ကူညီဖို့ပြောလိုက်တယ်၊ သူလဲ အိပ်စင်ပေါ်က သက်ပြင်း ညှင်းညှင်းလေးချပြီး ကူညီဖို့ ဆင်းလာတော့တယ်၊ ပြီးတော့ ကျမရဲ့ခါးကိုလက်နှစ်ဘက်နဲ့ ကိုင်လိုက်တယ်၊ ကျမက သူပုခုံးပေါ်လက်တင်ပြီးအိပ်စင်ပေါ်ကနေ အသာလေးလျောဆင်းလိုက်တာ ယောက္ခရဲ့ ရင်ခွင်ထဲရောက်သွားပြီး ဖက်ထားမိသလို ဖြစ်နေရော၊ ကျမရဲ့ ရင်သားတွေနဲ့ သူ့ရင်ဘက်ကို ဖိမိနေသလိုဖြစ်နေခဲ့ပြီး ကျမလဲကျေနပ်သွားခဲ့ရတယ်၊ နောက်တော့ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလို နေလိုက်ကြပြီး ကျမအတွေးထဲမှာတော့ ပြန်တွေးမိရင် ရင်တုန်နေခဲ့ပြီး ရထားမဆိုက်ခင် အခွင့်အရေးတစ်ခုတော့ ရအောင်လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားမိတော့တယ်၊ နေ့လည်စာ စားပြီးသွားတော့ ယောက္ခထီးက အောက်ဘက် အိပ်စင်ပေါ်မှာလှဲနေပြီး ခလေး နှစ်ယောက်က ကစားနေကြတယ်လေ၊ ခလေးတွေကိုလည်း အဘိုးကို မနှောက်ယှက်ဖို့နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် အိပ်စင်ပေါ်မှာ ကစားကြနေကြဖို့ ပြောထားလိုက်တယ်လေ၊ ကျမကတော့ ယောက္ခထီး ရဲ့ အိပ်စင်မှာ သွားပြီး သူ့ရဲ့ ပေါင်ရင်းနားမှာ နီးနီးကပ်ကပ် ထိုင်နေလိုက်မိတယ်၊ ရထားက လှုပ်နေတော့ ကျမရဲ့ ဖင်က သူ့ရဲ့ပေါင်ရင်းကို သွားထိမိနေတော့ ပထမတော့ ရှောင်ထွက်သွားသေးတယ်၊ ရထားက လှုပ်လေလေ ကျမရဲ့ ဖင်က သူ့ရဲ့ ပေါင်ရင်းနား ဖိမိလေလေပဲ၊ နောက်တော့ ယောက္ခထီးက ကျမဘက်ကို တစ်စောင်းလှည့်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ လိင်တံက ကျမဖင်ကို စပြီးနောက်ကနေ ထောက်နေတော့တယ်လေ၊ သူ့ရဲ့ လိင်တံကြီးက မြွေတစ်ကောင်လို ကျမရဲ့ဖင်ကို ထိုး လိုက် ဖိလိုက်နဲ့ လုပ်နေပြီ ဆိုတာ သတိထားမိနေတယ်၊ နောက်တော့ သူ့ရဲ့လက်ကလဲ ကျမရဲ့ ဖင်ကို ပွတ်ပေးနေတော့တယ်လေ၊ ကျမရဲ့ လက်တွေကလဲ ယောက္ခထီးရဲ့ လိင်တံကို အဝတ်အစားပေါ်ကနေ ကိုင်လိုက်ပြီး သူနဲ့ လိင်ဆက်ဆက်ရတော့မယ်ဆိုတာ တွေးမိလိုက်တော့ ပျော်နေမိတယ်၊ ကလေးတွေသာ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် ကျမသူကို ဖက်လိုက်မိတော့မှာဘဲ၊ ကျမလဲ ထိုင်လျက်နဲ့ပဲ သူ့ရဲ့ လိင်ကို ကိုင်လိုက် ပွတ်လိုက်နဲ့ ခလေးတွေ အိပ်ချိန်ရောက်အောင်သာ စောင့်နေမိတော့တယ်၊ ည ၁၁ နာရီထိုးတော့ ခလေးတွေကို အပေါ်အိပ်စင်မှာ အိပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး ကျမကတော့ အောက်က အိပ်စင်မှာ အိပ်လိုက်တော့တယ်၊ ည ၁၁ နာရီကျော်တော့ ယောက္ခထီးက ကျမရဲ့ အိပ်စင်ဘက်ကို ကူးးလာပြီး အရင်ဦးဆံုး ရင်သားတွေကို ဖိပြီးပွတ်ပေးတော့တာလေ၊ ပြီးတော့ ယောင်္ကထီးက သူအပေါ်ကိုခွတက်ဖို့ပြောတော့ ကျမလဲတက်ကြွသွား ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးလိုက်တာ၊ ရထားက လှုပ်နေတော့ အိပ်စင်ပေါ်မှာ ဘယ်ညာ လူးနေတော့တာဘဲ၊ ဒါကြောင့် ကျမတို့လဲ မတပ်ရပ်လိုက်ကြပြီး အပြန်အလှန် ခပ်တင်းတင်းလေး ဖက်ထားမိကြတယ်၊ နောက်တော့ သူကကျမရဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်လိုက်တယ်၊ ကျမကလဲ သူ့ရဲ့ အဝတ်အစားးတွေကို ချွတ်မိလိုက်တယ်လေ၊ ပြီးတော့ ယောက္ခထီး ရဲ့
လိင်တံရှည်ကြီးကို ကိုင်ပြီး မာကျော တောင့်တင်းလာအောင် အချိန်အတော်ကြာ ဂွေလှိမ့်ပေးနေမိတယ်၊ တော်တော်လေးကြာတော့ သူက လွေပေးပါလို့ တောင်းဆိုတော့တာလေ၊ နောက်တော့ ကျမတို့လဲ 69 ပုံစံနေလိုက်ကြပြီး အပြန်အလှန် လွေပေး ဂျားပေးနေလိုက်ကြတယ်၊ ခဏကြာတော့ ကျမက အိပ်စင်ပေါ်မှာ လှဲလိုက်ပြီး ယောက္ခထီးက ကျမအပေါ်ကနေ တက်လို့ သူ့ရဲ့လိင်တံကို ပိပိထဲကို စထည့်တော့တာ လိင်တံကြီးက ကြီးလွန်းတော့ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားပြီး ထည့်သော်လဲ နာတာဘဲရှိမယ် မဝင်ပါဘူး၊ နောက်တော့ ပိပိကို တံတွေးလေးဆွတ်ပြီး(ရုတ်တရက် ရထားပေါ်မှာ အုန်းဆီက ဘယ်ကရောက်လာလဲ မသိ၊ ယုတ်တိသိပ်မရှိလို့ တံတွေးနဲ့ လို့ ပြောင်းလိုက်ပါတယ်) တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း စထည့်တော့တာ နောက်ဆုံးတော့ ဝင်သွားတော့တာ၊ လိင်တံက ရှည်လွန်းတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို တိုး ဝင်နေပြီး ပါးစပ်ကနေ ပြန်ထွက်လာမလားတောင် ထင်လိုက်ရတယ်၊ “ကောင်းလိုက်တာရှင်” ၊ ကျမလဲ သူလုပ်တိုင်း ဖင်ကို ကော့ပေးနေလိုက်မိတာ ကောင်းလွန်းလို့ ပါးစပ်ကတော့ အသံတွေ ထွက်လာမိတယ်၊ ရထားရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေက ဆောင့်ချက်တွေကို ပိုပြီးတောင် အကူအညီပေးနေတော့တာဘဲ၊ ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတော့ ရထားဥသြသံနဲ့ အတူ ကျမရဲ့ ပိပိထဲလဲ ယောက္ခထီးရဲ့ သုတ်တွေ ပန်းဝင်းလာတော့တာလေ၊ မိနစ် ၃၀ လောက်ကြာအောင် ဖက်နေလိုက်ကြပြီးနောက် ကျမလဲ ပိပိကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ သွားပြီး ပြန်လာတော့ လုပ်ဖို့ ပြန်စကြတာပေါ့၊ ရထားက ရပ်နေရာကနေ ပြန်လဲထွက်ရော ယောက္ခထီးရဲ့ လိင်တံက ပိပိထဲကို ပြန်ဝင်လာတော့တာ ခရီးလမ်းဆုံး ဘူတာမရောက်ခင်အထိ ဆက်ဆံနေကြတော့တာပါဘဲ၊ အိမ်ရောက်တော့လဲ ကြုံရင် ကြုံသလို ဆက်ဆံခဲ့ကြတာ နှစ်တွေ အတော်ကြာအောင်ဘဲလေ............။
သာယာကြည်လင်တဲ့ မနက်ခင်း လေးရဲ့အေးမြတဲ့လေညင်းလေးတွေနဲ့အတူသားသားတစ်ယောက် နိုး ထလာခဲ့တယ်။
ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီအိမ်ကိုပြောင်းလာတာတစ်ပတ်တိတိရှိပြီလေ။ ဖေဖေရယ်မေမေရယ် တစ်ခန်း ကျွန်တော်ကတစ်ခန်း ၊ မမနဲ့ညီမလေးကတော့ကျွန်တော့်ဘေးကအခန်းမှာပေါ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အညီ လူတွေလဲသွားလာလို့ မနက်ခင်းလေးကသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပြီ။ အိပ်ရာထဲမှာဟိုဒီတွေနေရင်းနဲ့ အခန်းအပြင် ကမေမေအသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ခဏဆိုမနက်စာစားပြီးဖေဖေ စက်ရုံသွားတော့မယ်လေ။ မေမေလဲဆိုင်သွားတော့မှာဆ်ိုတော့အိမ်မှာမမရယ်ကျွန်တော်ရယ်ညီမလေးရယ်သုံးယောက်ထဲကျန်ခဲ့ရတဲ့ ရက်တွေကများတယ်။ မမက မေမေ အမရဲ့သမီးပေါ့ ငယ်ငယ်ထဲက မိဘတွေမရှိတော့ ဖေဖေနဲ့မေမေပဲသမီးလေးလိုစောင့်ရှောက်လာခဲ့တာလေ။ အခုဆို မမက ၂၈ ကျွန်တော်က ၂၃ ၊ညီမလေးက ၁၉ ရှိပြီပေါ့။ အားလုံးငယ်ငယ်ထဲကသိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းပါပဲ ချစ်လဲ ချစ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့အောက်အလွှာမှာတော့ မေမေမောင်အငယ်တို့လင်မယားနေကြတယ်လေ။ ဒီလိုနေလာကြရင်းနဲ့ တစ်နေ့ပေါ့မေမေအကိုအကြီးဆုံးကဖုန်းဆက်လာတယ်။ သူလျှောက်ပေးထားတဲ့ Green Card ကရပြီတဲ့လေ။ အဲ့ဒီတော့အိမ်မှာ လဲတစ်မျိုးပြောင်းစဉ်းစားရတော့တာပေါ့။ သူတို့သွားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ပဲကျန်ခဲ့မှာလေ။ ဖြစ်ရဲ့လားပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့သွားဖြစ်ပါတယ် သူတို့အရင်သွားကြည့်မယ် ညီမလေးက၂၁ နှစ်မကျော်သေးတော့လိုက်သွားလို့ရတယ်အဆင်ပြေပြီဆိုလာခေါ်မယ်ပေါ့။ အဲ့လို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့မောင်နှမသုံးယောက်နေလာကြတာ သုံးလေး လလောက်ရှိလာတဲ့တစ်နေ့ပေါ့၊ အဲ့ဒီနေ့ကညီမလေးမွေးနေ့လေ ။အိမ်မှာ ပါတီလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့လုပ်ပေးရတယ်။ ညီမလေးသူငယ်ချင်းကောင်မလေး လေးယောက်နဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်ပေါ့။နေ့လည်စားပြီးကြတော့ သူတို့တွေလျှောက်လည်ကြတဲ့အချိန်အိမ်မှာမမနဲ့ ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်လေ အိမ်ရှေ့မှာ ထိုင်နေရင်းနဲ့ မမကစပြောလာတယ် ကောင်လေးနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကိုသိလားတဲ့ အဲ့ဒါ အိန်အိန်း ကောင်လေးတဲ့ သူကမမ ကိုပြောပြတယ်တဲ့ ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီတော့မှသိတာပါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူလဲအရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့ရှိလာပြီပေါ့။ အဲ့ဒီနေ့က မမ၀တ်ထားတာ အိမ်နေရင်းဂါဝန်ပန်းရောင်ပျော့ပျော့လေး ၊ဂါဝန်လေးကပါးတော့အတွင်းက အတွင်းခံဘောင်းဘီပန်းရောင်လေးနဲ့ ဘော်လီ အနက်လေးကိုမြင်နေရတယ်လေ။ မမက လှတယ်ဆိုတာထက်ချစ်စရာလေးပါ။ အဖေက ချင်း၊ အမေကတရုတ် ဆိုတော့ဖြူဖြူလေးနဲ့ ပြည့်ပြည့်လေးပေါ့ အရပ်ကတော့ ၅ပေ ၅လောက်ရှိတယ်။ စကားပြောနေရင်းနဲ့ ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကသူနို့အုံဖောင်းဖောင်းလေးကိုကြည့်ကြည့်နေမိတယ်။သူလဲရိပ်မိတယ်ထင်ပါတယ်။ တိတ်ဆိတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆန်ကျင်ဘက်လိင် နဲ့နှစ်ယောက်ထဲရှိနေတဲ့အချိန်မိန်းကလေးတွေစိတ်လှုပ်ရှားတတ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုယုံပါတယ်။ စကားပြောနေရင်းနဲ့ကျွန်တော့်ဘေးကိုလာထိုင်ပြီးတော့ သားသားရော ရည်းစားရှိနေပြီလားတဲ့ အဲ့လိုမေးလာတော့ကျွန်တော် ဇတ်လမ်းတွေလုပ်ပြီးပြန်ဖြေခဲ့မိတယ် အရင်ကရှိတဲ့အကြောင်း ပြီးတော့ကောင်လေးတွေနဲ့ ဇတ်ရှုပ်တဲ့ အကြောင်းပေါ့ ။ ကျွန်တော်ပြောပြတော့သူသနားသွားတယ်ထင်တယ် ပြီးတော့စိတ်လာပါလာတယ်။ ကျွန်တော်ဆံပင်ကိုလာပွတ်ပေးပြီးတော့ “သားသား ရယ် …. သနားပါတယ်။” ကျွန်တော်လဲအလိုက်သင့်လေး မမ ရင်ခွင်ထဲကိုခေါင်းလေးမှီထားလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ပါးက မမ နို့အုံဖောင်းဖောင်းအိအိလေးကိုထိကပ်လို့ပေါ့။ ချွေးနံ့လုံးဝမရှိတဲ့ မမရဲ့ကိုယ်နံ့သင်းသင်းလေးကိုရှူရှိုက်ရင်းသာယာနေမိတယ်။ ပြီးတော့ မမ ရင်ခုန်သံတွေမြန်လာတာကိုကြားနေရတယ်
မမရဲ့သက်ပျင်းချသံသဲ့သဲ့နဲ့အတူ ကျွန်တော့်လက်တွေလဲမမ ခါးလေးကိုဖက်ပြီးတော့အတွင်းခံဘောင်းဘီ ခါးစီလေးကိုပွတ်ပေးနေမိတယ်။ တစ်ခဏတွေထိတွေမှုတွေအောက်မှာ မမနဲ့ကျွန်တော်စိတ်တွေ ပြောင်းလဲကုန်တယ်လေ။ ကျွန်တော့်ခေါင်းလေးကိုမော့ပြီးမမ မျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ မမ လဲပြန်ကြည့်နေတယ်။ မမ မျက်ဝန်းထဲမှာလဲ ရမက်အခိုးအငွေ့လေးတွေနဲ့ဝင်းလက်လို့ပေါ့။ တဖြည်းဖြည်းခြင်းတိုးလာတဲ့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို မျက်လုံးလေးမှိတ်ရင်းကြိုလင့်နေတဲ့ မမရဲ့ အိထွေးနေတဲ့ ပန်းနုရောင်နှုတ်ခမ်းသားတွေက ဆောင်းမနက်ခင်းမှာ ပွင့်အာနေတဲ့ နှင်းဆီပွင့်လွှာလေးအတိုင်း လှပနေတယ်။ မမရဲ့ မထူမပါးနှုတ်ခမ်းလွှာလေးကိုစုပ်ယူရင်း ကျွန်တော်လက်တွေက မမရဲ့ ပြည့်တင်းတဲ့ပေါင်တံအိအိလေးတွေကို ဂါဝန်ပန်းရောင်လေးပေါ်ကနေ ပွတ်သပ်ပေးနေမိတယ်။ အနမ်းချိုချိုတွေရပ်သွားတဲ့တခဏမှာပဲ……… “မမ …. သားသားတို့အတူနေရအောင်နော်” “သားသားရယ် မမ တို့တွေ မောင်နှမအရင်းတွေလိုအတူနေလာကြပြီးမှ အခုလိုပြောင်းလဲသွားလို့ကောင်းပါ့မလား” “မမရယ်………………………………………………………….။” မမ မျက်နှာပေါ်မှာတွေဝေမှုအရိပ်အယောင်တွေနဲ့ ခဏလေးငြိမ်သက်သွားတယ်။ပြီးမှ “သားသား အခန်းထဲသွားရအောင်လေ ဒါဆိုလဲ” ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာပျော်သွားမိတယ် မမ လက်ကိုတွဲပြီးတော့ မမအခန်းထဲကိုနှစ်ယောက်အတူဝင်သွားလိုက်တယ်။ အခန်းမီးလေးကိုမှိတ်လိုက်ပြီးတော့ညအိပ်မီးဝါ၀ါလေးပြောင်းထွန်းလိုက်တဲ့ ခဏ တိတ်ဆိတ်တဲ့ အခန်းလေးက စိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့ အချစ်သင်္ကေတတွေလွမ်းခြုံသွားတယ်။ တစ်ဦးရဲ့ခနွာကိုယ်ကိုတစ်ဦးတပ်မက်စွာဖက်တွယ်ရင်းတရွေ့ရွေ့နဲ့ ကုတင်လေးပေါ်ကိုလိမ့်ဆင်းသွားတယ်။ ပန်းနုရောင်အိပ်ယာခင်းလေးပေါ်မှာ ပက်လက်လေးလဲနေတဲ့ မမရဲ့ တပ်မက်စရာကိုယ်လုံးလေး၊ ပြန့်ကျဲသွားတဲ့ မမရဲ့ ဆံနွယ်စတွေနဲ့ လန်တက်နေတဲ့ ဂါဝန်လေးအောက်ကမမရဲ့ပြည့်တင်းနေတဲ့ ပေါင်သားဖွေးဖွေးလေးတွေက ကောင်းကင်ပေါ်ကကြွေဆင်းလာတဲ့အလှနတ်သမီးလေးတစ်ပါရဲ့ပုံတူပန်းချီကားတစ်ချက်လိုဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ပေါ့။ မမရဲ့လှပတဲ့ ပေါင်းတံလေးကိုနမ်းရင်းဂါဝန်လေးကိုတစ်ဖြေးဖြေးမတင်လိုက်တယ်။ ပေါင်တံလေးရဲ့အဆုံးမှာတော့ မမ ရဲ့ မို့ဖောင်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို ကာရံထားတဲ့ အတွင်းခံပန်းရောင်လေးကဆီးကြိုနေလေရဲ့။ ဂါဝန်လေးကိုတစ်ဖြေးဖြေးလှန်လာတော့ မမတစ်ယောက်သူဂါဝန်လေးကိုချွတ်ပေးရှာတယ်။ “မမရယ်......လှလိုက်တာ။” “မမနို့လေးတွေကတင်းနေတာပဲနော်။” ဆိုတော့ မမတစ်ယောက်အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့တုံ့ပြန်လာတယ်။ ဖြူဝင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးအိအိလေးပေါ်မှာပန်းရောင်အတွင်းခံလေးနဲ့ အနက်ရောင်ဘော်လီလေးပေါ်က မမရဲ့ ရင်သားဖွေးဖွေးလေးတွေ ဖောင်းကြွလို့ အဆီပိုမရှိတဲ့ ခါးသိမ်သိမ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေအောက်က ဖောင်းမို့အိစက်နေတဲ့ မမရဲ့ ဆီးခုန်လေးကိုတယုတစ်ယ နဲ့ ကျွန်တော်အနမ်းလေးပေးလိုက်မိတယ်။ မမဘေးမှာလှဲနေပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မမကိုဖက်ထားရင်းနဲ့ မမလည်တိုင်ဖွေးဖွေးလေးပေါ်ကသွေးကြောစိမ်းစိမ်းလေးတွေကို ဖွဖွလေးကိုက်ပေးလိုက်တော့ မမတစ်ယောက် လူးလွန့်လို့ မွေ့ယာခင်းလေးကိုဆုပ်ချေနေတယ်။ မမပုခုံးပေါ်ကဘော်လီကြိုးအနက်လေးကိုတွန်းချရင်းပုခုံးသားဖွေးဖွေးလေးတွေကိုနမ်းပေးနေရင်းနဲ့ မမကြောပေါ်ကဘော်လီချိတ်လေးကိုဖြုတ်ချလိုက်တော့ တင်းရင်းအိစက်နေတဲ့ မမ ရင်သားဖွေးဖွေးလေးတွေက အထိန်းအကွတ်မဲ့ အိဆင်းလာတယ်။ နို့ဖွေးဖွေးလေးတွေအလယ်မှာပန်းနုရောင် အသီးလေးရဲ့ အလှက ငွေနှင်းပွင့်တွေပေါ်မှာ ကြွေဆင်းလာတဲ့ ပန်းနုရောင်ပန်းလေးတစ်ပွင့်အလားအသက်ဝင်နေလိုက်တာ။မမရဲ့ အိထွေးနေတဲ့ နို့ အုံလေးကိုဆုပ်နယ်ရင်းခလေးတစ်ယောက်လို့ စို့နေမိတော့ မမရဲ့ နှုတ်ခမ်းထွေးထွေးလေးတွေဆီက ငြီးသံတိုးတိုးလေးထွက်လာတယ်။
“အား…….အား…………အား…………………………………….” “ကောင်းတယ် သားသားရယ်……………………….” “အရမ်းကောင်းတယ်………………။” တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အိပ်ခန်းငယ်လေးထဲမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မမကိုလိုးရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိကကျွန်တော်စိတ်ကိုအရမ်းလှုပ်ရှားစေတယ်။ ကျွန်တော်ဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်ချလိုက်တော့အတွင်းခံလေးထဲမှာတင်းနေတယ် ကျွန်တော်လီးကိုမမတစ်ယောက်ကြည့်နေတယ်။ “သားသားလဲမငယ်တော့ဘူးနော်”တဲ့ ကျွန်တော်ကိုကုတင်ပေါ်မှာလှဲခိုင်းပြီးတော့ ကျွန်တော်အတွင်းခံလေးကိုမမ ကိုယ်တိုင်ချွတ်ပေးတယ် အတွင်းခံဘောင်းဘီအောက်က ထိုးထွက်လာတဲ့ ကျွန်တော့်လီးလေးကိုတယုတယကိုင်းရင်း ကျွန်တော်ပေါင်ကြားလေးထဲကိုမမတစ်ယောက်ခေါင်းလေးတိုးဝင်လာတယ်။ပေါင်ကြားထဲမှာလှပပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ မမတစ်ယောက်လီးလေးကိုကိုင်ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ဖွဖွလေးငုံရင်း လီးခေါင်းလေးတစ်ခုလုံးကို မမရဲ့လျှာနဲ့ပွတ်သပ်စုပ်ယူနေတယ်။ မမရဲ့လက်တစ်ဖက်ကလဲ ဂွေးဥလေးနှစ်လုံးကိုဆုပ်နယ်ရင်းပေါ့။ “ပြွတ်ပြွတ်……………ပြွတ်… အား ကောင်းလိုက်တာမမရယ်။” ကျွန်တော့စကားသံလေးဆုံးတော့မမက စုပ်တာရပ်ရင်းကျွန်တော့ဘေးမှာလာလှဲတယ် “တကယ်လား …. မမက သားသားကိုကလေးထင်နေတာ မဟုတ်တော့ဘူး ပဲ” ပြောရင်းနဲ့ ပက်လက်လေးဖြစ်သွားတဲ့ မမပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့မမကိုဖက်ထားလိုက်တယ် ပြီးတော့အရွေ့ရွေ့လျှောဆင်းလာရင်းနဲ့ မမ ရဲ့ ပေါင်ကားကားလေးကြားထဲကိုကျွန်တော်မျက်နှာကရောက်သွားတယ် မမစောက်ဖုတ်လေးတစ်ခုလုံးပြောင်ရှင်းနေအောင်အမွေးလေးတွေရိတ်ထားတယ်ဗျာ ပြီးတော့မမပေါင်လေးတွေကိုဖွဖွလေးပွတ်ရင်းနဲ့ မမရဲ့ ဖောင်းမို့နေတဲ့စောင်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းလွှာလေးတွေကိုလျှာနဲ့ဖွဖွလေးယက်နေမိတယ် လျက်နေရင်းနဲ့ အကွဲကြားလေးထဲကိုလျာလေးထည့်လိုက်တော့ “အ…အ….အ…..အား………………” “သားသားရယ် “ ဆိုပြီးပေါင်လေးကိုအတင်းစိကယ်လာတယ်။ ကျွန်တော်လဲပေါင်လေးကိုပြန်တွန်းရင်း မမရဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာ ကြားမှာ ရေးရေးလေးပေါ်နေတဲ့ မမရဲ့စောက်စိလေးကိုလျှာဖျားလေးနဲ့ပွတ်ဆွဲလိုက်တော့ မမတစ်ကိုယ်လုံးကောတက်လာတယ် လက်တွေလဲမွေ့ယာခင်းကိုဆုပ်ချေလို့ တိတ်ဆိတ်တဲ့ အခန်းလေးလဲမမရဲ့ အော်ငြီးသံတွေနဲ့ အသက်ဝင်လာတယ်။ “အား…………………..အရမ်းကောင်းတယ်သားသားရယ်။” “အား…..အား………….အား…………………..။” မမစောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံးလဲ အရည်လဲ့လို့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေပါ ပြည့်တင်းကြွရွလို့လာတယ် မမစောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံးကိုအားရအောင်နမ်းစုပ်ပြီးတော့ မမပေါင်ကြားလေးထဲမှာ ထိုင်ရင်း ကျွန်တော့်လီးလေးနဲ့ မမစောင်ဖုတ်လေးကိုတေ့ထားပြီးတော့ “မမ… လိုး တော့မယ်နော်” “အင်း…..ဖြေးဖြေးပဲလုပ်နော်သားသား” မမစကားသံတွေမဆုံးခင်ပဲ ကျွန်တော်လီးထိပ်လေးကို မမရဲ့ စောင်ဖုတ်လေးထဲဖိသွင်းလိုက်တော့
တင်းတင်းလေးနဲ့ နွေးအိစိုစွတ်နေတဲ့ မမစောက်ဖုတ်အသားစိုင်လေးတွေကကျွန်တော့လီး လေးကို အိအိစက်စက်လေးကြိုဆိုလို့ ဖော်မပြနိုင်တဲ့ သာယာကျေနပ်မှုတွေကိုခံစားလိုက်ရတယ် မမလက်တွေကလဲကျွန်တော့် ကိုတင်းတင်းလေးထွေးပွေ့လို့ပေါ့ “အ………………… နာတယ်သားသားရယ် …. မမ ကိုဖြေးဖြေးလေးပဲလိုးနော်” “ဟုတ်မမ” ကျွန်တော်လဲဆက်မသွင်းသေးပဲ မမစောက်ဖုတ်လေးကိုဖြေးဖြေးပဲလိုးနေမိတယ် “မမ” “ဟင်” “နာသေးလား” “သိပ်မနာတော့ဘူး” “ကောင်းလားမမ … သားသားလိုးတာ” “ဟင်း….. ကောင်လေးနော် ကိုယ်အမ ကို ဒီလိုပဲမေးရလား” “မမ ရယ် …..အဲ့ လိုသဘောမဟုတ်ပါဘူး သားသားကမမ ကိုကောင်းစေချင်လို့ပါ” ကျွန်တော့စကားဆုံးတော့ မမမျက်နှာလေးပေါ်မှာအပြုံးလေးတစ်ပွင့်ကိုမြင်လိုက်ရတယ် ပြီးတော့ မျက်လုံးလေးကိုမှိတ်ရင်းအသက်တွေကိုပြင်းပြင်းလေးရှူလိုက်ပြီးတော့ “အရမ်းကောင်းတယ် သားသားရယ်” “သားသား မမ ကိုလိုးတာ မမအရမ်းကောင်းတာပဲ” ပြောရင်းနဲ့ မမဆီခုန်လေးကိုကောပေးလာတယ် ကျွန်တော်လဲ ဖြေးဖြေးချင်းလိုးနေရာကနေ မမ စောက်ဖုတ်လေးထဲကိုအဆုံးထိဆောင့်သွင်းလိုက်တော့ “အား…………………………………….” “နာသွားလား မမ” “အင်း …..” “Sorry နော် မမ “ “ရပါတယ် မမခံနိုင်ပါတယ်” “ဒါဆိုလိုးတော့မယ်နော်မမ …ပြီးခါနီးရင်ပြောနော်” “အင်း” မမဆီကခွင့်ပြုချက်ရတော့ ကျွန်တော်လဲမမ ဂျိုင်းကြားမှာလက်လေးလျှို မမ ပုခုံးတွေကိုကိုင်ပြီး တော့ မမစောက်ဖုတ်လေးထဲကို ဆောင့်နေမိတော့တယ်။ အချက်ငါးဆယ်လောက်ဆောင့်လိုက်ပြီးချိန်မှာပဲမမဆီကအသက်ရှုသံပြင်းပြင်းလေးတွေထွက်လာတယ် တစ်ပြိုင်နက်ထဲပဲ “သားသား မမ ပြီးတော့ မယ် လုပ်လုပ်” မမ အသံလေးကိုကြားတော့ ကျွန်တော်လဲ ပိုစိတ်ပါလာမိတယ် ဆောင့်နေရင်းနဲ့ “အ….အ…..အ…..အ….အား……………..အား…………….. သားသား မမ ပြီးပြီ …… အား…………….” မမဆီကဆွဲဆွဲငင်ငင်အော်ညီးသံအဆုံးမှာ ကျွန်တော်လဲ လီတစ်ချောင်းလုံးကျင်တက်လာတယ် ဆောင့်နေရင်းနဲ့ပဲ မမ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးထဲမှာ ကျွန်တော့ လီးရေတွေကိုပန်းထုတ်ရင်းအဆုံးသတ်လိုက်မိတယ်။
အခန်းလေးကတစ်ခါပြန်လည်တိတ်ဆိတ်လို့ ကျွန်တော့ လက်မောင်းလေးပေါ်မှာအပြုံးလေးနဲ့ ကြည့်နေတဲ့ မမနဖူးလေးကိုနမ်းရင်းကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ သံယောဇဉ်တွေဟာလဲ အရောင်တွေစွန်းထင်းခဲ့ပါတော့တယ်။
အဖြူရောင်ဆိုတာစွန်းထင်းသွားခဲ့ရင် ဖျက်ပြစ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုပေမဲ့ နူးညံ့တဲ့နှလုံးသားတွေကိုအရင်းတည်ပြီး သေသပ်လှပတဲ့ဆေးရောင်တွေနဲ့ တန်ဆာဆင်ချယ်မှုန်းလိုက်တဲ့အခါနဂိုရှိရင်းစွဲအဖြူရောင်လေးရဲ့တန်ဖိုးဟာလဲ မြင့်မားလာတယ်လေ………………………………………………… ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တွေအတူနေသွားကြရင့်…….တစ်နေ့ပေါ့………. ဖေဖေမေမေ ကအတူမရှိတော့ ဖေဖေစက်ရုံကိုမနက်ဆိုကျွန်တော်သွားရတယ် အဲ့ဒီနေ့ကနေ့လည်တစ်နာရီလောက်အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန် ၊အိမ်မှာ မမလဲမရှိ၊ တံခါးရောကုလားကာရောပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့လူမရှိဘူးထင်လိုက်မိတာ. ဒါပေမဲ့ အိမ်ရှေ့တံခါးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ညီမလေးဖိနပ်နဲ့ ယောင်္ကျားလေးဖိနပ်တရံကိုတွေလိုက်ရတယ်။ စစချင်းတော့ရင်ထဲမှာထိတ်သွားမိတာပေ့ါ ။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲငယ်ရာကကြီးလာတာပဲလေ။ အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော် ဖိနပ်ကိုအသာလေးယူပြီးကျွန်တော့်အခန်းထဲမှာတိတ်တိတ်လေးဝင်နေလိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ မတော်တရော်ကောင်လေးတွေနဲ့ ညီမလေးဖြစ်နေမှာစိုးရိမ်နေမိတုံးပါပဲ။ ကျွန်တော်ကအိမ်မှာကျွန်တော့်အခန်းကိုအမြဲသော့ခတ်ထားနေကျဆိုတော့ ညီမလေးလဲမရိပ်မိလိုက်ဘူးထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ပထမပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးကိုမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အခန်းဘေးမှာညီမလေးနဲ့ မမအိပ်ခန်းလေ။ အခန်းအပေါ်ဖက်မှာ Air Con တစ်လုံးနဲ့အေးအောင်သစ်သားချောင်းလေးတွေကာထားတော့ ကုတင်ပေါ်ကတက်ကြည့်ရင်အားလုံးကိုမြင်နေရတယ်။ ကျွန်တော်အခန်းထဲရောက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာ ပဲ ညီမလေးအသံကိုအပြင်မှာကြားလိုက်ရတယ်။ “အာ…..ကိုကလဲအပြင်ဘက်ကြီးမှာကွာ” “ချစ်လေးရယ် အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ” အဲ့လိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အသံတွေကအခန်းထဲကိုရောက်လာတယ် ပြီးတော့ အခန်းတံခါးပိတ်သံနဲ့အတူ အခန်းမီးလေးလဲပိတ်ပြီး ညအိပ်မီးရောင်လေးလင်းလာတယ်။ မသင့်တော်ဘူးဆိုတာသိပေမဲ့ စိတ်တွေမရန်းလှုပ်ရှားနေမိတယ်ဗျာ။ ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်တော့တဲ့နောက်ဆုံးကုတင်ပေါ်တက်ပြီးသစ်သားချောင်းလေးကြားကကြည့်မိတော့….. “ကိုရယ်” ညီမလေးရဲ့ တိုးတိုးလေးညီးသံ……….. ကုတင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ညီမလေးဘေးမှာညီမလေးရဲ့ချစ်သူကောင်လေးကထိုင်လို့၊ ကောင်လေးလက်တွေကညီမလေးရဲ့ခါးသိမ်သိမ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးကိုပွတ်သပ်လို့၊ နှတ်ခမ်းလေးနှစ်စုံကတဖြေးဖြေးပူးကပ်သွားတယ်။ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ချစ်သူစုံတွဲနှစ်ဦးတိတ်ဆိတ်တဲ့အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာပွတ်သပ်ကြည်စယ်နေတာကိုတွေတော့ကျွန်တော်လဲ ကြည့်နေရင်းနဲ့ဇောချွေးတွေတစ်ကိုယ်လုံးရွဲလို့နေတယ်။ ပွတ်သပ်နေတဲ့ကောင်းလေးရဲ့လက်တွေက ညီမလေးရဲ့ဂျင်းစကတ်လေးအောက်ကိုရောင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ညီမလေးတစ်ယောက်သူပေါင်တွေကိုအတင်းစိကပ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။
နမ်းနေရင်းနဲ့ နှစ်ယောက်အတူမတ်တပ်ရပ်ရင်း ညီမလေးရဲ့တီရှပ်အဖြူရောင်လေးကိုချွတ်လိုက်တော့ ဖွေးနေတဲ့ နို့နှစ်ရောင်အသားစိုင်တွေပေါ်က အနက်ရောင်ဘော်လီတင်းတင်းလေးနဲ့ ဘော်လီလေးအတွင်းကနေမို့ဖောင်းနေတဲ့ ရင်းသားပြည့်ပြည့်လေးတွေကတင်းရင်းအိစက်လို့ ………………….. ညီမလေးကလဲချစ်သူကောင်လေးရဲ့ ရှပ်အကျီကြယ်သီးတွေကိုတစ်လုံးချင်းဖြုတ်ပေးနေတယ်။ ပြီးတော့ ကောင်းလေးရဲ့ခါးပတ်တွေကိုဖြုတ်ပြီးဘောင်းဘီတစ်ထည်လုံးကိုချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ….. “ကိုရယ် …..ချစ်လေးကြောက်တယ်ကွာ” “ချစ်လေးရယ် မကြာခင်ကိုတို့ခွဲရတော့မှာ လေ ။ ကိုဖြေးဖြေးလေးချစ်လေးမနာအောင်လုပ်ပါ့မယ်နော်” “အင်းပါ” ဆိုတဲ့စကားသံတိုးတိုး လေးနဲ့အတူ နှစ်ယောက်လုံးကုတင်ပေါ်ကိုပွေ့ဖက်လဲကျသွားတယ်။ “အရမ်းချစ်တယ်ကိုရယ်” “ကိုလဲအရမ်းချစ်တာပေါ့ချစ်လေးရယ်” စကားသံတိုးတိုး လေးတွေးအဆုံးမှာ အနမ်းချိုချိုတွေနဲ့အတူချစ်သူနှစ်ဦးအတူပွေ့ဖက်ပွတ်သပ်နေကြတယ်။ ညီမလေးရဲ့ဘော်လီတင်းတင်းလေးတွေကိုချွတ်ချလိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဖြူဝင်းနေတဲ့ နို့အုံတင်းတင်းလေးတွေက အထိမ်းအကွတ်မဲ့ ခပ်ရိုင်းရိုင်း လေး အိဆင်းသွားတယ်။ ဖြူဖွေးနေတဲ့ နို့အုံလေးပေါ်နှာ ပန်းရောင်ခပ်ပြေပြေနို့သီးလေးတစ်စုံက ချစ်သူကောင်လေးရဲ့နှတ်ခမ်းတစ်စုံကိုကြိုလင့်နေသလိုလို………..။ ညီမလေးဆိုတဲ့အသိတွေတခဏ ဆိတ်သုန်းသွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်စိတ်အစဉ်ကလဲ လှပပြည့်တင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလှလှလေးကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ကြည့်နေမိတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ညီမလေးရဲ့ နို့လေးတွေကိုဖွဖွလေးပွတ်နယ်နေရင်းနဲ့ တင်းနေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုမထင်မှတ်ပဲစုပ်ယူလိုက်တဲ့ခဏ………….. “အား ………….ကိုရယ်” “အား…..အား……………အား…………..အရမ်းကောင်းတာပဲကွာ” ညီမလေးရဲ့လက်တွေက အိပ်ယာခင်းလေးကိုတင်းတင်းဆုပ်လို့ ပြည့်တင်းနေတဲ့ရင်းသားတွေကိုကော့ကော့ပေးနေတယ်။ နို့တွေကိုစို့ပေးနေတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးက တစ်ဖြေးဖြေးအောက်ကိုလျောဆင်းရင်းနဲ့ ညီမလေးရဲ့ စကတ်ဇစ်လေးကိုဖြုတ်လိုက်တော့ ဟသွားတဲ့စကတ်လေးအောက်မှာ ဖောင်းမို့နေတဲ့ဆီးခုန်းလေးပေါ်လာတယ် စကတ်လေးကိုဆက်ချွတ်နေတော့ ညီမလေးတစ်ယောက်အပြုံးလေးနဲ့ချစ်သူကောင်လေးကိုကြည့်ရင်းဖင်လေးကော့ပေးရှာတယ်။ စကတ်လေးကျွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာညီမလေးရဲ့အလှကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်ချောင်းတွေခြောက်လာတဲ့အထိခံစား လိုက်ရတယ်ဗျာ။ ဖွေးနုနေတဲ့ ပေါင်သားပြည့်ပြည့်လေးတွေရဲ့အဆုံးမှာ အနက်ရောင်ပိးု သားဘောင်းဘီလေးက ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် တိတိပပ နဲ့အသားစိုင်လေးပေါ်မှာကပ်လို့ညီမလေးရဲ့ဖောင်းမို့နေတဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကိုဖုးံ ကွယ်ထားတယ်။ ဖောင်းမို့နိမ့်ဆင်းသွားတဲ့ဆီးခုန်လေးအဆံုး မှာပြည့်ပြည့်လေးနဲ့မို့နေတဲ့ စောက်ဖုတ်သားလေးတွေက ဘောင်းဘီလေးထဲကနေရုန်းကြွလို့ လှပနေတယ်။ ဖွေးနုနေတဲ့ညီမလေးရဲ့ပေါင်သားလေးတွေကိုနမ်းနေတဲ့ကောင်လေးနေရာမှာကျွန်တော်တောင်ဖြစ်ချင်စိတ်တွေဖြစ်မိတ ယ်ဗျာ ပေါင်သားလေးတွေကိုနမ်းနေရင်းနဲ့ ညီမလေးရဲ့စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကိုဘောင်းဘီပေါ်ကနေလျှာနဲ့လျက်နေတယ်။
“အ….အ….အ….အ….ကိုရယ်” ညီမလေးရဲ့လက်တွေက ကောင်လေးရဲ့ဆံပင်တွေကိုထိုးဖွလို့ ဖင်လေးကိုကော့ရင်းနဲ့တိုးတိုးလေးညီနေလေရဲ့ .။ ညီမလေးရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တောင်အသက်ရှုရပ်သွားမတတ်ဖြစ်ရတယ်။ ဆီးခုံဖောင်းဖောင်းလေးတစ်လျောက်လျှောဆင်းသွားတဲ့အဆုံးမှာ မို့မို့လေးဖောင်းနေတဲ့စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတစ်စုံကတင်းတင်းလေးစိလို့ ပန်းရောင်ကကွဲကြောင်းလေးတစ်လျောက်ချစ်သူရဲ့လျှာဖျားလေးတိုး ဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်ပဲ………… “အား……………………………………………………..” ဆွဲဆွဲငင်ငင်ငြီးတွားသံလေးနဲ့ မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားတဲ့ညီမလေးရဲ့ဖြူဖြူစင်စင်မျက်နှာလေးကရမက်တွေဝေလို့… . “ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ်” ပေါင်လေးကိုလက်နဲ့ကားရင်းညီမလေးရဲ့အစိသေးသေးလေးကိုစုတ်ပေးနေတဲ့ကောင်လေးရဲ့လက်တွေကိုတင်းတင်းေ လးဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ ပါးစပ်နဲ့အားရအောင်စုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ညီမလေးတစ်ယောက် ချစ်သူကိုကုတင်ပေါ်တွန်းလှဲရင်းချစ်သူရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်ပေးနေတယ်။ ဘောင်းဘီကျွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာထိုးထွက်လာတဲ့ချစ်သူရဲ့လီးကိုတင်းတင်းလေးဆုပ်ကိုင်ရင်း စိုအိနုထွေးနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးနဲ့ လီးခေါင်းလေးကိုစုပ်ယူနေတယ်။ လီးခေါင်းလေးရဲ့အဆုံး ဒစ်ကြားလေးထဲကိုလျက်နေတဲ့ ညီမလေးရဲ့လျှာနီနီလေးတစ်လျောက်မှာလဲ အချစ်ရည်တွေတွဲခိုကပ်ညိလို့…ပါးလေးချိုင့်သွားတဲ့အထိ စုပ်ယူနေတဲ့ ပါးလေးပေါ်မှာလဲ သွေးကြောနီနီလေးတွေကအလှဆုံးနတ်သမီးလေးတစ်ပါးရဲ့ခြုံလွှာတစ်ထည်လို နီထွေးနေတယ်။ ခံစားချက်ရမက်တွေအထွဋ်အထိပ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကုတင်ပေါ်မှာလှလှပပလေးလှဲနေတဲ့ညီမလေးရဲ့ပေါင်ကြားလေးထဲမှာသူ့ချစ်သူကောင်လေးကထိုင်လို့ ထောင်မတ်နေတဲ့လီးတံလေးကို ညီမလေးရဲ့စောင်ဖုတ်လှလှလေးရဲ့အ၀မှာတေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ……………….။ “ကို ဖြေးဖြေးနော်” “ချစ်လေးရယ်….စိတ်ချနော် ကို့ချစ်လေးကိုနာအောင်လုပ်ရပ်ပါ့မလား” “ပြောတာပဲ…………….ကို…………..ချစ်လေးတို့ဘယ်တော့မှမခွဲဘူးနော်” “ဟုတ်” အချစ်ရည်တွေနဲ့ စိုအိနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ဝလေးတစ်လျောက် လီးဒစ်လေးမြုတ်သွားတော့ ညီမလေးရဲ့ဂျိုင်းကြားအောင်ကနေပုခုံးတွေကိုဆုပ်ကိုင်ရင်း “ကောင်းရဲ့လားချစ်လေး” “ကောင်းတယ်ကိုရယ်……………အရမ်းကောင်းတယ်” ပြောနေရင်းနဲ့ညီမလေးရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုဖိကပ်ရင်း ခါးလေးကိုကော့ပြီးတော့လီးတစ်ခုလုးံ မြုတ်အောင့်ဆောင့်ပြီးလို့နေတယ်။ “အင့်…………….” “နာလို့လားချစ်လေး” “အောင့်သွားတာပဲကိုရယ်” “sorry နော် ကိုကြောင့်ချစ်လေးအောင့်သွားတာ” “ရပါတယ်”………………………………. “ကို့ ကိုအရမ်းချစ်တယ်”
ချိုမြိန်တဲ့စကားသံတွေနဲ့ ဆောင့်လိုးနေတဲ့အသံလေးတွေကအခန်းလေးထဲမှာပျံ့လွင့်လို့………….. လှဲနေရင်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လိုက်ရင်း ညီမလေးရဲ့နို့ဖြူဖြူလေးတွေကိုစို့လို့ ညီမလေးလဲ ချစ်သူပေါင်ပေါ်မှာရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ကော့ရင်းလိုးနေတယ်။ ခဏကြာတော့ချစ်သူကိုတွန်းလှဲရင်းချစ်သူအပေါ်မှာဆောင့်ဆောင့်ထိုင်ပြီးလိုးနေတဲ့ညီမလေးရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ စည်းချက်ညီညီခါရမ်းနေတဲ့နို့ဖောင်းဖောင်းလေးတွေက ညအိပ်မီးမှောင်မှောင်လေးအောက်မှာ အချိုးကျလှပနေတဲ့ပန်းပုရုပ်ထုလေးအလား ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ လောကနိဗာန်ကိုနှစ်ယောက်အတူခံစားနေကြတယ်။ ဆောင့်ချက်တွေပြင်းလာတာနဲ့အမျှ ………… “အ…..အ….အ… ကို..ချစ်လေးပြီးတော့မယ်” ညီမလေးရဲ့စကားသံအဆုံးမှာ ကုတင်ပေါ်လဲကျသွားတဲ့ ညီမလေးပေါ်ကနေ တက်ဆောင့်နေတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးရဲ့ဆောင့်ချက်တွေကမြန်ဆန်လို့လာတယ်။ ဆောင့်လိုးနေရင်းနဲ့ပဲ……………………….. “အ…..အ……အ……အ……အ…..အား…..ကိုပြီးချင်ပြီ…… ကိုရော” “ပြီးတော့မယ်ချစ်လေး……အ…..အ….အ….အ….အ” “အား……အာ……အာ……. ကိုချစ်လေးပြီးပြီ” ……………….အား…………………… ဆွဲဆွဲငင်ငင် အော်ညီသံအဆုံးမှာ ညီမလေးနဲ့သူချစ်သူနှစ်ယောက်လုံး တင်းတင်းလေးဖက်လို့ အနမ်းတွေပေးရင်းငြိမ်သက်သွားတယ်။ “ကောင်းတယ်ကိုရယ်” နှစ်ယောက်အတူဖက်ရင်း ပြုံးနေတဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးကိုတွေ့နေရပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာပေ့ါ ပူလောင်ခြောက်သွေ့လို့…………………………… “ကို ရေသွားချိုးရအောင်လေ တော်ကြာမမပြန်လာတော့မယ်ထင်တယ် တီလေးနဲ့နှစ်ယောက်အပြင်သွားတာ” စကားသံဆုံးတော့နှစ်ယောက်အတူဖက်ရင်းအခန်းမပြင်ကိုထွက်သွားကြတယ်။ ကျွန်တော်သာမောဟိုက်နွမ်းလျှလို့အခန်းထဲမှာတိတ်တိတ်လေးလဲလျှောင်းနေမိတယ်။
တည်ငြိမ်မှုကင်းမဲ့နေတဲ့ ရင်ခုန်သံတွေနဲ့ အိမ်ထဲမှာတစ်ယောက်ထဲကျန်နေခဲ့တယ်။ ညီမလေးလဲသူ့ချစ်သူနဲ့ အပြင်ထွက်သွားပြီလေ။ မျက်လုံးတွေမှိတ်လိုက်တိုင်း ကုတင်ပေါ်မှာရမက်သွေးတွေနဲ့နေတဲ့လှပနေတဲ့ညီမလေးရဲ့ အလှတရားကိုပဲပြန်မြင်ယောင်နေမိတယ်………………..။ ဒီလိုနဲ့ဘယ်လောက်ကြာကြာအိပ်ပျော်သွားမိလဲတောင်မသိတော့ပါဘူး။နိုးလာတဲ့အချိန်မှာအခန်းအပြင်က မမ နဲ့ တီတီလေးအသံကိုကြားရတယ်။ ကျွန်တော်အခန်းအပြင်ထွက်သွားတော့ မမက………. “ဘယ်အချိန်ကပြန်ရောက်နေတာလဲ သားသား” “မမကမရောက်သေးဘူးထင်နေတာ” “ဟုတ်နဲ့နဲ့တော့ကြာပြီ မမ….. အရမ်းအိပ်ချင်လို့အိပ်ပျော်သွားတာ” “အင်း အင်း ဒါဆိုလန်းသွားအောင်ရေချိုးလိုက်တော့” “ဟုတ် မမ………………တီလေးရောဘာတွေဝယ်လာတာလဲ” “အိမ်မှာ လိုတဲ့ဟာတွေအစုံပါပဲ” “သားအန်ကယ်လဲ နောက်တစ်ပတ်ကိုခရီးသွားရမယ်ဆိုလို့ လေ သူ့အတွက်လိုတာတွေကောပေါ့”
“အော် ဟုတ…………်ဒါဆိုသားရေသွားချိုးတော့မယ်နော် တီလေး” “OK သားသား” ကျွန်တော်လဲ သဘက်နဲ့ပတ်ပြီရေချိုးခန်းဖက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီတော့မချွတ်ခဲ့ဘူးဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စောစောကအရှိန်လေးနဲ့ မမ နဲ့တီလေးကိုတွေလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာကျွန်တော်ရင်တွေပြန်ပူလာပြီး လီးကလဲအရမ်းကိုပြန်တောင်လာတယ်လေ။ အဲ့ဒီနေ့ကမမ၀တ်ထားတာအသားကပ်ဘောင်းဘီ အနက်ရောင်လေးနဲ့ တီရှပ်အနီရောင်လေးဗျ ပြည့်တင်းနေတဲ့ မမပေါင်တံလေးတွေကိုအတိအကျ ဖေါ်ပြထားတဲ့ အသားကပ်ဘောင်းဘီလေးနဲ့ တင်ပါးတစ်ဝက်ကျော်ကျော်ပဲဖုံးပေးနိုင်တဲ့ တီရှပ်လေးရဲ့အောက်မှာ မမရဲ့ မို့တင်းနေတဲ့ ဖင်သားလံုး လုံးလေးကိုစီးနှောင်ထားတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ကြိုးရာလေးကထင်းထင်းလေးပေါ်နေတယ်လေ။ တီတီလေးကိုကြည့်တော့လဲ ပိုလို့တောင်စိတ်လှုပ်ရှားမိသေးတယ်ဗျာ။ တီလေးကရှမ်း တရုတ်မလေးပေါ့၊ အသက်ကတော့ ၃၀ ကျော်လောက်ရှိပြီလေ။ မပိန်မ၀ပဲ့ ပြည့်တင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင်လေးပေါ့။ တီလေးက ထမိန်စကတ်ပဲအမြဲဝတ်တယ်လေ။ ခြေလှမ်းလိုက်ရင်ပေါင်တစ်ဝက်လောက်အထိမြင်ရတဲ့ စကတ်မျိုးပေါ့။ ဆိုဖာမှာထိုင်နေတဲ့ တီတီလေးက အကျီ ရယ်ဒီမိတ်အဖြူလေးနဲ့ စကတ်ခရမ်းရောင်လေးနဲ့ပေါ့ ပြည့်ဖြိုးဆူတင်းနေတဲ့ ရင်သားလံုး လုံးလေးတွေကိုစီးနှောင်ထားတဲ့ ဘော်လီအနက်ရောင်လေးကလဲ အကျီအဖြူလေးအောက်ထင်းထင်းလေးပေါ်နေတယ်။ ဘော်လီအနက်လေးအပေါ်မှာ မို့မောက်လျှံတက်နေတက်တီလေးရဲ့ရင်သားနှစ်မွှာကလဲဖြူဝင်းအိစက်လို့…… ထိုင်နေတဲ့အချိန် မို့မောက်တက်နေတဲ့ ဆီးခုန်လေးနဲ့ ပေါင်သားပြည့်ပြည့်လေးတွေကလဲရင်ခုန်စရာအတိနဲ့လေ။ ကျွန်တော်ရေချိုးခန်းရှေ့ရောက်တော့ အိမ်ရှေ့ကတီလေးပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့အသံနဲ့တံခါးပိတ်သံကြားတော့ကျွန်တော်လဲအိမ်ရှေ့ကိုပြန်ထွက်လာခဲ့တယ် “သားသားရေချိုးမယ်ဆိုသွားချိူးလေ” “ဟုတ်မမ …. မမကိုကျွန်တော်ပြောစရာရှိလို့” “အင်းပြောလေ… နေအံုး မမ အ၀တ်လဲလိုက်အုံးမယ်နော်” မမ အခန်းထဲဝင်သွားတော့ကျွန်တော်လဲလိုက်ဝင်သွားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ကုတင်စောင်းနားလေးမှာထိုင်ရင်းစောစောကညီမလေးနဲ့သူချစ်သူနှစ်ယောက်အတူ လိုးနေကြတာကိုပဲမျက်စိထဲမှာပြန်မြင်ယောင်နေမိတယ်ဗျာ။ “ပြောလေသားသား ဘာပြောမလို့လဲ” “အင်း မမ ဘယ်အချိန်ကအပြင်သွားတာလဲ” “မနက်ထဲကပဲ လေ တီလေးခေါ်လို့။ ဘာဖြစ်လို့လဲ” “အော်….. ကျွန်တော်တစ်နာရီလောက်ကပြန်ရောက်တာ” “ပြန်ရောက်တော့ မီးမီးနဲ့ သူကောင်လေးကအိမ်ထဲမှာ” “ဟုတ်လား မနက်ကတော့ပြောတယ် သူချိန်းထားတယ်ဆိုတာကို” “အော် ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဒီအခန်းထဲမှာ ဖြစ်ကြတယ်” “အိုဘုရားရေ ….. တကယ်လား” “အင်းဟုတ်တယ် ကျွန်တော်ပြန်ရောက်တာကိုမသိကြဘူး …ကျွန်တော်လဲအခန်းထဲကိုဝင်နေတာ” “အင်းသူလဲအရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့…..ဒါပေမဲ့ မမစိုးရိမ်တာကတစ်ခုခုဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်တာ..အိမ်မှာက မမ ကအကြီးလေ တစ်ခုခုဆို မမ တာဝန်ရှိတယ်လေ” မမကစကားပြောရင်းနဲ့သူတီရှပ်အနီရောင်လေးကိုချွတ်လိုက်တယ်။
မမရဲ့အလှကိုတွေလိုက်ရတော့စောစောကရှိနေတဲ့အရှိန်ကလီးကချက်ခြင်းကိုတောင်လာတော့တာပဲဗျာ ကျွန်တော်လဲမပြောမဆိုနဲ့မမကိုဖက်လိုက်တော့ “အို ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ သားသားရယ်” “စောစောကမီးမီးနဲ့သူကောင်လေးလိုးတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးကြီးပဲ” “သားသားရယ်………ညီမလေးကသားသားညီမလေးအရင်းနော် မမကမှနှစ်ဝမ်းလောက်ကွဲသေးတာ” “သားသားသိပါတယ်မမရယ်” ပြောရင်းနဲ့မမနှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းတော့ မမ တစ်ယောက်ကျွန်တော့်ကိုတင်းတင်းလေးဖက်လာတယ် နှစ်ယောက်အတူနမ်းရင်းကုတင်ပေါ်ကိုလှဲချလိုက်တော့ ရင်တွေခုန်လိုက်တာတလှပ်လှပ်ပဲဗျာ မမကိုနမ်းနေရင်းနဲ့မမဘော်လီလေးကိုချွတ်လိုက်တော့ပြည့်တင်းနေတဲ့နို့အိအိလေးနှစ်လုံးကအတားအဆီးမဲ့အိကျလာ တယ်။ မမနှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းနေရင်းနဲ့ မမရဲ့နို့အိအိထွားထွားလေးကိုဆုပ်နယ်ပေးတဲ့အရသာကဘာနဲ့မှမတူဘူးဗျာ။ နို့တစ်ဖက်ကိုဆုပ်နယ်ရင်းနဲ့ နောက်ထက်နို့တစ်ဖက်ကနို့သီးခေါင်းလေးကိုငုံလိုက်တော့….. “အ….အ…..အ….သားသားရယ်……………..” မမရဲ့ငြီးသံတိုးတိုး လေးကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေကိုပိုပြီးလှုပ်ရှားလာစေတယ်။ နို့တွေကိုအားရအောင်စို့ပြီးတော့မမပေါင်ကြားလေးထဲကနေထိုင်ပြီးမမ ရဲ့အသားကပ်ဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်လိုက်တော့ ဖြူဝင်းအိစက်နေတဲ့ပေါင်သားအိအိလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့အတွင်းခံဘောင်ဘီအနက်ရောင်လေးနဲ့ ….လှလိုက်တာဗျာ မမရဲ့အလှကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ မမပေါင်လေးတွေကိုပွတ်ပေးတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မမရဲ့ အတွင်းခံလေးမှာ အချစ်ရည်လေးတွေရဲ့ နူးအိလာတယ်။ ပေါင်လေးတွေကိုပွတ်နေရင်းနဲ့ မမရဲ့အတွင်းခံလေးကိုချွတ်လိုက်တော့ မို့တင်းနေတဲ့ဆီးခုန်လေးရဲ့အဆုံးမှာအမွေးရိတ်ထားတဲ့ပြောင်ချောနေတဲ့ မမရဲ့စောက်ဖုတ်နှစ်ခမ်းသားလေးနှစ်ခုကတင်းတင်းလေးစိကပ်လို့….. ကျွန်တော်လဲမမပေါင်လေးကိုလက်နဲ့ဖြဲပြီးမမစောက်ဖုတ်အမြှောင်းလေးကိုယက်လိုက်တော့ “အား…………သားသားရယ်ကောင်းလိုက်တာကွာ” မမစောက်ဖုတ်လေးကိုဟလိုက်တော့ရနေတဲ့ အကွဲကြောင်းလေးအလယ်မှာမမရဲ့စောက်စေ့နီနီလေးကတင်းတင်းလေး စောက်ဖုတ်ထဲကနေတိုးထွက်လာတဲ့မမရဲ့အချစ်ရည်လေးတွေကစောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံးကိုရွှဲလို့ပေါ့ မမရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကိုအားရအောင်လျှက်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်လီးထိပ်လေးကိုမမရဲ့စောက်ဖုတ်ဝလေးကိုတေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ….. “သားသားဖြေးဖြေးပဲထည့်နော် “ဟုတ်ကဲ့ပါ” တိုးတိုးလေးအဖြေပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာမမရဲ့စောက်ဖုတ်လေးထဲကိုကျွန်တော့်ရဲ့လီးထိပ်လေးမြုတ်တဲ့အထိဖြည်းဖြည်းလေးထည့်လိုက်တယ် မမရဲ့ရဲနေတဲ့စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးကကျွန်တော်လီး ကိုတင်းတင်းလေးဖျစ်ညှစ်ထားတယ်လေ။ “ကောင်းလိုက်တာမမရယ် မမစောက်ဖုတ်လေးကနွေးနေတာပဲနော်” ကျွန်တော့်စကားဆုံးတော့မမတစ်ယောက်အပြုံးလေးနဲ့…. “သူဒါပဲ …..မမကိုဆိုအမြဲအနိုင်ကျင့်တယ်” “အဲ့ဒါအနိုင်ကျင့်တာမှမဟုတ်တာမမရယ် ….မမကိုကောင်းစေချင်တာ” စကားဆံုး တော့မမရဲ့စောက်ဖုတ်လေးထဲကိုကျွန်တော့လီးလေးထပ်ထိးု ထည့်လိုက်တယ်
စိုစွတ်နွေးအိနေတဲ့မမစောင်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးရဲ့အထ်ိအတွေကကျွန်တော်လီးကနေတစ်ဆင့်တစ်ကိုယ်လုံးကိုခံစား လိုက်ရတယ်ဗျာ မမကိုတင်းတင်းလေးဖက်ရင်းနဲ့ စောက်ဖုတ်လေးထဲကိုအချက်နှစ်ဆယ်လောက်ဆောင့်လိုက်တော့ “အ…အ…အ….အ…အအအ ကောင်းလိုက်တာ သားသားရယ် မမအရမ်းကောင်းနေပြီ” “အင်း သားသားလဲအရမ်းကောင်းတယ်မမရယ်” မမလဲချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်းဆောင့်ပေးနေမိတယ်။ စောစောကညီမလေးတို့အတွဲကိုကြည့်တုံးကတက်နေတဲ့ feeling နဲ့ ကျွန်တော်လဲအရမ်းကိုကောင်းလာတယ်လေ “မမ သားသားအရမ်းကောင်းနေပြီ” “မမရော” “အင်း ကောင်းတယ် သားသားရယ် မြန်မြန်ဆောင့်ပေးနော် မမပြီးချင်ပြီ” မမရဲ့စကားဆုံးတော့ကျွန်တော်လဲမမကိုတင်းတင်းလေးဖက်ရင်းဆက်တိုက်ဆောင့်နေမိတယ် မမတစ်ယောက်လဲကျွန်တော့ကိုပြန်ဖက်ရင်းဆီခုန်မို့မို့လေးကိုကော့ပေးနေတယ်လေ။ နှစ်ယောက်အတူအပေးအယူမျှမျှလိုးနေကြရင်းနဲ့ “အား………………သားသားမမပြီးပြီ” “ဟုတ် သားသားလဲပြီးတော့မယ် မမ” “အ.အ…အ…အ…အ…အ..အား” သားသားပြီးပြီးမမရယ် ကျွန်တော့ကိုဖက်ထားတဲ့ မမရဲ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့နှဖူးလေးကိုတုံးရင်း “သားသားအရမ်းဆိုးတယ်နော် …ခဏခဏပဲ” ကျွန်တော်လဲမမရဲ့ ပန်းသွေးရောင်မျက်နှာဖောင်းဖောင်းလေးကိုပြုံးကြည့်ရင်း သံယောဇဉ်တွေတိုးတိုးရစ်ပတ်လာခဲ့မိတယ်လေ………………………………..။
တိမ်ပြာပြာတွေနဲ့ရာသီဥတုသာယာတဲ့တစ်နေ့……………………………………………………….. ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းတစ်လျှောက် ကားလေးတစ်စီးတစ်ရိပ်ရိပ်ပြေးလို့….ကားပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ရယ်၊ ကျွန်တော့်အန်ကယ်လေးရယ်၊ အန်ကယ်လေးမိန်း မ ကျွန်တော့တီတီလေးရယ် သံုး ယောက်ပေါ့။ “သားသား အန်ကယ်လေးသွားရင်အိမ်မှာသွားအိပ်ပေးအံုး နော်၊မင်းတီတီလေးနဲ့ အိမ်ကကောင်မလေးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲမို့လို့” “ဟုတ်ကဲ့လေးလေးငယ် ….စိတ်ချသွားပါ” “အေးအေး” စကားတွေပြောနေရင်းနဲ့တစ်ဖြေးဖြေးကားလေးက ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကြီးကိုရောက်လာတယ်။ လေဆိပ်ကိုရောက်တော့ လေယာဉ်က check in ၀င်ဖို့ခေါ်နေပြီ။ “သွယ်သွယ်…ကိုသွားမယ်နော် .ဂရုစိုက်နော် . လိုတာရှိရင်သားသားကိုပြောနော်” “အင်းပါ ကိုလဲဂရုစိုက်သွားနော်” “သားသားလဲ မင်းတီတီလေးဆီသွားအိပ်ပေးနော်” “ဟုတ်ကဲ့ပါ” စကားဆံုး တော့ လေးလေးငယ် တစ်ယောက်လောလော.လောလောနဲ့ဝင်သွားလေရဲ့။
Check in ၀င်ပြီးအပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့လေးလေးကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ တီတီလေးနှစ်ယောက်ကားဆီကိုပြန်လာတဲ့အချိန် လေဆိပ်တံခါးကထွက်တော့ ရှေ့ကလျောက်သွားတဲ့တီတီလေးအလှကိုကျွန်တော်သတိထားမိသွားတယ်။ တီလေးကမေမေ့မောင်အငယ်ဆုံးရဲ့မိန်းမလေ။ အသက်ကတော့ ၃၄ လောက်ရှိပြီပေါ့။ ရှမ်းနဲ့တရုတ်စပ်တဲ့တီလေးကပြည့်ပြည့်တင်းတင်းလေးနဲ့ ချောတယ်ဆိုတာထက်ချစ်စရာကောင်းတယ်။ ရယ်ဒီမိတ် အကျီခရမ်းရောင်လေးအောက်မှာ ဘော်လီအနက်လေးနဲ့ ထမိန်စကတ်အနက်ရောင်လေးကိုတင်းတင်းလေးဝတ်ထားတဲ့ တီတီလေးအလှကပြည့်ဖြိုးပေါ်လွင်လို့လေ။ ပြည့်ဖြိုးတဲ့ပေါင်တံတင်းတင်းလေးတွေကိုစီးနှောင်ထားတဲ့တီလေးရဲ့ထမိန်စကတ်တင်းတင်းလေးရဲ့ပေါ်မှာတင်သားပြည့်ြ ပည့်လေးတွေကို ဆွဲငင်မချီထားတဲ့ တီလေးရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကြိုးရာလေးကထင်းထင်းလေးပေါ်လို့ပေါ့။ ကားနားကိုရောင်တော့ မထင်မှတ်ပဲပြုတ်ကျသွားတဲ့သော့ကိုကုန်းကောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထမိန်စကတ်အနက်လေးရဲ့အထက်နားလေးက တီလေးရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီ ပန်းနုရောင်လေးကိုတွေလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်ရင်တစ်ခုလုံးပြောင်းဆန်အောင်လှုပ်ရှားသွားတယ်။ စိတ်ကိုအတင်းစုစီးပြီးကားမောင်းပြန်လာတော့ ….. “သားသားမနက်စာစားရအောင်လေ” “ဟုတ်ကျွန်တော်မနက်ကစားလာခဲ့တယ် တီလေး” “အော် အင်းအင်း ဒါဆိုအိမ်ရောက်မှပဲစားတော့မယ်” “ဒီနေ့သားသားစက်ရုံမသွားတော့ရင်အိမ်မှာပဲထမင်းလာစားလေ….သားမမတော့ဆိုင်သွားပြီထင်တယ်….မီးမီးရော” “သူဒီနေ့အတန်းရှိမယ်ထင်တယ်တီလေး” “အင်းအင်း ဒါဆိုသားသားလာခဲ့လေ” “ဟုတ်” အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ကားကိုပါကင်ထိုးပြီးဓတ်လှေကားစောင့်ရင်းနောက်ကနေတီလေးရဲ့အလှကိုကြည့်နေမိတယ်။ တီလေးရဲ့အလှကိုသတိလက်လွတ်ငေးကြည့်နေရင်းအပေါ်ကိုမော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဓတ်လှေကားကတံခါးစတီးပြားကနေကျွန်တော်ကိုပြန်ကြည့်နေတဲ့ တီလေးနဲ့မျက်လုံးချင်းဆုံသွားတဲ့ခဏ … အိုး…..မျက်နှာပူလိုက်တာ ကိုယ်ကိုကိုယ်လဲရှက်သွားမိတယ်လေ ဒါကဦးလေးရဲ့မိန်းမဆိုတဲ့အသိနဲ့ကျွန်တော့ခေါင်းတွေပူထူသွားမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမှတ်မထင်ပဲ တီလေးဆီကအပြုံးတစ်ပွင့်လင်းလက်လာတယ် …… ကျွန်တော်လဲမျက်နှာပူပူနဲ့ပဲပြန်ပြုံးပြမိလိုက်တယ်။ ရင်ထဲမှာတော့အတွေးတွေယောက်ယက်ခတ်လို့ပေါ့။ ကျွန်တော့အခန်းကိုပြန်ရောက်တော့အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းမှာခဏထိုင်ရင်း လှုပ်ရှားနေတဲ့ စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားနေတုံး…. “ကိုကိုး….မီး
“အော်အေးအေး ပိုက်ဆံရောရှိသေးလား” “ဟုတ်ရှိတယ် မမပေးထားတယ်လေ” “အင်းအင်း ဒါဆိုကောင်းကောင်းသွားနော်” “ဟုတ်” စကားသံနဲ့အတူ ကျွန်တော်ရှေ့ကနေဖြတ်သွားတဲ့ ညီမလေးရဲ့အနောက်ကိုအမှတ်မထင်ကြည့်လိုက်မိတောသေးသွယ်တဲ့ခါးသိမ်သိမ်လေးနဲ့တင်းရင်းပြည့်ဖြိုးတဲ့တင်သားေ
လးက ယဉ်ယဉ်လေးလှုပ်ရှားသွားတာကိုသတိထားလိုက်မိတယ် :::::အော် မီးမီးလဲအရွယ်ရောက်လာပြီပဲ:::::: စိတ်ထဲမှာတွေးရင်းရေတစ်ခွက်ကိုကုန်အောင်သောက်ချလိုက်တော့လှုပ်ရှားနေတဲ့ရင်ကအတန်ငယ်တည်ငြိမ်သွားသ လိုခံစားလိုက်မိတယ်။ ရုတ်တရက်ဖုန်းသံကြားတော့မှ ဆိုဖာပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့ကျွန်တော်လန့်နိုးလာမိတယ်။နာရီကိုကြည့်လိုက်နေ့လယ် ၁၁နာရီခွဲ။ ဖုန်းမှာ တီလေး ဆိုတဲ့ နာမည်ကိုတွေ့လိုက်တော့ဘာရယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာနွေးကနဲ့ဖြစ်သွားမိတယ်။ “ဟယ်လို…..” “သားသားထမင်းစားဖို့လာခဲ့တော့လေ” “ဟုတ်တီလေး အိပ်ပျော်သွားလို့ရေချိုးပြီးရင်လာခဲ့မယ်နော်” “အော် ok သားသား တီလေးစောင့်နေမယ်” ဖုန်းချပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲရေချိုး၊ ပုဆိုးနဲ့တီရှပ်တစ်ထည်ဝတ်ပြီး အောက်ထပ်ကတီလေးအခန်းကိုဆင်းသွားတော့…… တံခါးရှေ့ကလူခေါ်ဘဲလ် လေးကိုနှိပ်လိုက်တော့တီလေး တံခါးလာဖွင့်ပေးတယ်။ တီလေးကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ် ရင်ခုန်ရပြန်ပါပြီ။ အိမ်နေရင်းဂါဝန် ပန်းရောင်လေးနဲ့ ဆံပင်တွေကိုစုစီးထားပြီး ပြင်ဆင်မှုကင်းတဲ့မျက်နှာပြည့်ပြည့်လေးနဲ့ အရမ်းကိုနုနယ်လှပနေလိုက်တာ။ ထမင်းစားပွဲကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ ငရံ့အူ နဲ့ ချည်ပေါင်ဟင်းအရည်သောက် ကတော်တော်ကိုခံတွင်းတွေ့သွားတယ်ဗျာ။ ထမင်းစားပြီးတော့အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းမှာထိုင်ရင်းရုပ်ရှင်ကြည့်နေတုံးဘေးကနေတီလေးအလှကိုခိုးခိုးကြည့်နေမိတယ်။ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ဧည့်ခန်းထဲမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့ တီတီလေးနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲဆိုတဲ့အသိက တစ်ချက်တစ်ချက်ကျွန်တော့်ကိုစိတ်ရိုင်းတွေဝင်လာစေတယ်လေ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ….. “မမ သမီးပန်းကန်တွေဆေးပြီးသွားပြီ” “အော် အင်းအင်း ဒါဆိုနားတော့လေ ဟင်းတွေရောသေချာအုပ်ထားလား” “ဟုတ်အားလုံးသေချာအုပ်ထားပါတယ်” “အေးအေး” စကားဆံုး တော့ ကောင်မလေးက သူအတွက်ပေးထားတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်။ “နေ့ခင်းဖက်ဆိုအိပ်တယ်လား သူက” “အင်းအဲ့ဒါသူထုံးစံပဲ အလုပ်များတဲ့အခါလောက်ပဲမအိပ်တာလေ…သူလဲအိမ်မှာလုပ်စရာသိပ်မှမရှိတာ” “အင်းကောင်းပါတယ်…ဒါကြောင့်ထင်တယ်ရောက်တုံးကထက်ကိုဒီကောင်မလေးပိုဝလာတာ” ကျွန်တော်ပြောတော့တီတီလေးကကျွန်တော့်ကိုရီပြတယ်။ “သားသားလဲပျင်းနေပြီထင်တယ် ဖေဖေမေမေတို့ရောဘယ်တော့ပြန်လာမလဲ..ဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာရင်မီးမီးကလိုက်သွားလို့ရပြီမှတ်လား” “အင်းဟုတ်တယ် တီလေး….ဖုန်းဆက်တော့ ဇူလိုင်လောက်ပြန်လာမယ်ပြောတယ်” “အော် အင်းအင်း ဒါဆိုသားသားနဲ့မမ နှစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့မှာပေါ့” “ဟုတ်တယ် မမလဲဟိုဖက်အိမ်မှာသွားလိုက်ဒီပြန်လိုက်လုပ်မယ်ထင်တယ် . ဟိုဖက်အိမ်မှာလဲပိတ်ထားရတော့ပျက်စီးတယ်လေ” “အင်းကောင်းတာပေါ့ သားသားတစ်ယောင်ထဲရှိတဲ့အချိန်အိမ်မှာထမင်းလာစားပေါ့”
“အင်းကောင်းတာပေါ့ ” စကားတွေပြောပြီးတော့ နှစ်ယောက်လုံးတီဗီကဇတ်ကားကိုအာရုံရောက်သွားတယ်။ ခဏကြာတော့ “Toilet သွားလိုက်အုးံ မယ်တီလေး” “အင်းအင်း” ကျွန်တော်လဲပြောပြီးပြီးချင်းဧည့်ခန်းကနေ အနောက်ဖက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ တီတီလေးအခန်းရှေ့ကိုရောက်တော့အမှတ်မထင်တီလေးအခန်းထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။ အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုမှထင်မထားတဲ့အရာလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လေ။ မနက်က သော့ကုန်းကောက်ရင်းတွေ့လိုက်ရတဲ့ တီလေးရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကအ၀တ်ခြင်းဘောင်လေးမှာတင်လို့…….. ကျွန်တော့်ရင်တွေတဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ကိုခုန်သွားတယ် ဧည့်ခန်းဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိတော့ အခန်းနဲ့ကွယ်နေတယ်လေ။ ကျွန်တော့်စိတ်ကဆုံးဖြတ်ချက်မချမှီမှာပဲ ကျွန်တော်လက်တွေက အခန်းတံးခါးဘေးအ၀တ်ခြင်းပေါ်ကတီလေးရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကိုယူမိရက်သွာဖြစ်နေပြီ။ နောက်တော့စိတ်ထဲမှာမလုံတလုံနဲ့ပဲ toilet ထဲကိုမြန်မြန်သွားပြီးလော့ခ်ချထားလိုက်တယ်။ အထဲရောက်တော့ တီလေးရဲ့ဘောင်းဘီလေးကိုကိုင်ရင်း ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာအတွေးတွေယောက်ယက်ခတ်လို့……………..။
တီတီလေးရဲ့အတွင်းခံပန်းရောင်လေးကိုကိုင်ရင်းတစ်ယောက်ထဲဇောချွေတွေပြန်နေမိတယ်။ ပိုးသားအတွင်းခံလေးကတော့လက်ထဲမှာငြိမ်သက်နေတယ်။ တီတီလေးရဲစောက်ဖုတ်နဲ့ထိထားတဲ့နေရာလေးကိုကိုင်ကြည့်မိတော့ စိုအိအိအရသာလေးနဲ့အတူကျွန်တော်လီးကလဲအတွင်းခံဘောင်းဘီထဲမှာထောင်မတ်လို့နေတယ်။ ဘောင်းဘီဂွကြားလေးကိုနမ်းကြည့်မိတော့ တီလေးရဲ့စောက်ဖုတ်နံ့သင်းသင်းလေးက သင်းပျံ့လို့……. ကျွန်တော့်ရဲ့တောင့်တင်းလေးတဲ့လီးလေးအပေါ်မှာတီတီလေးစောက်ဖုတ်လေးကိုထိကပ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီသားစိုအိအိ လေးကိုတင်ပြီးပွတ်နေမိတယ်လေ။……………. Toilet အပြင်ကိုရောက်တော့ တီတီလေးတစ်ယောက်ရုပ်ရှင်ကြည့်နေဆဲပါပဲ။ ကျွန်တော်လဲခါးပုံစထဲကဘောင်းဘီလေးကိုအသာထုတ်၊ အ၀တ်ခြင်းလေးပေါ်ကိုပြန်တင်ပြီးတော့မှပဲ သက်ပျင်းချနိုင်တော့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတီလေးတစ်ယောက်တီဗွီပိတ်သံကြားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဧည့်ခန်းထဲကိုရောက်တော့ “သားသား ကြည့်ချင်ရင်ကြည့်နော် …တီလေးခဏလှဲလိုက်အုံးမယ်” “ဟုတ် မကြည့်ချင်တော့ပါဘူး” “ဒါဆိုလှဲချင်အခန်းထဲလာလှဲလေ …တစ်ယောက်ထဲပျင်းနေမှာပေါ့” တီလေးစကားကိုကြားလိုက်ရတော့ကျွန်တော့်စိတ်တွေ တော်တော်ကိုလှုပ်ရှားသွားမိတယ်ဗျာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တီတီလေးကိုအခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲအနီးကပ်ကြည့်ခွင့်ရမဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လက်လွတ်ချင်ပါမလဲ။ ဒီလိုနဲ့အခန်းထဲရောက်တော့ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ပေါ်က အိစက်နေတဲ့မွေ့ယာထူထူ ပေါ်မှာတီလေးတစ်ယောက်လှဲအိပ်ရင်း ကျွန်တော်ကို ဘေးမှာလာလှဲဖို့ခေါ်တယ်လေ။ ကုတင်ရဲ့ဘေးမှာတော့ဘီဒိုတစ်လုံး၊ အဲ့ဒီရဲ့ဘေးမှာ တီတီလေးရဲ့ အလှပြင်တဲ့ မှန်တင်ခုံလေးရှိတယ်။ ဘီဒိုရဲ့ တစ်ခြားဘက်မှာတော့ စာရေးစာပွဲတစ်လုံး။ ကုတင်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့အ၀တ်လှမ်းစင်လေးတစ်ခု…………
အ၀တ်လှမ်းစင်ပေါ်ကိုအကြည့်ရောက်သွားတဲ့တစ်ခဏမှာကျွန်တော့အသက်ရှူသံတွေရပ်သွားရလောက်အောင်စိတ်ေ တွလှုပ်ရှားသွားမိတယ်ဗျာ။ စင်လေးပေါ်မှာ တီတီလေးရဲ့ ဘော်လီတွေနဲ့ အရောင်စုံလင်နေ့တဲ့ တီတီလေးရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးတွေကိုလှမ်းထားတာတွေလိုက်ရတယ်။ တီတီလေးရဲ့ဘေးမှာလှဲရင်းစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားနေတုံး…………… “သားသား ရော ရည်းစားတွေဘာတွေရှိနေပြီလား” “မရှိသေးပါဘူး တီလေးရယ်” “ဟုတ်လို့လား မညာနဲ့နော်” “အော်တစ်ကယ်ပြောတာပါ တီလေးရဲ့” “အင်း ဒါဆိုရင်တော့ ရှာပေးရတော့မယ်ထင်တယ်” တီတီလေးစကားဆံုး တော့ကျွန်တော်လဲတီတီလေးကိုရီပြမိတယ်။ပြီးတော့ စကားတွေဆက်သွားကြရင်း… “တီလေးရောကလေးမယူကြသေးဘူးလား” “ဘာတွေမေးနေတာလဲသားသားရယ် ဘာလဲသားသားကသိချင်လို့လား” “အော်ကျွန်တော်လဲ တူလေးလိုချင်တာပေါ့တီလေးရဲ့”ဆိုတော့ အပြုံးလေးနဲ့ “ကြိုးစားနေတာပါပဲသားသားရယ်” “ဘယ်လိုကြိုးစားတာလဲ” “ဟယ်…..ဒီကောင်လေးတော့” ဆိုပြီးတီလေးတစ်ယောက်ရှက်သွေးဖြာသွားတဲ့မျက်နာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြုံးပြီးကြည့်နေတယ်။ စိတ်ကွယ်ရာအခန်းလေးထဲမှာ ညအိပ်မီးဝါ၀ါလေးအောက်က စိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်နဲ့တီလေးနှစ်ယောက်လုံးကိုစိတ်လှုပ်ရှားလာစေတယ်လေ။ ပိုးသားမွေ့ယာအိအိလေးပေါ်က ညအိပ်ဝတ်ပန်းရောင်လေးနဲ့ဖြူစင်တဲ့မျက်နှာပိုင်ရှင်တီတီလေးတစ်ယောက်အလှကြီးကိုလှနေတော့တာပါပဲဗျာ။ “တီလေးရော လေးလေးနဲ့ အမြဲကြိုးစားလား သားသားတူလေးရဖို့ကို” “အာ …ဘာတွေမေးနေတာလဲသားသားရဲ့” “အော် သိချင်မိလို့ပါ” “ဘာလဲ သားသားကအဲ့လိုမျိုးတွေစိတ်ဝင်စားနေပြီလား” ကျွန်တော်လဲဘာမှမပြောပဲတီလေးကိုပြုံူးကြည့်နေမိတယ်။ပြီးတော့တီလေးဆီကသက်ပျင်းချသံတိုးတိုးလေးကို ကြားလိုက်မိတယ်။ ကျွန်တော်လဲအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေမိတယ်လေ။ တီလေးလဲလူသားပဲဟာကို……….. ကျွန်တော်စိတ်တွေလှုပ်ရှားလို့လက်တွေတောင်တုန်နေမိတယ်။ပြီးတော့ ပက်လက်လေးလှဲနေရာကနေ တီလေးဘက်ကိုစောင်းလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်နေတဲ့တီလေးနဲ့အရမ်းကိုနီးကပ်သွားတဲ့ခဏ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာ စိတ်ရိုင်းတွေဝင်လာမိတယ်လေ။ ပြီးတော့တီလေးစောင်းအိပ်နေတဲ့ တီလေးရဲ့ ပါးဖောင်းဖောင်းလေးကိုနမ်းလိုက်မိတယ်။ “အို” တီလေးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှက်သွေးဖြာလို့ တကယ်ကိုအပျိုမလေးတစ်ယောက်လိုရဲနေလိုက်တာ တီလေးရဲ့ပုခုံးတစ်ဖက်ကိုတွန်းချလိုက်တော့ပက်လက်လေးဖြစ်သွားတဲ့တီလေးတစ်ယောက်ကျွန်တော်ကိုတွေတွေလေြး ကည့်နေတယ်။ “သားသားရယ်………………………………..” တီတီလေးစကားမဆံုး ခင်မှာပဲ တီလေးရဲ့နုထွေးနေတဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုကျွန်တော်နှတ်ခမ်းလေးနဲ့ထိကပ်လိုက်တော့
တီလေးဆီကအသက်ရှုသံတွေပြင်းလာတယ်လေ။ ကျွန်တော့်လျှာလေးကိုတီလေးပါးစပ်ထဲကိုထိုးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ တီလေးဆီကလျှာချင်းပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လာတယ်။ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေရင်းနဲ့တီလေးနို့အုံဖောင်းဖောင်းလေးကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်တော့ပြည့်တင်းနေတဲ့ နို့လုံးလုံးလေးကကျွန့်တော့်လက်ထဲမှာပြည့်လို့………………………… “တီလေးရယ်သားသားတို့ ချစ်လိုက်ကြရအောင်နော်” “သားသားရယ်” ဝေခွဲမရတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ တီလေးတစ်ယောက်ငြိမ်သက်သွားတယ်။ပြီးတော့မှ ခေါင်းလေးကိုဖြေးဖြေးလေးညှိမ့်ရင်း “ဘယ်သူမှသိလို့မဖြစ်ဘူးနော် သားသား” “ဟုတ်ကဲ့ပါ” စကားဆံုး သွားတော့တီလေးရဲ့ဒူးလောက်ရှိတဲ့ညအိပ်ဝတ်ဂါဝန်လေးကိုတဖြည်းဖြည်းမတင်လိုက်မိတယ်တီလေးရဲ့ပြည့် တင်းနေတဲ့ပေါင်းသားတင်းတင်းလေးတွေကိုဖွဖွလေးပွတ်ဆွဲရင်းနဲ့ ပေါင်ရင်းနားလေးကိုရောက်လာတော့တီလေးရဲ့ ပိုး သွားအတွင်းခံချောချောလေးကဆီးကြိုလို့နေတယ်။ ကျွန်တော်လဲတီလေးပေါင်ကြားထဲမှာထိုင်ရင်းတီလေးရဲ့ပေါင်တစ်လျောက်ကိုဖွဖွလေးပွတ်ပေးနေတော့ တီလေးတစ်ယောက်ပြည့်တင်းနေတဲ့တင်သားအိအိတွေကိုမြှောက်လို့တုံ့ပြန်နေတယ်။ တီလေးရဲ့ဆီးခုန်မို့မို့လေးတွေကိုလက်နဲ့ပွတ်သပ်ရင်း ခပ်ဟဟလေးကားနေတဲ့ပေါင်ကြားလေးကနေ တီလေးရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကို အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးပေါ်ကနေလျှက်လိုက်တော့……….. “အား…………….သားသားရယ်” တီလေးရဲ့ငြီးသံတိုးတိုးလေးကကျွန်တော်စိတ်တွေကိုပိုလို့လှုပ်ရှားလာစေတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ တီတီသူငယ်ချင်းဆီကဖုန်းလာတယ်ဗျာ ည dinner မေ့မှာ စိုးလို့တဲ့ အချိန်ကိုကြည့်တော့ ၄း၄၇ ဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒါနဲ့ သားသား တီ ရေချိုးရတော့မယ်တဲ့သားသားလဲလိုက်ခဲ့တဲ့ညဆိုတစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေမှာစိုးလို့တဲ့ဗျာ အခန်းမပြင်ထွက်တော့ကောင်မလေးကဟင်းတွေနွေးနေပြီးဗျ အပြင်ရောက်တော့လဲအရင်လိုပါပဲ ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အရမ်းရင်းနှီး သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ် ကျွန်တော်လဲအခန်းပြန်ပြီးတော့ရေချိုးအ၀တ်လဲလိုက်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့နေ့ခင်းဘက်ကမပြီးမစီးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ အဲ့ဒီနေ့က ဒင်နာကို၆နာရီလောက်သွားတယ် နည်းနည်းတော့မျက်နှာပူသလိုခံစားမိတယ် တီလေးကတော့ သာမန်ပါပဲ အဲ့ဒီနေ့ကထူခြားတယ်ဗျ ၅း၃၀ လောက်ကျတော့သွားမယ်ဆိုပြီးဖုန်းဆက်လာတော့ကျွန်တော်အောက်ဆင်းသွားတော့တော်တော်လေးရင်ခုန်သွားတ ယ် တီတီ ၀တ်ထားတာ စကတ်ပျော့ပျော့လေးပါပန်းရောင်လေးဒူးအပေါ်နားလောက်ရှိတယ် အကျီကတော့အကျပ်တီရှပ်လေးပါအဖြူဆိုတော့အတွင်းကဘော်လီအနက်လေးပါမြင်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့လိုရင်းပြောရရင် dinner ကပြန်လာတာ၈း၃၀လောက်ရှိပြီဗျ ပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော့်အခန်းကိုမပြန်ပဲသူအခန်းပဲလိုက်လာခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လဲမမကိုတီလေးအခန်းမှာပဲအိပ်ေ တာ့မယ်လို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ တီလေးအိမ်ခန်းကိုပဲလိုက်လာခဲ့တယ်။ အခန်းရောက်တော့တီတီလေးကရေးချိုးပြီးတော့သူအခန်းကိုဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်လဲ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်းရတာပေါ့အိမ်ကကောင်မလေးကလဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ ပြီးတော့မှအခန်းထဲကထွက်လာတယ်ဗျ ညအိပ်ဝတ်အပြာနုလေးနဲ့ပိုးသားထင်တယ်ပြောင်ပြောင်ချောချောလေးပဲ
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးကိုလာထိုင်ပြီးတော့သူလဲရုပ်ရှင်ဝင်ကြည့်နေတယ် ခဏနေတော့အိမ်ကကောင်မလေးကိုအိပ်ချင်ရင်အိပ်တော့ဆိုပြီးအိပ်ခိုင်းတယ်ဗျ ကောင်မလေးက kitchen ကအခန်းမှာအိပ်တာဆိုတော့တီလေးအိပ်ခန်းနဲ့နည်းနည်းဝေးတယ်လေ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်လဲစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲမသိဘူး နေ့ခင်းကဖြစ်ခဲ့တာလဲပါမယ်ထင်တယ် လက်ကတော့ရဲလာတယ် တီလေးပေါင်လေးကိုပွတ်ပေးတော့ငြိမ်နေတယ် ဘာမှမပြောဘူးဧည့်ခန်းမှာလဲမီးအ၀ါပဲလေ မီးကအတိုးလျော့ရတော့မီး ကိုနည်းနည်းလျော့လိုက်တော့မှောင်မှောင်လေးဖြစ်သွားတယ် တီတီပေါင်လေးကိုပွတ်ရင်းနဲ့ အပေါ်ကိုနည်းနည်းတက်ပြီးတော့သူပေါင်းကြားလေးကိုပွတ်ပေးတော့အတွင်းခံလေးဝတ်ထားတယ်ခဏနေတော့ သူလဲကျွန်တော်ပေါင်ကိုလာကိုင်တယ်လေပြီးတော့ပွတ်ပေးတယ်ပွတ်ပေးနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းကြားထဲကလီးအေ ပ်ါကိုပါပွတ်ပေးတယ်ဗျာကျွန်တော်လဲအရမ်းတင်းနေတယ် ခဏနေတော့မှ ခုန်အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့တီလေးခြေသလုံးလေးကိုပွတ်တော့သားသားအခန်းထဲသွားမလားတဲ့ဗျာ ကျွန်တော်လဲတီဗီပိတ်ပြီးတော့အခန်းထဲဝင်လိုက်တော့မှန်တင်ခုန်ရှေ့မှာဆံပင်ကိုစီးနေတယ် ကျွန်တော်လဲတီလေးအနောက်ကနေသိုင်းဖက်လိုက်တော့နတ်ပြည်ရောက်သွားသလိုပါပဲဗျာ ဖင်လုံးလုံးလေးကိုပိးု သားလေးပေါ်ကဖိလိုက်တော့အရမ်းကောင်းတယ်ညအိပ်မီးလေးပဲထွန်းထားတဲ့အခန်းထဲမှာတီတီ လိုချစ်စရာပြည့်ပြည့်တင်းတင်းလေးနဲ့ ဆိုတော့ဗျာ ပြီးတော့အခန်းနံရံလေးကိုမှီပြီးတော့တီတီနှတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းတော့သူလဲစိတ်ပါနေတယ်ထင်တယ်ပြန်နမ်းတယ် နေ့ခင်းကဖြစ်ခဲ့တာထက်ကိုပိုပြီးနူးညုံနေသလိုခံစားမိတယ် နမ်းနေရင်းနဲ့တီတီဂါဝန်လေးကိုမပြီးချွတ်ပေးလိုက်တယ်သူပေါင်ကြားလေးထဲစမ်းကြည့်တော့အတွင်းခံလေးကစိုထိုင်း ထိုင်းနဲ့ဗျ ပြီးတော့ကျွန်တော်အကျီကိုချွတ်ပေးတယ် ကုတင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အပေါ်ဘောင်းဘီကိုချွတ်ပြီးတော့အတွင်းခံပေါ်ကနေကျွန်တော်လီး ကိုပွတ်ပေးနေတယ်ပြီးေ တာ့သေချာကြည့်နေတယ်ဗျာ ပြီးတော့ထပြီးတာဝါယူလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်လဲဆေးမိထားသလိုပဲ ရင်တွေလဲအရမ်းခုန်နေမိတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်လီး ကိုထုတ်ပြီးထိပ်လေးကိုဆွဲချပြီးတော့တာဝါနဲ့သုတ်ပေးတယ်ခံရတာတစ်မျိုးပဲဗျ ရှက်လဲရှက်နေသလိုပဲ အားလုံးပြီးသွားတော့ တီလေးလျှာလေးနဲ့လီးထိပ်လေးကိုလျှက်ပေးတယ် ကောင်းလိုက်တာဗျာကျွန်တော်ရေးတောင်မပြတတ်တော့တာပါ ပြီးတော့မှသူနှတ်ခမ်းလေးနဲ့ လီးထိပ်လေးကိုသာသာလေးငုံထားပြီးတော့လျှာလေးနဲ့ကြားလေးထဲကိုကစားပေးတာအရမ်းကောင်းတယ်ဗျာသူပစပ် ထဲမှာတင်ပြီးချင်သလိုလိုဖြစ်လာတာ ခဏစုပ်ပြီးတော့တီလေးကိုကုတင်ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းပြီးတော့တီလေးပေါင်လေးကိုပွတ်ပေးလိုက်တယ်သူဝတ်ထားတာနေ့ ခင်းကတန်းပေါ်မှာလှမ်းထားတဲ့ဘောင်းဘီနက်လေးဗျ ဗျောင်လေးပါပဲ ဘော်လီကလဲအနက်လေးပဲ ပြီးတော့သူကဘေးကိုလာလှဲလေဆိုတော့သူုဘေးကိုဝင်လှဲလိုက်တယ် သူကတော့ကုတင်ပေါ်မှာပက်လက်လေးပါအရမ်းကြည့်ကောင်တယ်ဗျာ အသားကအရမ်းဖြူတော့တစ်မျိူးလေးပဲ ပြီးတော့ကိုယ်တီတီလေးဆိုတာသိရတော့ပိုစိတ်ကြွတယ် ကုတင်ပေါ်မှာဖက်ထားရင်းနဲ့တီလေးကြောကိုလက်ထဲ့ပြီးတော့ဘော်လီလေးကိုချွတ်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနေ့ခင်းကထက်ပိုလှနေသလိုပဲဗျာပြီးတော့ တီတီအပေါ်ကနေတက်ပြီးတော့နှတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းလိုက်တော့သူကတင်းတင်းလေးဖက်ထားတယ် လည်ပင်းလေးကိုနမ်းတော့တိုးတိုး လေးငြီးတယ် စကား;တွေပြောနေကြရင်းနဲ့တကယ်ကိုရိုမန့်တစ်လေးပါပဲ
သူကတိုးတိုးလေးခေါ်တယ် “သားသား” “ဗျာ....” “ဘယ်သူမှသိလို့မဖြစ်ဘူးနော်” “ဟုတ်ကဲ့ပါ” “သားသားမနက်ကတီတီကိုကြည့်နေတာ တီတီသိတယ်” “ဆောရီးပါတီလေးရယ်” “ရပါတယ်” “သားသားကောမိန်းခလေးကိုလုပ်ဘူးလား” “ရှုပ်ရှင်တွေတော့ကြည့်ဘူးတယ်” ကျွန်တော်ပြောတော့တီလေးက ရီနေတယ်ဗျ အဲ့ဒါနဲ့အောက်ကိုလျောပြီးတီလေးနို့လေးတွေကိုလက်နဲ့ဆုပ်ဆုပ်ပြီးစို့ပေးနေတော့ “သားသားရယ”် ပြီးတော့ဗိုက်သားလေးတွေကိုဖွဖွလေးကိုက်ပေးလိုက်တယ်ခါးနားလေးကိုကိုက်လိုက်တော့သူတော်တော် ကော့သွားတယ် ပြီးတော့မှ ပေါင်ကြားလေးထဲကိုဝင်ြ့ပီးတီလေးပေါင်ဖြူဖြူလေးကိုဘေးကိုကားလိုက်ြ့ပီးတော့ အတွင်းခံလေးပေါ်ကနေ တီတီစောက်ဖုတ်လေးကိုလျှက်ပေးနေမိတယ် ဘောင်းဘီကြိုးလေးပေါ်ကနေ လျက်ပေးရင်းနဲတဖြည်းဖြည်းစောင်းပြီးတော့ဖင်သားတင်းတင်းလေးတွေကိုလျှက်ပေးတော့တီတီအရမ်းကောင်းတယ် ထင်တယ် ဖင်လေးကိုကုန်းကုန်းတက်လာတယ် တီတီဖင်လေးကပြည့်တော့အတွင်းခံအနက်လေးထဲမှာပြည့်ပြည့်တင်းတင်းလေးပေါ့ဗျာ ဖင်ကြားလေးနားမှာဘောင်းဘီကချိုင့်နေတော့အဲ့ဒီနေရာလေးတစ်လျောက်ဖင်ကြားထဲကိုလျှက်ပေးနေမိတယ်ဘောင်း ဘီအနက်လေးကိုတီတီခါးကနေတစ်ဝက်လောက်ဆွဲချလိုက်တော့ ဖင်သားတင်းတင်းလေးတွေပေါ်လာတယ် ဖင်လေးကိုဆုပ်နယ်ရင်းနဲ့ဖင်ကြားလေးထဲကိုလျှက်ပေးတော့ “သားသားရယ် ....တီလေးအရမ်းရင်ခုန်တာပဲ” ပက်လက်လေးပြန်လှန်ရင်းနဲ့ ဖင်လေးကိုမပြီးတော့တီတီဘောင်းဘီင်္လေးကိုချွတ်လိုက်တော့ အမွေးရိတ်ထားတဲ့ဆီခုန်ဖြူဖြူလေးကနေလျောဆင်းလာတဲ့အသားဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ပေါက်ကြားကအကွဲကြောင်းေ လးကမီးမှိန်မှိန်လေးအောက်မှာကဗျာဆန်လိုက်တာဗျာ ဆီးခုန်လေးကိုဖွဖွလေးနမ်းပြီးတော့ပေါင်ရင်းနဲ့စောက်ဖုတ်ကြားကအသားပြည့်ပြည့်လေးကိုလျှက်ပေးတော့ အားးးးးးးး ကျွန်တော်ခေါင်းလေးကိုလာကိုင်တယ်ဗျကျွန်တော်လဲအကွဲလေးကိုမထိအောင်ဘေးနားလေးကိုလိုက်လျှက်ပေးတော့ သူဖင်လေးကိုလိုက်ရွှေ့ပေးတယ် တီတီစောင်ဖုတ်လေးကိုလက်နဲ့ဖြဲပြီးတော့အစိထိပ်လေးကိုလျာလေးနဲ့ပွတ်တော့ငြီးလိုက်တာဗျာ ကျွန်တော်လဲစိတ်တွေပိုကြွလာတယ် တီတီအပေါက်လေးက....မီးဝါ၀ါလေးအောက်မှာအရည်လေးတွေထွက်နေတာလရောင်အောက်ကရေပြင်မှာလိုင်း ကြ
က်ခွပ်လေးတွေလိုအရမ်းလှနေမိတယ် စောက်ဖုတ်ပေါက်ဝလေးကိုလျှာလေးနဲ့ကလိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူလေ “သားသားရယ်....ချစ်တယ်ကွာ” တကယ်ပါပဲအရမ်းရင်ခုန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လီးလေးတောင်တဆတ်ဆတ်တုန်သွားတဲ့အထိခံစားလိုက်ရတယ် ကျွန်တော်လဲစိတ်အရမ်းကြွပြီးတော့ ထည့်မယ်လုပ်တော့မှသတိရမိတယ် ဘာမှမပါဘူးလေ အဲ့ဒါနဲ့ “တီတီလေးဖြစ်ပါ့မလားဆိုတော့” “ရတယ် ထည့်လိုက်လေ တီတီမှာဆေးရှိတယ်” “တီတီထဲမှာပြီးပေါ့” အဲ့ဒါနဲ့တီတီပေါ်ကနေဖက်ပြီးတော့ထည့်မယ်လုပ်တော့ကျွန်တော်လီးလေးကိုလာကိုင်ပြီးထည့်ပေးတယ် တဖြည်းဖြည်းခေါင်းလေးဝင်အောင်သွင်းလိုက်တော့ စီးစီးတင်းတင်းလေးပါပဲ နည်းနည်းလေးထပ်ထိုးလိုက်တော့တိုးတိုးလေးငြီးတယ်ဗျာ တီတီနားနားလေးကနေ “တီလေးကောင်းလား” “အရမ်းကောင်းတာပဲ”ဲ့ “သားသားရော” “ဟုတ် ကောင်းတယ်တီလေးရယ်” တဖြည်းဖြည်းအဆုံးထိသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတီလေးသားအိမ်လေးကိုထိမိတော့တိုးတိုးလေးအော်တယ် “နာလို့လားတီလေး။။။။” “အရမ်းကောင်းလို့” “ခေါင်းလေးခါပြီးတော့တိုးတိုးလေးပြောတယ်” တီတီလေးကိုဖက်ပြီးတော့ စောက်ဖုတ်ထဲကတင်းတင်းစီးစီးနဲ့နွေးနေတဲ့အရသာလေးကတကယ်နတ်ပြည်ပါပဲဗျာ နှစ်ယောက်လုံးမမြန်ပါဘူး ဖက်ရင်းနဲ့မှန်မှန်လေးလိုး နေမိတယ် ပြီးတော့မှသားသားထိုင်ပြီးလိုးရအောင်လေတဲ့ ကျွန်တော်ပေါင်လေးပေါ်ထိုင်ပြီးတော ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လိုးပေးနေတဲ့တီတီလေးကအရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းနေတယ်ဗျာ ပါးပြည့်ပြည့်လေးနဲ့ချစ်စရာမျက်မှာလေးပေါ်မှာရမက်ခိုးလေးတွေနဲ့ရဲနေတဲ့တီတီလေးကို ကျွန်တော်ချစ်သူတစ်ယောက်လိုခံစားမိသွားတယ် တီတီလက်တွေကကျွန်တော်လည်ပင်းလေးကိုဆွဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွေကတီတီဖင်သားပြည့်ပြည့်လေးကို ပွတ်ပြီးတော့တစ်ချက်ခြင်းလိုးနေမိတယ် နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ပြီးအောင်လိးု ရအောင်လေ တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကုတင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုလှဲချလိုက်တယ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေ ထိုင်ရင်းနဲ့ဆောင့်ပေးနေတယ်ဗျာ ပါးစပ်ကလဲတိုးတိုလေးငြီးနေတယ် ပြီးတော့မှ သူကိုကုတင်လေးပေါ်ပြန်လှဲပြီးတော့ အပေါ်ကနေ ခါးလေးကိုကိုင်ပြီးဆက်တိုက်ဆောင့်ပေးနေတုံးသူလဲအောက်ကနေကော့ကော့ပေးတာ ကောင်းလိုက်တာ တဖြည့်ဖြည်းမြန်လာပြီးတော့ “သား တီတီပြီးတော့မယ် အားးးအားးးးး” ကျွန်တော်လက်ဆက်တိုက်ဆောင့်ပေးနေရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ကိုတင်းတင်းလေးဖက်ပြီးတော့သက်ပျင်းရှည်ရှည်လေးချပြီး
“တီလေးပြီပြီ သားသားရော” သားသားမပြီးသေးဘူးတီလေးဆိုတော့ဆက်ဆောင့်တီလေးကော့ပေးမယ်ဆိုပြီးကော့ကော့ပေးတယ်ဗျာ လေးငါဆယ်ခါလောက်ဆောင့်ပြီးတော့ ကျွန်တော်သုတ်ရည်တွေကိုတီလေးစောက်ဖုတ်လေးထဲ ပန်းထည့်လိုက်တယ် ကျွန်တော်ပြီးသွားမှန်း သိတော့ကျွန်တော်ကိုတင်းတင်းလေးဖက်ထားပေးတယ်ဗျာ လီးကိုတီတီစောက်ဖုတ်လေးထဲမှာစိမ်ပြီးနှစ်ယောက်လုံးတင်းတင်းလေးဖက်ပြီးတော့ဘာနဲ့မှမတူတဲ့အရသာလေးကိုနှစ် ယောက်လုံးခံစားလိုက်ရပါအတူခံစားရင်းနဲ့ အဲ့ဒီညကအရသာလေးကိုနှစ်ယောက်လုံးစွဲလမ်းသွားမိပါတော့တယ်......ဖေဖေမေမေနဲ့ ညီမလေးလဲအတူလိုက်သွားခဲ့တယ် စစချင်းတော့သတိရလိုက်တာ မမဟိုဖက်အိမ်မှာသူငယ်ချင်းနဲ့သွားအိပ်တဲ့ညတွေဆိုတစ်ယောက်ထဲပိုသိသာတာပေါ့ အဲ့လိုနဲ့နေလာရင်းတစ်နေ့ …အဲ့ဒီနေ့ကမမလဲသူငယ်ချင်းနဲ့သွားအိပ်တဲ့ညပေါ့။ လေးလေးငယ်လဲခရီးထွက်နေတယ်တီလေးတို့အိမ်မှာ တီတီအဒေါ်တောင်ကြီကလာတဲ့နေ့ကပါ အဲ့နေ့ညက အလုံက ယူဂျီးနီးယားမှာညစာသွားစားကြတယ်ပြန်တော့ ၈ နာရီလောက်ရှိပြီးပေါ့ ပြီးတော့သူအဒေါ်ကိုအိမ်ပြန်ပို့ပြီးတော့နှစ်ယောက်အတူကားနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ် အဲ့နေ့ကတီတီလေးဝတ်ထားတာ ထမိန်စကတ်အဖြူရောင်ပေါ်မှာအပွင့်လေးတွေနဲ့ အောက်ကအတွင်းခံအနက်ပေါ်မှာအဖြူစင်းလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ရေးရေးလေးမြင်နေရတယ်အကျီကတော့ရယ်ဒီမိတ်ခရ မ်းရောင်လေးပေါ့ ဓတ်လှေကားနဲ့ဆင်းလာထဲကကျွန်တော် လီးကတောင်နေပြီးလေ ဒါနဲ့နှစ်ယောက်မြို့မကျောင်းလမ်းဖက်ကိုကားမောင်းလာ၇င်းနဲ့ စမုံလမ်းထဲကိုကွေ့ဝင်လိုက်တော့လူတော်တော်ရှင်းတယ်မှောင်လဲမှောင်တယ်ဆိုတော့လမ်းဘေးမှာကားကိုရပ်ပြီးတော့ တီတီပေါင်လေးကိုလှမ်းကိုင်လိုက်တယ် “သားသားကလဲ လမ်းလယ်ကြီးမှာ” အဲ့ဒါနဲ့ ရပါတယ် တီရယ်ဘာမှမမရှိတာပဲ ဆိုတော့ရီပြတယ် အဲ့ဒါနဲ့နှစ်ယောက်နောက်ခန်းကိုကူးပြီးတော့ တီတီလေးကိုရင်ထဲမှာထွေးပွေ့ထားမိတယ်ဗျာ တီလေးရေမွေးနံလေးနဲ့ ကိုယ်လုံးအိအိလေးကိုဖက်ထားရတဲ့အရသာလေးကိုအခုထိမမေ့နိုင်သေးဘူး ဖက်ထားရင်းနဲ့တီတီထမိန်စကတ်လေးပေါ်ကနေ ဆီးခုန်လေးကိုပွတ်ပေးတော့ အသက်ရှုသံတွေမြန်လာတယ် စကတ်သားပျော့ပျော့လေးပေါ်ကနေ ဆီးခုန်ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ပေါင်းရင်းကအတွင်းကိုဝင်သွားတဲ့ဘောင်းဘီရာလေးကိုပွတ်ပေးတော့ “သားသားရယ် တီတီအရမ်းယားတယ်” ပြီးတော့ကျွန်တော့်နှတ်ခမ်းလေးကိုလာနမ်းတယ် ကျွန်တော်လဲ စကတ်အကွဲလေးထဲကိုလက်ထည့်လိုက်တော့အထဲမှာခွဲထားတာပေါင်ရင်းနားလေးအထိပေါ့ လက်ကိုထည့်ပြီးတော့ပေါင်သားတင်းတင်းလေးကိုပွတ်ပေးတော့ပေါင်လေးနှစ်ဖက်ကိုတဖြည်းဖြည်းလေးဟပေးတယ် ကျွန်တော်လဲပေါင်းလေးကိုပွတ်နေရင်းနဲ့နားရွက်လေးကိုလျှာနဲ့ပွတ်ပေးတော့ငြီးလိုက်တာဗျာ အဲ့လိုနဲ့လက်ကိုတဖြည်းဖြည်းပေါင်ရင်းနားလေးကိုပွတ်လာရင်းနဲ့ ပေါင်ဂွဆုံနားလေးကိုစမ်းလိုက်တော့ဘောင်ဘီဂွလေးမှာအရည်တွေအများကြီးစိုနေတယ် နွေးနွေးစိုစိုလေးပေါ့ ပြီးတော့ဘောင်းဘီပေါ်ကနေစောက်ဖုတ်အမြှောင်းလေးကိုစမ်းမိတော့ “တီတီဘာမှခံမလားဘူးလား’” “အင်းးးးးး”
“သွေးဆင်းပြီးတာ၃ရက်ပဲရှိသေးတယ်လေ” ဘောင်းဘီလေးထဲမှာဖောင်းနေတဲ့တီတီစောက်ဖုတ်ပြည့်ပြည့်လေးကိုပွတ်ပေးတော့ ရင်ခွင်ထဲမှာခေါင်းလေးဝှက်ပြီးတိုး တိုးလေးငြီးနေတယ် ခဏနေတော့ “သားသားရယ်အိမ်ကိုပဲပြန်ရအောင်နော်”.... အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်----------------အိမ်ပြန်ရောက်တော့ တီတီကသူအခန်းကိုမပြန်တော့ပဲကျွန်တော်အခန်းကိုလိုက်လာတယ် သူအိမ်ကိုတော့ဖုန်းလှမ်းဆက်လိုက်တယ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့နေလို့သားသားလဲပါတယ် စိတ်မပူနဲ့ဆိုပြီးတော့ အဲ့ဒီညကအဖြစ်ကတော့တကယ်ကိုအခုထိမမေ့နိုင်သေးဘူးဗျာ တီတီလဲကားပေါ်မှာပွတ်ပေးထဲကတော်တော်ကြွနေပြီလေ ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဧည့်ခန်းကလိုက်ကာတွေကိုပိတ်လိုက်တယ် ပြီးတော့မှညီမလေးရဲ့ Dinner dress လေးကိုထုတ်ပေးပြီးလဲခိုင်းလိုက်တယ် ညီမလေးအကျီကအနက်ရောင်ပျောင်လေးပါ ညီမလေးက ၅ပေ ၄လောက်ရှိတော့တီတီနဲ့ နဲနဲတိုနေတာပေါ့ ပြီးတော့တီတီထက်စာရင်နဲနဲ့ပိန်တော့တီတီနဲ့ကျပ်ကျပ်လေးဖြစ်နေတယ် တော်တော်လှတယ်ဗျာတီတီကအသားအရမ်းဖြူတော့ dress အနက်ကျပ်ကျပ်လေးနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ ပြီးတော့တိုတာကပေါင်တစ်ဝက်ကိုတောင်ကျော်တယ် ပြီးတော့မှ အိမ်ရှေ့မှာ အရက်အတူသောက်ကြတယ်ဗျာ ဖေဖေက ထမင်းမစားခင်သောက်တဲ့ ၀ီစကီရှိတယ်လေ တီတီလဲတော်တော်လွတ်နေတယ် ကျွန်တော်ကတော့အရူးအမဲသားကျွေးသလိုပဲပေါ့ဗျာ နှစ်ယောက်သောက်နေကြရင်းနဲ့နှစ်ခွက်လောက်ကုန်တော့ တီတီမျက်နှာလေးတွေရဲလာတယ်ဗျ စကားတွေလဲပြောထွက်လာတယ် ကျွန်တော်ကစမေးလိုက်တာပါ “တီတီ “ “ဦးနဲ့ရောနေတိုင်းလိုး လား” “အင်း တစ်ပတ်ကိုလေးရက်လောက်”
“တီတီဟာလေးကိုရောလျှက်ပေးလား” “ ဟင့်အင်းတဲ့ဒီတိုင်းပဲလိုးတာ” “သားသားနဲ့လိုးတာကော” ကျွန်တော်ပြောတောတီလေးက ရီနေတယ်ဗျာ ပြီးတော့ “ကောင်းလို့ခဏခဏခံတာပေါ့သားသားရယ်” “လိုးတဲ့အရသာလေးကိုကြိုက်လား” “ ဘာလို့လဲ တီလေးကိုအထင်သေးလို့လား” “ မဟုတ်ပါဘူးတီလေးရယ်” “သား တီလေးနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေချင်တာပါ ပြီးတော့အခုလိုလေးနေရတာကိုလဲကြိုက်တယ်” “အင်းပါ တီလေးသိပါတယ်” “ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှသိလို့မဖြစ်ဘူးနော်တဲ့သားနဲ့ကသွေးသားရင်းမဟုတ်ပေမဲ့ဆက်စပ်နေတယ်လေ” “ဦးနဲ့လိုးတာကြာတော့ရိးု သလိုခံစားမိလား” “တစ်ခါတစ်လေပေါ့” “အဲ့တုံးကရောတစ်စိမ်းကောင်လေးတွေနဲ့စဉ်းစားဘူးလား”ကျွန်တော်မေးတော့ ပြုံးပြတယ်ဗျာ “ဘာလို့လဲ” “သားကသိချင်ယုံပါ “ “အင်းအဲ့လိုတော့မစဉ်းစားမိဘူး...” “ဒါပေမဲ့အပြင်သွားရင်ကိုယ်ကိုနောက်ကကြည့်နေတာသိရင်တော့စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်မိတယ်”
“တီလေးတို့အခြေအနေနဲ့ အဲ့လိုဖြစ်လို့မရဘူးလေ” ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သောက်ကြတယ်ဗျာ သောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လဲတီလေးနားကိုသွားပြီးတော့လက်လေးကမ်းပေးတော့လက်ကိုဆွဲပြီးထလာတယ် ပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်နေရင်းနဲ့တီတီခါးလေးကိုကိုင်ထားတော့တီတီလက်တွေကကျွန်တော်ပုခုံးပေါ်ကိုလာတင် တယ် တကယ်ပါဗျာ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့မီးရောင်ဝါ၀ါမှိန်မှိန်နဲ့ဧည့်ခန်းအေးအေးလေးမှာ party Dress အနက်ကျပ်ကျပ်လေးနဲ့လက်မောင်းသားဖြုဖြုပြည့်ပြည့်လေးပေါ်ကအသားလေးထဲမြုတ်နေတဲ့ ဘော်လီ အနက်ကြိုးလေးရယ် ကျောလယ်လောက်ရှည်တဲ့ဆံပင်ဖျောင့်ဖျောင့်လေးကိုနောက်ကနေစုစီးထားပြီးတော့ဖွေးနေတဲ့ဂုတ်သားဖြူဖြူလေးပေါ် က platinum ကြိုးပြောင်ပြောင်လေးရယ်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်နုနယ်တဲ့မျက်နှာလေးပေါ်ကရမက်အငွေ့အသက်လေးတွေနဲ့ ဖောင်းအိနေတဲ့ ပန်းသွေးရောင်ပါးမို့မို့လေးတွေ အကျီဟိုက်ဟိုက်ကြားမှာမို့တက်နေတဲ့ရင်သားဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ dress ကျပ်ကျပ်တိုတိုလေးထဲကနေဖောင်းအိရုန်းကြွနေတဲ့ ဆီးခုန်မို့မို့လေး...... ပြီးတော့ပြည့်တင်းနေတဲ ပေါင်တံလေးကိုတုတ်နှောင်ဆွဲကပ်ထားတဲ့ပိတ်သားပျော့ပျော့လေးပေါ်မှာ မို့မောက်ပြည့်တင်းနေတဲ့ တင်လေးနှစ်လုံးကိုမတင်ထားတဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီရာလေးနဲ့ တီတီလေးရဲ့အလှဟာ စာဖွဲ လို့မရလောက်တဲ့ နတ်သမီးလေးတစ်ပါးရဲ့အလှလိုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဆွဲထင်သွားတယ်ဗျာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခါးလေးကိုဆွဲကပ်လိုက်တော့အလိုက်သင့်လေးပါလာတဲ့ ကိုယ်လုံးပြည့်ပြည့်လေးနဲ့အတူ နိုအုံဖောင်းဖောင်းလေးကကျွန်တော်ရင်ခွင်ထဲကိုနစ်မြုတ်သွားတယ် မော့လာတဲ့မျက်နှာလေးကိုနမ်းပြီးတော့နဲ့တီတီနှတ်ခမ်းသားနုနုလေးကိုဖွဖွလေးကိုက်ပေးလိုက်တယ် ပြီးတော့မှ တေ့ကပ်သွားတဲ့နှတ်ခမ်းနှစ်စုံကြားမှာ တီတီလျှာလေးကို မထိတထိနဲ့ပွတ်သပ်နေမိတယ်
ခါးကိုဖက်ထားတဲ့ကျွန်တော်လက်တွေကို အောက်ကိုလျောပြီးတော့တီတီလေးရဲ့ပြည့်တင်းနေတဲ့တင်ပါးလံုး လုံးလေးကိုပွတ်ချေပေးလိုက်တော့ တီတီရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကကျွန်တော်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လေးပြန်ပြီးထွေးပွေ့ထားတယ်ဗျာ dress ပေါ်ကအတွင်းခံဘောင်းဘီရာလေးတစ်လျောက်လက်နဲ့ပွတ်ဆင်းသွားပြီးတော့ တီတီလေးတင်နှစ်လုံးကြားက အကွဲကြားလေးကိုလက်လေးနဲ့ပွတ်သပ်ပေးမိတော့တီတီနှတ်ခမ်းလေးကတိုးတိုး လေးငြီးလာတယ် “သားသားရယ်.............တီလေးကိုအရမ်းလုပ်တတ်တာပဲကွာ” ပြီးတော့မှ မွေးညှင်းလေးတွေနဲ့ဖွေးနေတဲ့ တီတီလည်ပင်းကအကြောလေးကို ဖွဖွလေးကိုက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတီတီ ဒူးတွေကွေးညွတ်သွားပြီးတော့ရင်ခွင်ထဲကိုပြိုဆင်းလာတယ် အဲ့ဒါနဲ့တီတီကိုဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ် ကျွန်တော်လဲဆိုဖာအောက်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ မို့ဖောင်းနေတဲ့တီတီဆီခုံလေးကိုအကျီပေါ်ကနေနမ်းပေးနေမိတယ်ဗျာ ပြီးတော့မှ တီတီကကျွန်တော်ကိုမတ်တပ်ရပ်ခိုင်တယ်ကျွန်တော်ညအိမ်ဘောင်းဘီလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲချွတ်ပြီးတော့ အတွင်းခံပေါ်ကနေရုန်းကြွနေတဲ့လီးတံလေးကိုပွတ်ရင်းနဲ့ “သားသား တီလေးကိုလိုးချင်နေပြီလား” အတွင်းခံလေးကိုဆွဲချွတ်ရင်းနဲ့လီးတံလေးကို တီတီလက်ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ပွတ်သပ်ပေးနေတယ် ကျွန်တော်ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကိုပွတ်ပေးနေရင်းနဲ့ ဥလေးနှစ်လုံးကိုအောက်ကနေမပြီးတော့ဖွဖွလေးဆုပ်နယ်ပေးတဲ့အရသာလေးက..ကောင်းလိုက်တာဗျာ တဆက်ထဲမှာပဲ နှတ်ခမ်းသားလေးတွေနဲ့လီးခေါင်းလေးကိုငုံထားပေးတယ် တဖြည်းဖြည်းစုပ်သွင်းလိုက်တဲ့တီတီနှတ်ခမ်းသားတွေထဲမှာကျွန်တော်လီး တစ်ချောင်းလုံးတဆတ်ဆတ်တုန်လို့ပေါ့ မို့ဖောင်းနေတဲ့ပါးလေးတွေချိုင့်ဝင်သွားတဲ့အထိဆုပ်သွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တစ်ကိုယ်လုံးတီတီလေးပေါ်ကိုပြို ဆင်းကျသွားခဲ့တယ်.........
ဆိုဖာပေါ်မှာပက်လက်လေးဖြစ်သွားတဲ့တီတီလေးပေါ်ကနေခွပြီးတော့ကျွန်တော်ဥလေးတွေကို တီတီနှတ်ခမ်းနားမှာတေ့ပေးတော့ဥလေးတွေကိုဆုပ်နေရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ဖင်ကြားတစ်လျှောက်ကိုလက်သဲချွန်ချွန်လေးတွေနဲ့ပွတ်သပ်ပေးနေတယ် ။။ ခဏစုပ်ပြီးတော့မှ ပက်လက်လေးဖြစ်နေတဲ့တီတီလေးကို ပွေ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်အခန်းထဲ ခေါ်လာခဲ့တယ် ကျွန်တော်ကုတင်ဘေးမှာပဲ တီတီလေးကိုဖက်ထားရင်းနဲ့ အနက်ရောင်အကျီလေးကိုချွတ်ပေးလိုက်တယ် ပြီးတော့တစ်ဆက်ထဲပဲအသားထဲကိုမြုတ်ဝင်နေတဲ့ တီတီအနက်ရောင်ဘော်လီလေးကိုဖြည်ချလိုက်တော့ အတားအဆီးမဲ့သွားတဲ့နို့ဖြူဖြူတင်းတင်းလေးတွေကလေထဲမှာညင်ညင်သာသာလေးအိကျလာတယ် အောက်မှာလဲညနေကထမိန်စကတ်လေးထဲမှာရေးရေးလေးတွေ့ရတဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီအနက်ပေါ်မှာအဖြူစင်းလေး နဲ့ပေါ့ပြီးတော့ အခန်းထဲကစာပွဲဘောင်လေးပေါ်မှာဖင်လေးကိုတင်ထားပြီးပေါင်လေးကားထားတယ်
ပေါင်ကြားထဲမှာမတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ခါးတွေကိုဖက်ထားရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ကိုတိုးတိုးလေးပြောတယ် “တီတီတို့နှစ်ယောက်အခွင့်အရေးရတိုင်းဒီလိုလေးနေသွားမယ်နော်”....... ပြီးတော့ အပြုံအေးအေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတယ်ဗျာ ပြီးတော့စားပွဲပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လဲအောက်ကခုန်မှာထိုင်ပြီးတော့တီတီပေါင်ဖြူဖြူလေးကြားမှာ ကြွကြွလေးပေါ်လွင်နေတဲ့အတွင်းခံလေးပေါ်ကနေ တီတီစောက်ဖုတ်လေးကိုလျှက်ပေးနေမိတာပေါ့ စားပွဲကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဖင်လေးတွေကိုမကာမကာနဲ့ကော့ကော့ပေးနေတယ်လေ တီတီစောက်ဖုတ်လေးကိုအုပ်ထားတဲ့အတွင်းခံဘောင်ဘီပိတ်သားလေးကလဲ တီတီလေးရဲ့အချစ်၇ည်ချိုမြမြနဲ့ စိုစွတ်အိစက်နေတယ်။
အဲ့လိုနဲ့ကုတင်ပေါ်ကိုတက်လိုက်တော့တီတီလေးကဒူးလေးထောက်ပေးတယ် စီးနှောင်ထားတဲ့တီတီရဲ့ဆံပင်နီကျင်ကျင်လေးကကျောပေါ်မှာကပိုပရို့ပြန့်ကျဲလို့ သေးသိမ်တဲ့ခါးလေးနောက်မှာပြည့်တင်းတဲ့ တီတီလေးရဲ့ဖင်သားအိအိလေးတွေကိုအနိုင်တနိုင်ထွေးပွေးထားတဲ့တီတီရဲ့ပိုးသားအတွင်းခံတင်းတင်းလေးရဲ့အလယ်မှာ နဲ့နဲ့လေးချိုင့်ဝင်နေတဲ့ဘောင်းဘီသားမြောင်းလေးတစ်လျောက် ကျွန်တော့်လျှာလေးနဲ့ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်တယ် တီတီလေ.......ဖင်လေးကိုရှုံပြီးတော့ကုတင်ပေါ်ကိုပက်လက်လေးလိမ့်ကျသွားတယ် ပက်လက်လေးဖြစ်နေတဲ့တီတီလေးပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ “တီတ.ီ ....” “အင်း..... ပြောလေ သားသား” “တီတီ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ခံနော် အသံလဲထွက်လို့ရတယ် ဘယ်သူမှမှအရှိတာ” “ ဟုတ်ကဲ့ပါ ရှင့်” ဆိုတဲ့စကားသံလေးကိုအပြုံးလေးနဲ့ပြောလာတယ် အပေါ်ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းပြီးတော့တီတီ နိုး ဖောင်းဖောင်းလေးကိုစို့ပေးတော့ မွေ့ရာခင်းတွေကိုဆုတ်ခြေရင်းကောကောပေးလာတယ် တီတီနှတ်ခမ်းကထွက်လာတဲ့အော်ငြီးသံလေးတွေကလည်းပဲတင်ထပ်လို့....နှစ်ယောက်အတူနူနူညံ့ညံ့ထွေးပွေ့ယုယရ င်းနဲ့အခန်းလေးလဲသက်ဝင်လာတယ်ဗျာ ။ တီတီဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်ရင်းနဲ့ပေါင်ရင်းသားဖြူဖြူလေးတွေကိုစုပ်ပေးတော့တီတီလေကျွန်တော်ခေါင်းကိုပေါင်းကြားလေးထဲမှာဆွဲကပ်ထားတယ် တီတီရဲ့ စောက်ဖုတ်နှတ်ခမ်းသားဖြူဖြူဖောင်းဖောင်းလေးကိုဟပြီးတော့အကွဲလေးတစ်လျောက်လျှာဖျားလေးနဲ့ပွတ်သပ်ပေးလို က်တဲ့အချိန်မှာ နှတ်ခမ်းလေးကိုတင်းတင်းလေးကိုက်ပြီးတော့နို့တွေကိုပွတ်ခြေနေတယ်
ပြီးတော့မှ.... “တီလေး သားသားလိုးတော့မယ်နော်” “ဖြည်းဖြည်းနော် သားသား”ဲ့ တီတီစောက်ဖုတ်ကြားလေးထဲကိုကျွန်တော်လီးခေါင်းလေးတေ့လိုက်တော့ အောက်ကနေအသာအယာလေးကော့ပေးတယ် တဖြည်းဖြည်းတိုး ၀င်သွားတဲ့ကျွန်တော်လီတစ်လျောက်မှာတီတီစောက်ဖုတ်လေးရဲ့နူးညံ့နွေးထွေးတဲ့ စိုစွတ်မှုတွေကိုခံစားလိုက်ရတယ်ဗျာ တဖြည်းဖြည်းအဆုံးထိဝင်သွားတော့တီတီခြေထောက်လေးတွေကကျွန်တော်ခါးပေါ်ကိုလာချိတ်တယ် စောက်ဖုတ်လေးထဲမှာလီးကိုစိမ်ပြီးတော့ အသာအယာလှုပ်ပေးတော့မျက်လုံးလေးမှိတ်ထဲတဲ့တီတီမျက်နှာလေးမော့လာတယ် တစ်ချက်ချင်းပြင်းပြင်းလေးဆောင့်လိးု့ ပေးတော့ တီတီနှတ်ကဆည်းလဲသံလေးတွေလဲအခန်းထဲမှာပြန့်လွင့်လို့ပေါ့ အချက်ငါးဆယ်လောက်ဆောင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတီတီလေးအသက်ရှုသံတွေမြန်လာတယ်လက်ကလဲကျွန်တော်ကိုတင်း တင်းလေးဖက်ထားရင်းနဲ့ “သား တီတီပြီးတော့မယ်ဆောင့်ပေးနော်” တီတီအသံလေးကိုကြားတော့ကျွန်တော်လဲလီးတစ်လျောက်လုံးကျင်လာသလိုခံစားရတယ်ဗျာ အဲ့လိုနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တီတီလေးကိုတင်တင်းလေးဖက်ရင်းနဲ့ဆောင့်လိုက်တာ တီတီ ဆီကသက်ပျင်းချသံလေးကိုဆွဲဆွဲငင်ငင်ကြားလိုက်ရတယ် ကျွန်တော်လဲတီတီစောက်ဖုတ်လေးကညှစ်ပေးတဲ့ခံစားမှုလေးကြောင့် အရမ်းကောင်းလာတဲ့ကျွန်တော်လီးထိပ်ကနေတီတီစောက်ဖုတ်လေးထဲမှာကျွန်တော်သုတ်ရေတွေကိုအားရပါးရပန်းထ ည့်လိုက်တယ် နှစ်ယောက်လုးံ တင်းတင်းလေးဖက်ရင်းနဲ့တီတီစောက်ဖုတ်လေးကတစ်ချက်ခြင်းညှစ်ပေးတဲ့အရသာလေးကိုခံစားရင်း
တီတီရဲ့ချွေးစို့နေတဲ့နုဖူးလေးကိုနမ်းလိုက်တော့ “သားသားရယ်......” နူးညံ့တဲ့အသံလေးတစ်သံကိုတီတီလေးရဲ့နှုတ်ကကြားလိုက်ရတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော့ရင်ခွင်ထဲမှာခေါင်းလေးဝှက်ရင်းနဲ့ ချိုမြိန်တဲ့ ညချမ်းလေးကိုအတူခံစားနေခဲ့မိတယ်.......................................................
အဲ့ဒီနေ့ကမှတ်မှတ်ရရ သောကြာနေ့ည… 11:28 pm ..……. အိပ်တော့မယ်လို့ခေါင်းအုံးပေါ်ခေါင်းချလိုက်တော့မှ ကျွန်တော့်ဖုန်း လေးကမြည်လာတယ်…………… စိတ်တော့တိုသွားမိတာပေါ့…… ဒါပေမဲ့ ဖုန်း ပေါ်က TT ဆိုတဲ့နာမည်လေးကကျွန်တော့်ရဲ့ တိုသွားမိတဲ့ စိတ်ကိုချက်ခြင်းပဲတည်ငြိမ်သွားစေတယ်။ ဖုန်း ကိုကိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သာယာနာပျော်ဖွယ်အသံလေးတစ်ခု…….. “သားသားလား……………………………..” “ဟုတ် တီလေးဘာဖြစ်လို့လဲ” “သားသားကိုတီလေးအကူအညီတောင်းချင်လို့ သားသားစိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးတော့မဖြစ်နဲ့နော်” “ပြောလေ တီလေး” “တီလေးကိုကောင်းလေးတစ်ယောက်လိုက် Q နေတယ်ကွာ” “အော် ဘယ်ကလဲ တီလေးနဲ့ရောဘယ်လိုသိသွားတာလဲ” “သူနဲ့လမ်းမတော် city mark မှာခွေဝယ်ရင်းနဲ့သိတာ” “ခွေရွေးနေရင်းနဲ့ အောက်ကိုခွေတွေပြုတ်ကျတော့ ကူညီပေး၇င်းနဲ့လေ” “ကောင်လေးက ၁၈ ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ ဆေးကျောင်းဒုတိယနှစ်တဲ့ ပြီးတော့ညတိုင်းဖုန်းဆက်လာတယ်” “ပြီးတော့မမကချစ်စရာကောင်းတယ် လို့ပြောနေတယ် သူကိုလဲအိမ်ထောင်ရှိတယ်ဆိုတာပြောပြထားတယ်” “ဖုန်းဆက်တော့လဲသူကောင်မလေးနဲ့ပြတ်သွားတဲ့အကြောင်း ပြောတယ် ပြီးတော့ Sex အကြောင်းတွေလဲမေးတယ်” “တီလေးတို့ရောထပ်တွေဖြစ်သေးလား” “နေ့တိုင်းတွေဖြစ်တယ်” “အဲ့ဒါ မမအိမ်ကိုလာလည်ချင်တယ်ဆိုလို့လေ….အိမ်ကိုလဲမပြချင်ဘူး သားသားအခန်းကိုပဲပြောလိုက်မလားလို့ …… သားသားရော ဘယ်လိုလဲ ရရဲ့လား” ကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါတယ်။ယောင်္ကျားခြင်းပဲဗျာ ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်တာပေါ့ “ရပါတယ် တီလေးဘယ်အချိန်လာမလဲ” “နေ့လည်လောက်ပေါ့” နောက်နေ့ကျတော့အိမ်သော့အပိုတစ်ချောင်းကိုတီတီလေးကိုပေးထားရင်းနဲ့ ကျွန်တော်လဲအခန်းထဲကမထွက်ပဲတစ်နေ့လုံးစောင့်နေမိတယ်။နေ့လည်
၁နာရီလောက်မှာ ကျွန်တော့်အိမ်တံခါးဖွင့်သံနဲ့အတူ တီလေးအသံကိုပါကြားလိုက်ရတယ်။ အရမ်းရင်ခုန်တယ်ဗျာ။ကိုယ်တိုင်တွေ့ရတဲ့အချိန်တောင်အဲ့လောက်ရင်မခုန်မိဘူး အခန်းထဲကချောင်းကြည့်လိုက်တော့မဆိုးပါဘူး ဖြူဖြူသန့်သန့်လေးပါပဲ ပြီးတော့တော်တော်ရင်းနှီးနေတဲ့ပုံပဲ ကျွန်တော်လည်းအခန်းထဲကမီးပိတ်ပြီးလော့ခ် ချထားရတာပေါ့ဗျာ ရောက်လာတော့ဧည့်ခန်းမှာထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတယ် ကျွန်တော်လဲသူတို့ပြောတြာ့ကားနေရတယ်ဗျ ကောင်လေးက “ မမ အမျိုးသားရော” “ခရီးသွားတယ်” “ဒါဆို မမတစ်ယောက်ထဲပေါ့” “ အင်း” ပြီးတော့ဘာသောက်မလဲဆိုပြီးတော့ နောက်ဖက်ဝင်သွားတယ်လေ ဒါဆိုကျွန်တော်လဲအိမ်သာခဏသွားချင်တယ်ဆိုပြီးလိုက်သွားတဲ့အသံကြားလိုက်ရတယ် ၁၅ မိနစ်လောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ် နောက်ဖက်ဆိုတော့အသံမကြားရဘူးဗျ ခဏကြာတော့မှနှစ်ယောက်အတူပြန်ထွက်လာတယ် ပြီးတော့မှ “မမကချစ်စရာကောင်းတယ်နော်” ပြီးတော့အသံတွေတိတ်သွားတယ်ဗျ ခဏကြာတော့မှ “အိမ်ရှေ့ကြီးကွာ” ဆိုတဲ့တီလေးအသံကိုကြားရတယ် ပြီးတော့အခန်းထဲကိုလျှောက်လာကြတယ်လေ အခန်းဆိုတာကျွန်တော်ဘေးကညီမလေးအခန်းပါ အခန်းထဲရောက်တော့ဒါဘယ်သူအခန်းလဲမမဆိုတော့ တူမလေးအခန်းတဲ့………………………………………………………………….. ညီမလေးပုံတွေတော့ချစ်စရာလေးပဲနော်တဲ့ မမလိုပဲတဲ့ တီလေးလဲတကယ်ချစ်စရာကောင်းပါတယ် ဖြူဖြူသန့်သန့်လေးပါပဲ ဒါပေမဲ့ sex ကိုတော့အရမ်းကြိုက်တယ် တီလေးဒီနေ့ဝတ်ထားတာစကတ်တိုတိုအနီလေး ပေါင်လယ်တောင်ကျော်တယ် အပေါ်ကတော့တီရှပ် ကျပ်ကျပ်လေးနဲ့ဗျာ ကျပ်နေတဲ့ တီရှပ်လေးထဲကနေ လုံးတင်းထွက်နေတဲ့ တီလေးရဲ့ နို့အုံလေးက မို့မောက်ဝင်းပလို့ ဘော်လီအနီရောင်လေးကတီရှပ်ပါးလေးပေါ်မှာ ပုံသေတကျ တိတိရိရိ………… ဖြူစင်ဖြောင့်တင်းနေတဲ့ပေါင်တံအိအိလေးကိုမနိုင်တစ်နိုင်စီနှောင်ထားတဲ့ စကတ်ပျော့လေးကကွဲထွက်တော့မယောင်ယောင်………….. စကတ်လေးထဲကနေရုန်းကန်တွန်းထွက်နေတဲ့ တီလေးရဲ့ဖင်သားအိအ်ိလုံးလုံးလေးတွေနဲ့ ဖင်သားအိအိတွေကိုထွေးပွေ့မတင်ထားတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီသားရေကြိုးရာလေးကဖင်သားအရစ်နားလေးတစ်လျောက်ဖောင်းဖောင်းလေးထင်းလို့ပေါ. အခန်းထဲရောက်တော့ကောင်လေးနဲ့ကစ်ဆင်စဆွဲတယ် ကျွန်တော်ထက်တောင်ကျွမ်းကျင်ပုံပဲ နှစ်ယောက်မတ်တပ်ရပ် ပြီးနမ်းရင်းနဲ့တီလေးတစ်ကိုယ်လုံးကိုပွတ်သပ်ပေးနေတယ် နမ်းနေရင်းစကတ်သားပျော့ပျော့လေးပေါ်ကနေဖင်လုံးလေးကိုညစ်ပေးတော့ ခါးတွေကိုကော့ပေးနေတဲ့ တီလေးရဲ့အလှက အချစ်နတ်သမီးလေးတစ်ပါးကိုယ်ဟန်ပြနေသလို လှပကြွရွလို့……… စကပ်လေးကိုမပြီးတော့ဖင်ကြားလေးထဲကိုတီလေးရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီပေါ်ကနေ သူ့ရဲ့လက်ခလယ်လေးနဲ့
ပွတ်သပ်ဆွဲယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာ…….. တီလေးဆိုကော့နေတာပဲံ ပြီးတော့တီလေးရဲ့ပေါင်တွေကိုမကိုင်ရင်းမတ်တပ်ရပ်ပြီးတီလေးကိုချီထားတယ်ဗျာ အနမ်းကတော့မပျက်ဘူး ပြီးတော့တီလေးနဲ့နှစ်ယောက်ကုတင်ပေါ်ကိုတက်တယ် တီလေးကိုကုတင်ပေါ်မှာမတ်တပ်ရပ်ခိုင်း ပြီးတော့နံရံကိုမှီခိုင်းတယ် စကတ်အောက်ကိုဝင်ပြီတော့တီလေးပေါင်တွေကိုနမ်းနေတယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်အတူထိုင်ပြီး တီလေးကိုအကျီတွေချွတ်တယ် သူပေါင်ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်ပြီးတော့တီလေး ဘော်လီအနီလေးပေါ်ကနေမို့မောက်လျှံတက်နေတဲ့ တီလေးရဲ့ နို့အုံဖောင်းဖောင်းလေးပေါ်ကိုလျှာနဲ့ယက်လို့ပေါ့ တီလေးရဲ့ ပုခုံးသားဖြူဖြူလေးထဲကိုနစ်မြုတ်အိဝင်နေတဲ့ ဘော်လီကြိုးနီနီလေးကို လက်မောင်းဘေးကိုဆွဲချရင်းတီလေးပုခုံးသားတွေကိုပါးစပ်နဲ့ စုပ်ယူပွတ်သပ်နေတယ်။ ပွတ်သပ်နေရင်းပဲတီလေးနောက်ကျောက ဘော်လီချိတ်လေးကိုဖြုတ်ချလိုက်တော့ ဖွေးနေတဲ့တီလေးရဲ့နို့အုံ အိအိလေးပြီးတော့ နို့အုံရဲ့အလယ်ကလှလှပပလေး ပြည့်တင်းဆူတက်နေတဲ့ ပန်းနုရောင်နို့သီးခေါင်းလေးက အထိန်းအကွတ်မဲ့ စွာနဲ့ အရိုင်းဆန်ဆန်လေးပြိုအိကျလာတယ်လေ။ သူပေါင်တွေပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့တီလေးနို့တွေကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းခပ်ရိုင်းရိုင်းလေးစုပ်ဆွဲလိုက်တော့ တီလေးတစ်ယောက်သူကိုဖက်ရင်းနဲ့ကောကော့ပေးနေလိုက်တာ….. မီးရောင်ဝါ၀ါလေးရဲ့ ရွှေဝါရောင်အလင်းခပ်မှိန်မှိန် ကအခန်းထဲမှာပက်ဖြန်းလို့………… လေအေးပေးစက်ရဲ့အေးမြလက်ဆတ်တဲ့ လေနုအေးလေးတွေနဲ့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ အခန်းလေးထဲမှာ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ သူစိမ်းယောင်္ကျားပျိုတစ်ယောက်ရဲ့အထိအတွေ့အယုအယတွေ…. ဆူတင်းပြည့်ဖြိုးပြီးအရွယ်တင်နုပျိုနေတဲ့ ဦးလေးရဲ့ဇနီး ကျွန်တော့်ရဲ့ တီတီလေး……. တီလေးရဲ့ အဖြူရောင်တီရှပ်လေးက ကုတင်ဘေးကြမ်းပြင်မှာကပိုကရို ၊ဘေးမှာတော့ အနီရောင် ဘော်လီလေးက သူထွေးပွေ့ထားရတဲ့ နို့အုံဖြူဖြူလှလှလေးနဲ့ ကဗျာဆန်တဲ့အလှပိုင်ရှင်တီလေးကိုငေးမောနေသယောင်ယောင်…… တီလေးရဲ့ ချစ်စရာမျက်နှာလေးပေါ်မှာတော့ ရမက်ပြင်းပြင်းတွေရဲ့ခြယ်မှုန်းမှုကြောင့် ပန်းနုရောင်လေးနဲ့ နုပျိုလို့ ရင်ဖိုလှိုက်မောနေတဲ့ ရင်သားအစုံကနိမ့်တုံမြင့်တုံ …… လည်ပင်းကိုမော့ရင်းမှိတ်ထားတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ နီထွေးတဲ့ ခပ်ဟဟနှုတ်ခမ်းတစ်စုံက တီလေးရဲ့ခံစားချက်တွေကို လှစ်ဟ၀န်ခံနေတယ်လေ။ အို………………………………အားလုံးဟာ ဂန္တ၀င်ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ အနုပညာရသအပြည့်နဲ့ နှလုံးသားကိုဖွင့်လို့ရေးဆွဲထားတဲ့ပန်းချီကားတစ်ချပ်လိုပါပဲ။ အဲ့ဒီပန်းချီကားလေးကိုခံစားချက်တွေရင်ခုန်မှုတွေနဲ့ ငေးမောနေမိတဲ့ကျွန်တော့်ရင်တဲ့မှာတော့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအသစ်တွေနဲ့ တလှုပ်လှုပ်ခံစားရင်းအရည်တွေစို့နေတဲ့ ကျွန်တော့ ရဲ့လီးကိုခပ်တင်းတင်းပဲဆုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်နေမိတယ်။
ပြီးတော့သူလေ….တီလေးကိုကုတင်ပေါ်လှဲချရင်းတီလေးလက်ကိုယူပြီးတော့သူလီးကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်နဲ့ဂွင်းထုခိုင်း တယ် ခဏကြာတော့ ကုတင်ပေါ်မှာပက်လက်လေးလှဲချလိုက်တဲ့သူပေါင်ကြားမှာ တီတီလေးကဖင်လေးကုန်းလို့ပေါင်ကြားထဲကလီးကိုစုပ်ပေးနေတာတော်တော်ကိုကြာတယ် တီလေးစကတ်လေးကဖင်ပေါ်ကိုလိပ်တက်နေပြီးတော့အတွင်းခံပန်းရောင်လေးနဲ့ဗျာ ကုန်းနေတဲ့ဖင်လေးကပြည့်ပြီးလုံးနေတာပဲ လေးဘက်ထောက်ထားတော့ တီလေးရဲ့ နို့ အိအိလေးတွေကတွဲကျလို့ရမ်းခါနေတယ်။ သူခြေမတွေနဲ့တီလေးစောက်ဖုတ်ကိုမှန်းပြီးပွတ်ပွတ်ပေးနေတယ်လေ။
ပြီးတော့တီတီလေးကိုသူမျက်နှာပေါ်မှာထိုင်ခိုင်လိုက်တယ်မျက်မှာပေါ်မှာခွလျှက်အနေအထားဖြစ်နေတဲ့တီတီစောက်ဖု တ်တွေကို ဘောင်းဘီပေါ်ကနေယက်နေတယ်ထင်တယ် စကတ်နဲ့အုပ်ထားတော့သေချာမမြင်ရဘူးဗျ တီလေးတစ်ယောက်နံရံတွေကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဖင်ကိုလှုပ်ပေးနေတာပဲမြင်တယ် ပြီးတော့သူဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့တီလေးစကတ်ကိုချွတ်လိုက်တော့ မမ ဘောင်းဘီမချွတ်နဲ့ဒီတိုင်းလေးထားနော်တဲ့ နှစ်ယောက်အတူကုတင်ပေါ်မှာအိပ်ပြီးတော့နို့တွေကိုနယ်နေတယ်လေပြီးတော့မှ တီလေးစောင်ဖုတ်လေးကိုတီး လေးရဲ့အတွင်းခံပေါ်ကနေလက်နဲ့ပွတ်နေတယ် တီလေးရဲ့ခါးပေါ်ကိုလိပ်တက်နေတဲ့ စကတ်ရဲရဲလေးကိုချွတ်ပေးတော့ဖင်လေးမြှောက်ပေးတဲ့ အချိန်မှာဆီးခုန်ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့အပြိုင် စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးတွေကအတွင်းခံဘောင်းဘီလေးထဲကနေရုန်းကြွလို့နေတယ်။ စကတ်နီနီလေးပြီးတော့တီလေးရဲ့အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေးကိုခါးသားရေကြိုးလေးကနေကိုင်လို့ချွတ်ပေးလိုက်တော့ ပြောင်တင်းနေတဲ့ ဆီးခုန်လေးအောက်မှာအမွေးလေးရိတ်ထားတဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းမို့မို့လေးကထင်းထင်းလေးပေါ်လို့လာတယ်။ ပြီးတော့တီလေးပေါင်ကိုဟလိုက်တဲ့အချိန်မှာ တီလေးကဒီတိူင်းဆိုမထည့်နဲ့နော်ဆိုတော့ သူပိုက်ဆံအိပ်ထဲကကွန်ဒုံးကိုထုပ်ပြီးတောစွပ်တယ်ဗျ တီလေးပေါင်ကြားမှာထိုင်ပြီးတော့ စောက်ဖုတ်လေးကိုသူလီးနဲ့တေ့ပြီးတော့ တစ်ချက်ထဲပဲဗျာဆောင့်လိုက်တာ တီလေးလဲနာသွားတယ်ထင်တယ် မျက်နှာလေးမဲ့သွားတယ် ပြီးတော့တီလေးကိုဖက်ါပြီးတော့အပေါ်ကနေဆက်တိုက်ဆောင့် နေတော့တာပဲဗျာ ခဏလေးပဲဗျ အချက် ၂၀ လောက်ဆောင့်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ထင်တယ် သူလဲဘေးကိုလှဲချပြီးတော့မှိန်းနေတယ် တီလေးကတော့မပြီးသေးဘူးထင်တယ် ခဏနေတော့မှ ရေသွားဆေးအုံးမယ်ာ့ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်ဗျ တီလေးလဲသဘက်လေးနဲ့ပတ်ပြီးအပြင်ထွက်သွားတယ် ပြီးတော့အခန်းထဲပြန်လာပြီးတော့အ၀တ်တွေပြန်ဝတ်နေတယ် ပြီးတော့ ညီမလေးဘီဒိုကိုဖွင့်ပြီးတော့ရှာ နေတယ်ဗျ ကျွန်တော်လဲဒီဖက်ကနေပြောလို့ကလဲမရဘူးလေ တီလေးကလဲမလာသေးဘူး ခဏနေတော့ဘီဒိုထဲကညီမလေးအတွင်းခံ အနီရောင်လေးကိုယူပြီးတော့သူအတွင်းခံထဲမှာဝှက်သွားတယ်ဗျာ ပြီးတော့မှတီလေးဝင်လာတယ် သူတို့နှစ်ယောက်စကားခဏပြောပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဗျ သူပြန်သွားတော့မှကျွန်တော်လဲအပြင်ထွက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့မပြီးသေးဘူးတဲ့ ခံစားရတာတော့တစ်မျိုးလေးပဲတဲ့ အသစ်အဆန်းလေးတဲ့ အဲဒါနဲ့ ညီမလေးအခန်းထဲကိုကျွန်တော်နဲ့တီလေးနှစ်ယောက်ဝင်သွားတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်လဲတော်တော်ကောင်းနေပြီလေ အဲ့ဒါနဲ့ တီလေးကိုကုတင်ပေါ်မှာအိပ်ခိုင်း ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်လိုးတော့တာပါပဲ တီလေးစောက်ဖုတ်လေးကခံစားချက်တွေကြောင့်စိမ့်ထွက်စီးဆင်းလာတဲ့အချစ်ရည်ပျစ်ချွဲချွဲလေးတွေကြောင့် ချောအိလို့နေတယ်။ တီလေးရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကိုကျွန်တော့လီလေးတေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲနှုတ်ခမ်းလေးကိုက်လို့….. ရမက်တွေရဲ့စေစားမှုတွေကြောင့်ဖင်လေးကော့လို့ ၀င်လာမဲ့ကျွန်တော့်လီးလေးကိုစောင့်ကြိုနေလေရဲ့
လီးခေါင်းလေးဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ပွင့်လာတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့အတူ ချစ်စရာကောင်းတဲ့တီလေးမျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးလေးတစ်ပွင့်…….. လှပပွင့်အာနေတဲ့ နှင်းဆီပွင့်ဖတ်လေးတွေလို ကျွန်တော့်လီးကိုစုပ်ငုံထွေးအိထားတဲ့ တီလေးရဲ့စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေး…. ရှေ့ကိုတိုးဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့လီးကိုထွေးပွေ့လို့ ဆွဲငင်စုပ်ယူလိုက်ပါလာတဲ့ တီလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတစ်စုံ ….အားလံုး ဟာကဗျာဆန်နေလိုက်တာ။ တီလေးကိုယုယုယယပွေ့ဖက်ရင်းစောက်ဖုတ်လေးကိုဆောင့်လိုးနေမိတော့ ခပ်ရေးရေးလေးဟနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံဆီက တိုးတိတ်ညင်သာတဲ့ တီလေးရဲ့ အော်ငြီးသံလေးတွေက ကာရံမိမိရွတ်ဆိုနေတဲ့ အချစ်ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို နောက်ကနေပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ ဂီတသံစဉ်လေးတစ်ပုဒ်ကိုကြားလိုက်ရသလိုပါပဲ ရမက်ပြင်းပြင်းတွေထန်နေတဲ့ တီတီလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အထွဋ်အထိပ် ခံစားမှုလေးဟာလဲတစ်ဖြေးဖြေးနီးကပ်လို့လာတယ်လေ။ ခံစားချက်တွေနောက်ကိုအလှိမ့်လှိမ့်ကူခပ်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုတင်းတင်းလေးပွေ့ဖက်လို့ မို့မောက်ဖောင်းအိနေတဲ့ တင်သားဆိုင်တွေကိုအဆက်မပြတ်ကော့ရင်း ဆွဲဆွဲငင်ငင်အော်ညီးသံအဆုံးမှာတော့….. “အား …..တီလေးပြီးပြီသားသားရယ်” တီလေးရဲ့ စကားသံတွေနဲ့အတူ တင်းတင်းလေးစုပ်ယူဖျစ်ညှစ်လာတဲ့ တီလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်အထ်ိအတွေတွေ့ကြောင့်ကျွန်တော့်လီးတစ်လျှောက်လုံးကျင်တက်လာတယ်လေ။ ဆောင့်ချက်ပြင်းပြင်းတွေရဲ့အဆုံးမှာ လှပကြော့ရှင်း တဲ့ တီးလေးရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်းကျွန်တော့်လီးရေနွေးနွေးလေးတွေကို တီလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်အတွင်းပိုင်းထဲ့ညှစ်ထုတ်လိုက်မိတယ်။ တီလေးရဲ့နို့အုံလေးတစ်ခုလုံးပြားသွားတဲ့အထိကျွန်တော့ကိုပွေ့ဖက်ရင်း “အရမ်းခံလို့ကောင်းတာပဲသားသားရယ်………… ။
ကျွန်ေတာ်မိ့န်းမ ကျွန်တော့်မိန်း မက အသက်(၃၀)လောက်ရှိပြီ။ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးရေဆေးငါးလေးပဲ။ sex ကိစ္စကို သွားမစမခြင်းတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး စလိုက်မိရင်တော့မရတော့ဘူး။ သူ့ကို နှုတ်ခမ်းတွေစုပ် နို့တွေစုပ်ပြီး လိုက်ပွတ်သပ်လိုက်ရင် အရည်တွေရွှဲလာတော့တာပဲ။ သူက မှုတ်တဲ့အရသာကိုအရမ်းကြိုက်တာဗျ။ သူ့ကို လူးနေအောင်မှုတ်ပေးရင် (၅)ခါ(၆)ခါလောက် ဆက်တိုက်ပြီးတာ။ ကျွန်တော်မှုတ်ပေးတာကျွမ်းကျင်တာလဲပါမှာပေါ့လေ။ ကျွန်တော့မိန်းမပုံစံကလည်းမိုက်တော့ ဘဲတွေကလည်းသူ့ကိုကြိုက်ကြတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ ထူးခြားချက်က ခဏခဏ ပြီးတယ်။ သူဖီးတက်နေလို့ကတော့ အရမ်းကိုပြီးတာ။ ကျွန်တော်ကြားဖူးတာ တစ်ချို့မိန်းမတွေက တစ်ခါပြီးသွားရင် ဖီးသိပ်မလာကြတော့ဘူးလို့ကြားဘူးတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမကတော့အဲဒါနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဖက်ပဲ။ သူကအမှုတ်ခံရင် ဖွဖွလေးလိုက်ကလိပြီး သူ့ဟာလေးကိုလျှာ နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့လိုက်ပွတ်ပြီးဆွပေးတာကိုအရမ်းကြိုက်တယ် နှုတ်ခမ်းတွေကို ထော်အောင် စူအောင်လုပ်ထားပြီးတော့ သူ့ဟာလေးကို စက်ဝိုင်း ပုံဖွဖွလေးလိုက်ပွတ်နေရင် အော်နေတာပဲ။ မှုတ်ခံရင်လဲ အကြာကြီးအမှုတ်ခံနိုင်ပြီး ခဏခဏပြီးပြနေတော့ ကျွန်တော်ကလဲ အကြာကြီးမှုတ်ချင်တာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကလည်း အသင့်အတင့်ကြီးတော့ သူ့ထဲကိုထည့်လိုက်ရင် စီး
နေပြီးတော့ လုပ်ရတာအရမ်းကောင်းလွန်းလို့ တခြားဆော်နဲ့ လုပ်ခြင်စိတ်တောင်မရှိဘူး ။ ကျွန်တော့်မိန်းမက လေးဖက်ထောက်ကုန်းပြီး သူ့ခါးလေးကိုညွှတ်ပြီး ပြန်ကော့ပေးတဲ့ပုံက သူလဲခံလို့ကောင်းပြီး ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲဒီပုံစံမျိုးနဲ့ ပြီးချင်လွန်းလို့ ကြာကြာတောင်မလုပ်နိုင်ဘူး ။ ကောင်းလွန်းလို့ ခဏခဏနားပြီးမှ ပြန်လုပ်ရတယ်။ ကုန်းပေးလိုက်ရင် သူ့ခါးလေးကသွယ်တော့ ဖင်လေးက ကားပြီးထွက်လာတာကိုကြည့်ပြီး ခါးလေးကို ဆွဲဆွဲလုပ်ရတဲ့အရသာနဲ့ သူအော်နေတဲ့အသံ ခံလို့ကောင်းလို့ ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့ပုံစံလေးတွေက ကျွန်တော့်အတွက်ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့အရသာတွေပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်ကို အပေါ်ကတက်လုပ်ရင် ကျွန်တော်က အောက်ကနေကော့ကော့ပေးပြီး သူက မဆောင့်ပဲကြိတ်ပြီးပွတ်ဆွဲနေရင်ကြတော့ သူကခဏလေးနဲ့ပြီးတာ။ အဆုံးအထိဝင်နေသလိုမျိုးခံစားရပြီး အရမ်းကောင်းလို့တဲ့။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်အရမ်းပြီးချင်ပြီးမခံနိုင်ရင် သူ့ဟာလေးထဲကို လက်ချောင်းတွေနဲ့လိုက်မွှေပြီး သူပြီးအောင်အရင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ လက်နှစ်ချောင်းလောက်ထည့်ပြီး သူ့ဟာလေးထဲ ဟိုဖက်ဒီဖက်လျှောက်မွှေလိုက်ရင် သူတော်တော်ကြိုက်တယ်။ ဒါတွေကတော့ ကျွန်တော့်မိန်းမအကြိုက်လေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်အကြိုက်တွေပါ။ အခုဆက်ပြောမှာတွေက ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရတာ (၁)နှစ်လောက်ရှိလာတော့ ကျွန်တော်သတိထားမိတာက ယောကျာင်္းလေးတွေက သူ့ကိုကြိုက်ကြတယ် ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတာကို သတိထားမိလာတယ်။ သူကလဲ ဘော်ဒီပြည့်ပြည့်နဲ့ ရုပ်မိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆိုရင် ပိုခင်တာကိုတွေ့လာရတယ်။ သူ့အကြိုက်ကအဲဒီလိုပုံစံဆိုတာကျွန်တော်သိလာရတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲသေသေချာချာ သိရအောင်လို့ ကျွန်တော့်အလုပ်က ရုပ်ရည်နဲ့ဘော်ဒီသိပ်မမိုက်ပေမယ့် ရေလျှံတဲ့သူငယ်ချင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးကြည့်တယ်။ သူကအဖက်တောင်မလုပ်ဘူး သူ့ကိုလုံးဝကြည့်လို့မရဘူး မခင်ဘူးလို့ ကျွန်တော့်ကိုပြောတယ်ဗျ။ သေချာသွားပြီပေါ့ သူ့အကြိုက်ဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်သိပြီ။ ဒီလိုနဲ့ new year တစ်ရက်မှာ ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းလေးယောက် ချောင်းသာကိုသွားဖို့ စီစဉ်ကြတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမက သူလဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးအတင်းဂျီကြတယ်။ ကျွန်တော်ကယောကျာင်္းလေးတွေပဲသွားမှာ မလိုက်ပါနဲ့လို့ပြောတာ ပြောလို့မရတာနဲ့ခေါ်လာခဲ့ရတယ်။ ချောင်းသာမှာ ဆိုတော့ သူကလည်း စကတ်အတိုနဲ့ ရေထဲဆင်းရင်လဲဘောင်းဘီအသားကပ်တိုတိုလေးနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်းသူအဲဒီလိုဝတ်တာလေးကို ဖီးတွေတက်ပြီးဘာမှမပြောပဲထားလိုက်တယ်။ ရေထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေအတူတူရေဆော့ကြတာပေါ့။ သူကကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ရုပ်ပိုဖြောင့်တဲ့တစ်ယောက်နဲ့ပိုရောတာကိုတော့ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။ ဒါနဲ့ နောက်တစ်နေ့ ညနေဖက်ရေဆော့နေကြရင်း ကျွန်တော့်မိန်း မနဲ့ပိုခင်တဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက ကမ်းပေါ်မှာအုန်းရည်သောက်နေတဲ့အချိန် သူလည်းအုန်းရည်သောက်ခြင်တယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်မိန်း မက ကမ်းပေါ်လိုက်တက်သွားတယ်။ နောက် သတိရလို့သူတို့ကိုမတွေ့တဲ့အခါကြတော့မှ ကျွန်တော်လဲကမ်းပေါ်တက်ပြီးလိုက်ကြည့်တဲ့အခါကြတော့မှ သူတို့နှစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို့တည်းတဲ့ အခန်းရှေ့မှာ အုန်းရည်သောက်ရင်းထိုင်စကားပြောနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ အုန်းရေသောက်ရင်းထိုင်စကားပြောနေတာအဆန်းမဟုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ နေထိုင်ပုံကဆန်းနေတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက အခန်းရှေ့က ကပြင်မှာထိုင်နေတယ် ကျွန်တော့်မိန်းမက ခုံပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်က မိန်းမ၀တ်ထားတဲ့အ၀တ်အစားက2piece လို့ခေါ်တဲ့ အပေါ်ပိုင်းက ခါးပေါ်တဲ့ရေကူးဝတ်စုံအကပ်လေးနဲ့ အောက်ကစကတ်အတိုအောက်မှာ အောက်ခံဘောင်းဘီတိုလေးပါတဲ့ ၀မ်းဆက်ဝတ်စုံလေး။ သူကအပေါ်ကနေထိုင်နေတဲ့အခါ အောက်စလွတ်ပြီး သူ့ပစ္စည်းကို မြင်ရလုနီးပါးဖြစ်နေပြီ။
ကျွန်တော်လဲကြည့်ပြီး ကတုန်ကယင်တွေဖြစ်သွားတယ်။ သူ့အနေအထိုင်ပုံစံကိုဆူမလို့လုပ်ပေမယ့် မဆူဖြစ်လိုက်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ရန်ကုန်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။ ချောင်းသာကပြန်လာတဲ့ညမှာပဲ သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆွဲကြတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်က သူ့ကိုမှုတ်ပေးရင်းနဲ့ ကိုတို့လိုးနေတာကို တခြားဘဲကချောင်းကြည့်နေရင်ဘယ်လိုနေမလဲလို့ မေးလိုက်တယ်။ သူက ဖီးလာဖို့ကောင်းတဲ့ဘဲမျိုးကြည့်နေရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲလို့ပြန်ပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်က သူနို့တွေဘာတွေပေါ်နေရင် အောက်စလွတ်နေရင် မိုက်တဲ့ဘဲတွေကကြည့်နေရင် ဘယ်လိုနေမလဲလို့မေးကြည့်တော့ တစ်မျိုးကြီးတော့ဖြစ်မှာပေါ့လို့ ပြန်ပြောတယ်။ အဲဒီလိုသူပြန်ပြောတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာဖိန်းတိန်း ရှိန်းတိန်းတွေဖြစ်နေပြီး ဖီးတွေလဲ ပိုတက်သလို ခံစားလာရတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုတို့လိုးနေတာကို ဟိုကောင်တွေချောင်းကြည့်ရင်ဖီးတက်မှာလားဆိုပြီး ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ မပြောတတ်ဘူး ကိုကြည့်စေချင်ရင် ကြည့်ခိုင်းပေါ့လို့သူကပြန်ပြောတယ်။ ကျွန်တော်လဲဖီးအရမ်းကိုတက်ပြီးမှုတ်ပေးလိုက်တယ် ပြီးတော့သူ့ကိုစည်းရုံးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာလဲ ကျွန်တော့်မိန်းမဖီးအရမ်းတက်တယ် ဆိုတာကို သူငယ်ချင်းတွေကို ပြချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ မိန်းမအပေါ်မှာ လွန်လွန်ကဲကဲဖီးလာလွန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေပဲထင်ပါတယ်ဗျာ ....အဲဒါနဲ့ပဲ တစ်ညမှာ သူနဲ့ပိုခင်တဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လင်မယားနဲ့ ဘီယာသောက်ကြရင်း ကျွန်တော်ကစားပွဲဝိုင်းမှာ မိန်းမကိုနောက်ရင်းပြောင်ရင်းနဲ့ လျှောက်ကလိတယ်။ မိန်းမက မလုပ်နဲ့လေ ဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲဒီလောက်သောင်းကျန်းနေတာလဲလို့ ရီရီမောမောနဲ့ပဲပြောပြီး ကျေနပ်နေတယ်လေ။ နောက်ကျွန်တော်လဲသူ့ကို အကဲစမ်းချင်တာရယ် ကျွန်တော်ဖီး လာတာရယ်ကြောင့် သူငယ်ချင်းရှေ့မှာပဲ kissing ဆွဲပြစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူကပုံမှန်အတိုင်းပဲ kiss ကျွန်တော့်ကိုပြန်ပေးပြီး ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကြည့်နေတာကို သတိတောင်မထားတဲ့ပုံစံမျိုးကြောင့် ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးထူပူပြီးဖီးတွေစောက်ရမ်းတက်လာတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကလဲ ငါကတော့ကြည့်နေမှာနော် မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့အခန်းထဲ သွားရင်သွားကြလို့ပြောနေပေမယ့် ကျွန်တော့်မိန်း မကတော့နည်းနည်းပါးပါးရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်တာကလွဲပြီး ဘာမှမပြောပဲစားပွဲမှာပဲဆက်ထိုင်နေတယ်။ မိန်းမကတော့နည်းနည်းလေးမူးနေတဲ့ ပုံစံတော့ပေါက်နေတယ် အရမ်းတော့လဲမမူးပါဘူး။ သူကအဲဒီလိုသောက်တတ်တဲ့သူမဟုတ်တော့ ဘီယာတစ်ခွက်လောက်သောက်ရင်ကို မူးချင်နေတာ။ ကျွန်တော်လည်း kiss ပေးတာရပ်လိုက်ပြီး သူ့ကိုဖက်ထားရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့စကားပြန်ပြောနေလိုက်တယ်။ နောက် ဖက်ထားရင်းနဲ့ သူ့နို့လေးတွေကို လိုက်နှိုက်ပြီးပွတ်ပေးနေလိုက်တယ် မိန်း မလဲ ကျွန်တော့်ကိုမှီပြီးဖီးယူနေတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကသူ့ကိုနို့နှိုက်နေရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းကိုစကားပြောရင်း သူဖီးတက်နေတာကိုမျက်စပြစ်ပြလိုက်တယ်။ သူငယ်ချင်းကမျက်လုံးကြီးပြူးပြပြီးဘာမှမပြောပဲ အကဲခတ်နေတာပေါ့။ မိန်းမက ဖီးတွေတက် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကလဲထိုင်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာရင်တွေတော်တော်ခုန်လာတယ် ဖီးတွေလဲအရမ်းတက်လာတယ်။ မိန်းမရဲ့နို့ကိုကိုင်နေရတာထက် လွန်ကဲတဲ့ဖီးတွေတက်နေတာကို သတိထားမိတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်က သူ့ကိုဖီးတွေတက်နေရင် နို့စုပ်ပြစ်လိုက်မှာနော်လို့ တိုးတိုး လေးပြောလိုက်တယ်။ သူကဘာမှပြန်မပြောဘူး။ ကျွန်တော်က ငြိမ်နေရင် နို့စုပ်ပြစ်လိုက်မှာနော်လို့ သူငယ်ချင်းကြားအောင်နဲ့ သူငယ်ချင်းကိုနောက်ပြီးပြောသလိုမျိုးထပ်ပြောလိုက်တယ်။ သူကဘာမှပြန်မပြောပဲ ငြိမ်နေတာနဲ့ကျွန်တော်လဲသွေးတိုးစမ်းပြီး ကျွန်တော်တို့ဘီယာသောက်နေတဲ့ဝိုင်းမှာပဲ လည်နည်းနည်းဟိုက်နေတဲ့
သူ့အကျီ င်္ ထဲကနေ သူ့နို့လေးကိုအပေါ်ကိုပေါ်ရုံဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ဖွဖွလေးလိုက်စုပ်လိုက်တယ်။ မိန်းမကအဲဒီအချိန်မှာ တကယ်ကိုဖီးတက်နေပြီဆိုတာ သူ့အသံကြားလိုက်ရတာနဲ့ကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်။ ကျနော်ကတော့ ကျနော့မိန်းမကိုဖီးလာအောင်နည်းမျိုးစုံနဲ့လုပ်ပေးရတာကိုကြိုက်တယ်။ သူ့ကိုလိုးတဲ့အချိန် သူဖီးမလာရင်ကျနော်လုံးဝမပြီးဘူး။ သူတအားဖီးတက်လာပြီဆိုရင်တော့ ခဏနေရင်ကျနော်လည်းပြီးတော့တာဘဲ။ သူ့အရသာမျိုးစုံခံစားနိုင်ဘို့ နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးတယ်။ ဂျာတာကလည်းအမြဲဘဲ။ မ၈ျာရရင် လီးတောင်မတောင်ဘူး။ မီးဝါမီးနီလည်း ဘယ်တော့မှ မရျောင်ဘူး။ တကယ်ကြိုက်လာရင် မီးနီဖြတ်တုံး၈ျာလိုက်လို့ ပါးစပ်ကြီးရဲသွားလည်း ကွမ်းစားတာထက်မပိုတော့ဘူး။ ကိုယ့်မိန်းမကောင်းစားဘို့ ဈေးထဲက ကိုယ့်လီးထက်အများကြီး ကြီးတဲ့ ခရမ်းသီးနဲ့လည်းလိုးပေးဘူးတယ်။ ခုဆို အိမ်မှာ ၃၈လမ်း ထိပ်ကဆိုင်က၀ယ်ထားတဲ့ လီးတုလည်းရှိတယ်။ သူ့စောက်စိကိုစုပ်ပေးနေရင်းနဲ့ အဲဒီလီးတုနဲ့ အပီထောင်းရင် မိန်း မမှာ နိဗါန် အခါခါရာက်တော့တာဘဲ။ လီးတုနဲ့လိုးပြီး သူဝလောက်မှ ကိုယ့်လီးအစစ်နဲ့ ဆက်လိုးပေးရတာ သူ့မှာတော့ကောင်းပြီးရင်းကောင်းရင်းပေါ့။ ကိုယ်မရှိတုံး ထလာရင်လည်း သူ့ကို လီးတုနဲ့ ကိုယ့်ဖါသါလိုးလို့မှာထားတယ်။ သူတကယ်လုပ်ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူး။ သူကတော့မလုပ်ဘူးပြောတာဘဲ။ ရှက်လို့မပြောတာလားတာ့မသိဘူး။ အိမ်မှာသူကြိုက်တဲ့အချိန်ကြည့်လို့ရအောင်ိန်ပျူတာထဲမှာ အောကားမျိုးစုံ၊ အောစာအုပ်မျိုးစုံထည့်ပေးထားတယ်။ သူနဲ့ ညားတာ ၁၇ နှစ်ရှိပြီ၊ ညားပြီးကတည်းက သူ့တယောက်ကိုဘဲလိုးခဲ့တာ။ တခြားဘယ်မီန်းမမှမလိုး တော့ဘူး။ ဆော်တွေ ရှေ့က ဖြတ်ရှောက်ရင် လင်မယားနှစ်ယောက် နို့တွေဖင်တွေကိုဝေဖန်တာဘဲ။ ပြီး ထလာတော့လည်း အိမ်ပြန်ရောက်တော့လိုးလိုက်တာပေါ့။ ကလေးသုံးယောက်ရနေပါပြီး စိတ်တိုင်း ကျလိုးကောင်းတုံးပါဘဲ။ အဲဒါနဲ့အခန်းထဲသွားမယ်လေလို့ပြောလိုက်တော့သူကအခန်းထဲကိုအရင်ဝင်သွားတယ် ကျွန်တော်လဲသူငယ်ချင်းကို မင်းအခွေကြည့်ချင်ကြည့် မကြည့်ချင်လဲချောင်းပေါ့ကွာလို့ပြောပြီး အခန်းထဲ ၀င်သွားလိုက်တယ် ... ကုတင်ပေါ်ရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ကိုလိုက်ကလိတာပေါ့ဗျာ။ မိန်းမလဲဖီးတွေသိပ်တက်နေတာနဲ့ သူ့ဘောင်းဘီလေးချွတ်ပြီး ကျွန်တော့်လီးကြီးစထဲ့လိုက်တယ်။ အသာလေးချော့ပြီးထဲ့ထားပြီး သူ့အပေါ်ကနေ kiss တွေလိုက်ပေးရင်း အပြင်မှာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ( ----) ကြည့်နေတယ်။ ရှက်လားလို့မေးတော့ သူကခေါင်းခါတယ်။ သူချောင်းကြည့်နေရင် ဖီးတွေပိုတက်မှာလားလို့မေးတော့ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်အရမ်းကိုဖီးလာပြီး အရမ်းထန်နေပြီ။ လီးကလဲမာတောင်နေပြီ။ သူခေါင်းငြိမ့် ခေါင်းခါလုပ်တာနဲ့တင် ကျွန်တော့်မှာ ပြီးချင်နေပြီ။ ကျွန်တော့်မိန်း မဖီးတွေတက်ပြီး ကျွန်တော်လိုးတာကိုခံနေတဲ့ပုံလေးကို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကိုပြချင်တဲ့စိတ်ကလည်း အရမ်းကိုပြင်းထန်နေပြီ။ ထူးခြားတဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ ဖီးတွေတက်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူကလဲ သူခံနေတာကိုပြချင်နေသလို ကျွန်တော်ကလည်း မိန်းမအရမ်းဖီးတက်ပြီးခံနေတဲ့ပုံကို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ့စေချင်နေတယ်။ ဒါနဲ့ အခန်းတံခါးကိုမပိတ်ပဲ ဟထားပြီးမိန်းမကိုဖီး ပိုတက်လာအောင် မထိတထိလေးအသာလေးထဲ့လိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်ပြီး ဆွနေလိုက်တယ်။ မိန်းမရဲ့ဖီးတက်တဲ့အသံကိုကြားတဲ့ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကလဲ အခန်းအပြင်ကနေမသိမသာလှမ်းလှမ်း ကြည့်လိုက် တီဗွီကြည့်လိုက်နဲ့ပေါ့။ နောက်တော့ကျွန်တော် မိန်းမအပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီး ကုတင်အောက်ကနေဆင်းပြီး သူ့ပေါင်လေးကိုအရမ်းဖြဲကားခိုင်းပြီးမှုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့ကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကြီးအခန်းအပြင်ကနေမြင်နေရတဲ့အခါကြတော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကလည်း ခဏခဏလှည့်ကြည့်နေတာနဲ့ ကျွန်တော်ကမိန်းမကိုမှုတ်ပေးနေရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းကိုချောင်းကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကို အချက်ပြလိုက်တယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် အဲဒီလိုလုပ်ဖို့မလွယ်ပေမယ့်လဲ ကျွန်တော်ရော မိန်းမရော ဘယ်လိုဖီးတွေတက်နေမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူးဗျာ။ သူငယ်ချင်းက သူချောင်းကြည့်နေတာကို မိန်းမမြင်မှာစိုးလို့ထင်တယ် အခန်းမီး
ပိတ်လိုက်ပြီး အခန်းဝအောက်ဖက်ကနေလာချောင်းကြည့်တယ်။ သူငယ်ချင်းချောင်းကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ မိန်းမကမျက်လုံးတော့လုံးဝဖွင့်မကြည့်ပဲ ဖီးကိုပဲအပြည့်ခံနေတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သူငယ်ချင်းချောင်းကြည့်နေတာကိုသိနေတော့ ဖီးတွေပိုတက်လာပြီး မိန်းမကို စိတ်ကြိုက်ကိုမှုတ်ပေးနေတယ်။ မှုတ်နေရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းကို လက်နဲ့အချက်ပြပြီး မင်းရောလီးတောင်နေလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မေးလိုက်တယ်။ သူငယ်ချင်းက ခေါင်းငြိတ်ပြတာနဲ့ ကျွန်တော်ကလက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့သူလီးတောင်နေတာကိုပြခိုင်းတယ်။ သူငယ်ချင်းက စစခြင်း မပြပဲ နောက်တော့သူလဲဖီးတက်လာတယ်ထင်ပါတယ် သူလီးတောင်နေတာကို ကျွန်တော့်ကို နဲနဲလှမ်းပြတယ်။ အဲဒီတော့မှ သူလဲကြည့်ပြီးဖီးတော်တော်တက်နေတာကိုသိလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ မိန်း မပေါ်ပြန်တက်ပြီးလိုး ရင်းနဲ့ ( ----- ) ကြည့်နေတာ ဖီးတွေတက်ပြီးလီးတောင်နေတာပဲလို့ သူငယ်ချင်းချောင်းကြည့်နေတာကိုပြောပြလိုက်တယ် .သူကဘာမှပြန်မပြောဘူး။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ( ---- ) ချောင်းကြည့်နေတာကို မိန်းမဖီးတက်လားလို့မေးလိုက်တော့ တက်တယ်လို့ဖြေတယ်။ သူ့လီးကြီးတောင်နေတာပဲ မကြည့်ချင်ဘူးလားလို့မေးတော့ မိန်း မက ကိုကလဲ ဘာတွေမေးနေမှန်းမသိဘူးလို့ဖီး တက်နေတဲ့အသံလေးနဲ့ပြောပြီးပြန်မဖြေဘူး။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကလဲ နဂိုထဲက ခပ်ရှုပ်ရှုပ်ဆိုတော့ သူကလဲ ချောင်းတာတော့ရဲတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လဲဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ ဟေ့ကောင်ငါ့ကိုဘီယာတစ်ခွက်ပေးဆိုပြီးလှမ်းပြောလိုက်တယ် ကျွန်တော်ကတော့ မိန်းမအပေါ်ကနေ မဆင်းပဲ သူ့ဟာလေးထဲလီးထည့်ထားပြီး နို့တွေကို လိုက်စုပ်ပေးနေတယ်။ သူငယ်ချင်းက အခန်းဝကနေဘီယာကိုလှမ်းပေးတဲ့အချိန်မှာ ဘီယာခွက်ကိုယူရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းကိုလက်လှမ်းဆွဲပြီး ကုတင်နားမှာထိုင်ကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ သူငယ်ချင်းလဲကုတင်ခေါင်းရင်းကြမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ပြီးကြည့်နေတာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်မိန်းမက ကုတင်နားမှာဒီကောင်လာချောင်း နေတာကိုသိနေပြီ ဒါပေမယ့်သူဖီးတွေအရမ်းတက်ပြီးဘာမှကိုပြန်မပြောဘူး။ ကျွန်တော်လဲအဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုတွေ့နေရတော့ အရမ်းပြီးချင်နေတာနဲ့ မိန်းမအပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ် ပြီးတော့ သူ့ကိုပေါင်လေးကားခိုင်းပြီး ပြန်မှုတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အရမ်းကို အော်တော့တာပဲ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ ကလိန်ကကျစ်ကျပြီး မိန်း မကို သူငယ်ချင်းထိုင်ကြည့်နေတဲ့ဖက်ကို စောင်းခိုင်းပြီး သူ့ဘယ်ဖက်ပေါင်လေးကိုမ သူ့ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီးအငမ်းမရကိုမှုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ မိန်းမလဲတစ်အားအားနဲ့အော်နေရတာပေါ့။ ကျွန်တော်လည်းမှုတ်နေရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းကိုလှမ်းကြည့်ပြီး သူ့ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားဖို့အချက်ပြလိုက်တော့ သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော့်မိန်းမပါးစပ်ကို ကုတင်အောက်ကနေ ပြုံးစိစိမျက်နှာပေးနဲ့ အရမ်းမအော်နဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ အသာလေးလက်ဖုဝါးနဲ့ပါးစပ်ကိုလှမ်းကာလိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မိန်းမတုန့်ပြန်လိုက်တဲ့အခြေအနေကြောင့် ကျွန်တော့်ဖီးတွေပိုတက်သွားခဲ့ရတယ်။ သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော့်မိန်း မပါးစပ်ကိုလှမ်းကာလိုက်တဲ့လက်ကို မိန်းမကဆွဲဖယ်ပြီး သူငယ်ချင်းရဲ လက်ဖ၀ါးကိုလဲပြန်မလွှတ်ပဲ ဖီးတွေတက်ပြီးဆက်အော်နေတာကြောင့် ကျွန်တော်အသက်ရှူမှားသွားလောက်အောင်ကို ဖီးတွေတက်သွားတယ်ဗျာ။ မိန်းမနဲ့ ကျွန်တော်လဲဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲမသိအောင်ကို ကမူးရှူးထိုး တွေ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကျွန်တော့်မိန်းမပြီးသွားတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်လေးလဲ ဗြောင်းဆန်နေအောင်ကိုလှုပ်ခါပြီး ပြီးသွားလို့ သူတော်တော်ဖီးတက်ပြီး ပြီးသွားတာကို ကျွန်တော် သိလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်လဲသူပြီးနေတာကို မရပ်မနားဆက်ပြီးမှုတ်ပေးနေတာ တော်တော်နဲ့သူပြီးတာမရပ်ဘူးဖြစ်နေတုန်း အဲဒီတုန်းကတမင်လုပ်တာလား သူ့ကိုယ်သူပဲမသိတော့တာလား ဆိုတာက သူမလွှတ်ပဲထားတဲ့ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းလက်ကိုသူဆွဲထားတာက သူ့နို့နဲ့ထိပြီး ဟိုကောင့်လက်ဖမိုးနဲ့ဖိတောင်ဖိမိနေပြီ....အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာက ကျွန်တော့်မိန်းမက
သူကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးယောကျာင်္းနဲ့ဆိုရင်ဖီးလာတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီနေ့က သူ့ကိုတစ်ဖက်စောင်းလေး မှုတ်ပေးရင်းသူပြီးတာအကြာကြီးပဲဗျာ။ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းလက်ကိုဆွဲထားပြီး သူ့နို့နဲ့ထိထားတာကလဲ သူပိုပြီး ပြီးအောင်လုပ်သလိုတော့ဖြစ်နေမှာပေါ့။ သူပြီးတာလဲရပ်သွားရော ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းလက်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ရှက်လို့ထင်တယ်တစ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးစောင်ခြုံလိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မိန်း မက ကိုယ်လုံးတီး ကျွန်တော်ကတော့ ဘောင်းဘီချွတ်နဲ့ပေါ့။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းလဲအခန်းအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားပြီး တီဗွီထိုင်ကြည့်နေတယ် ကျွန်တော်ကတော့မိန်း မဘေးမှာလှဲနေပြီး သူ့ကို ပွတ်သီးပွတ်သပ်လိုက်လုပ်နေတယ်။ မိန်းမအရမ်းကောင်းလားလို့မေးတော့ အရမ်းပြီးသွားတယ်အရမ်းကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ ဟိုကောင်ကြည့်နေတာဖီးတက်လားလို့မေးတော့လဲ တက်တယ်တဲ့။ သူလဲ ကိုယ့်မိန်း မလေးကိုကြည့်ပြီး လီးကိုတောင်နေတာပဲလို့ပြောပြလိုက်တော့ မိန်းမက သဘောကြပြီးပြုံးတယ်။ ဒီကောင့်လီးကြီးတာင်နေတာကိုမိန်းမကြည့်ချင်လားလို့မေးတော့ တွေ့မှမတွေ့ဘူးတာမသိဘူးလေလို့ပြောတော့ ကျွန်တော် ပိုထန်သွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူ့ကိုပြန်ကလိပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လိုးလိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်လီးကလည်း လိုးလို့မရလောက်အောင်ကို ပြီးချင်နေပြီ။ မိန်း မကတော့ ဖြေးဖြေးလေးလုပ်တာကို ဖီးတွေကတော်တော်တက်နေတယ်။ သူငယ်ချင်းကတော့အခန်းအပြင်မှာပေါ့။ ကျွန်တော်သူ့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်နေရင်း သူထန်နေတာကိုအဲဒီနေ့ကကြည့်ရတာ ကျွန်တော်ပိုထန်မိသလိုပဲ .. ကျွန်တော်ပြီးချင်လို့သူ့ကို အရမ်းမလုပ်ပဲထည့်ထားပြီးလီးနဲ့လိုက်ကလန့်ပြီး မွှေပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာတင်သူလည်းထပ်ပြီးသွားတယ်။ သူပြီးနေတဲ့အချိန်မှာ ဟိုကောင့်ကိုအခန်းထဲခေါ်လိုက်ရမလားလို့မေးလိုက်တာ သူဖြေတောင်မဖြေနိုင်ပဲ ခေါင်းပဲငြိမ့်ပြပြီး အော်ပြီးတော့ ဆက်ပြီးနေတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲ ဟေ့ကောင်အထဲလာလေကွာလို့လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက အေးအေးလို့ပဲပြန်ပြောပြီး ၀င်မလာဘူး။ ကျွန်တော်က မိန်းမကို သူကြည့်နေရင်တကယ်ဖီးတက်လား မိန်းမတစ်ကယ်ဖီးတက်ရင်ယောကျာင်္းလဲဖီးအရမ်းတက်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ နောက်သူရောကျွန်တော်ရောစောင်ခြုံထားပြီး သူငယ်ချင်းကို ဘီယာပုလင်းယူခဲ့ပြီး ကုတင်ဘေးမှာလာသောက်ဖို့ခေါ်လိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှသူငယ်ချင်းလဲ ကုတင်ဘေးမှာလာထိုင်ပြီးစကားပြောရင်းဘီယာလာသောက်တယ်။ သူကတော့စောင်ထဲမှာ ကိုယ်လုံးတီးလေးပေါ့။ ကျွန်တော်လဲမိန်းမ ဖီးတွေဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတာသိချင်လို့ သူငယ်ချင်းကို ကုတင်ပေါ်တက်ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ဒီကောင်က ခုတင်ခေါင်းရင်းမှာထိုင်ပြီးဘောင်မှာ မှီရင်းစကားတွေပြောဘီယာသောက်နဲ့ပေါ့။ မိန်း မကတော့စောင်ခြုံထားတာပေါ့။ ...ဒီလိုနဲ့ကုတင်ပေါ်မှာပဲ သုံးယောက်လုံးစကားပြောနေကြတယ်။ မိန်းမက ကိုယ်လုံးတီးလေးနဲ့စောင်ခြုံပြီးလှဲအိပ်နေတယ် ... ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနဲ့က ကုတင်ခေါင်းရင်းဖက်မှာထိုင်ပြီး စကားပြောရင်း မုန့်စားနေကြတယ်။ အစွန်ဆုံးမှာကျွန်တော့်မိန်းမ ပြီးရင်ကျွန်တော် နောက်ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း။ ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာ မိန်းမကတော့စောင်လေးခြုံပြီးမှိန်းနေတာပေါ့။ ခဏနေတော့မှ အပြင်ထွက်ပေးကြတော့လေ အကျီ င်္ ပြန်ဝတ်တော့မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း မထွက်ဘူးကွာဝတ်ချင်ရင်ဒီအတိုင်း စောင်ဖယ်ပြီးဝတ်လို့ နောက်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့သူငယ်ချင်းကလဲ ရဲလာပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ငါတို့မထွက်ပေးဘူးဆိုပြီး မိန်း မကိုစတယ်။ ကျွန်တော်က မ၀တ်ပါနဲ့ဦး နောက်တစ်ခါပြန်စဦးမယ်လေ ပွဲမပြီးသေးဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။
အဲဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်ကမိန်းမအနားမှာဝင်လှဲနေလိုက်တယ်။ မိန်းမကလဲဟိုဖက်လှည့်ပြီးဘာမှပြန်မပြောပဲနေတာပေါ့။ သူငယ်ချင်းကလဲ သူ့ laptop နဲ့ video ကြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်းသူငယ်ချင်းကိုစကားပြောလဲမပြတ်ပဲ စောင်အောက်ကနေမိန်းမနို့လေးကိုလိုက်ကလိပေးနေတာပေါ့။ နောက်တော့ မိန်းမကို တစ်ဖက်စောင်းနေရာကနေ ပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီးစောင်အောက်ကနေ သူ့အဖုတ်လေးကို ဖွဖွလေးလိုက်ကလိလိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်အထိသူ့အဖုတ်လေးထဲမှာ အရည်တွေကို ရွှဲနေတုန်းပဲဗျာ။ ကျွန်တော်ကလိတာကိုဘာမှမပြောပဲ မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးငြိမ်နေတယ်။ .......အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲဖီးတက်ပြီးသူ့အဖုတ်လေးကို သူ့အကြိုက်လိုက်ကလိတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကုတင်ပေါ်မှာ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ နေထိုင်နေကြတာ ကျွန်တော့်မိန်း မတော်ရုံတန်ရုံဖီးလာတာနဲ့တော့ဒီလိုမနေဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိနေပြီ။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကို သူက အစ်ကိုကလဲ အိမ်ရှေ့မှာသွားနေလေလို့ပြောတယ်။ သူငယ်ချင်းကလဲ နင်ကနှင်ထုတ်တယ် နင့်ယောကျာင်္းကခေါ်တယ် ငါတစ်ဝက်စီနေရမလားအခန်းအ၀မှာဆိုပြီးပြန်ပြောတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ဟေ့ကောင်မင်းဘာကားကြည့်နေတာလဲဆိုပြီး သူ့ laptop နဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတာကို မေးလိုက်တယ်။ ဘာဘာညာညာကားပေါ့ကွာဆိုပြီး ကြည့်နေတယ်။ ငါတို့ကိုပြဦးလေကွာလို့ပြောတော့ ကျွန်တော်မသိတဲ့ sexy ဖြစ်တဲ့ကားတစ်ကားပဲ။ all ကားတော့မဟုတ်ဘူး drama ပုံစံမျိုးလေး။ sex အခန်းတွေတော့ တော်တော် များများပါတယ် ပေါ်တင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲ ကြည့်ကြမယ်လို့ပြောပြီး ထိုင်နေလိုက်တယ်။ သူငယ်ချင်း laptop ကို ကုတင်ခြေရင်းနားမှာထားပြီး ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်အတူတူကြည့်ကြတယ်။ ကားကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ သေသေချာချာမမြင်ရပေမယ့် တော်တော်တင်းဖို့ကောင်းတယ်။ မိန်း မက ကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ်မှာ အိပ်ပြီးကြည့်တယ် ကျွန်တော်ကထိုင်ပြီးခြေဆင်းထားတယ်။ သူငယ်ချင်းကလဲထိုင်လျှက်ပဲ။ ကျွန်တော်ကအလယ်ကပေါ့။ .......အဲဒီလိုမျိုးကြည့်နေကြရင်းနဲ့ ဖီးတက်စရာအခန်းတွေများလာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်ကမိန်းမစောင်ထဲဝင်နေလိုက်ပြီးသူ့အဖုတ်လေးကို ကလိလိုက်တယ်။ မ်ိန်းမလဲဖီးတွေတက်ပြီးရုပ်ရှင်တောင်ဆက်မကြည့်နိုင်ပဲဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဗွီဒီယိုကြည့်ရင်းမိန်းမကို ကလိပေးနေတာပေါ့။ သူ့အဖုတ်လေးထဲမှာ အရည်တွေကိုအိုင်ထွန်းနေတာပဲဗျာ ကျွန်တော်နှိုက်ရတာအရသာရှိလိုက်တာ။ နောက် ကျွန်တော်လဲတင်းလာပြီးမိန်းမကိုတစ်စောင်းလေးလှည့် ခိုင်းပြီး သူ့ဖင်လေးကိုကောက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ မိန်းမကကိုယ်လုံးလေးစောင်းပြီးသူ့ဖင်လေးကိုအနေတော်လေးကောက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်လီးကြီးကလဲ အရမ်းကိုမာတောင်နေပြီ။ သိပ်တောင်အားမစိုက်ရပဲ လျှောကနဲကိုဝင်သွားတော့တာပဲ။ သူငယ်ချင်းက ဘေးနားမှာ ဗွီဒီယိုကြည့်နေတယ် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်က စောင်ခြုံထဲမှာ တစ်စောင်းလေးလိုးနေကြတယ်။ သူ့ခါးလေးကိုဆွဲဆွဲပြီးစောင်းလိုးနေတာ ကျွန်တော်မခံနိုင်လို့ လီးကြီးကိုထုတ်ပြီး သူ့ကို နောက်ပြန်လေးကိုင်ခိုင်းထားတယ်။ လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ သူက အသံအရမ်းမထွက်ပဲ ကြိတ်ပြီးတော့ တစ်အင်းအင်းနဲ့ အော်နေတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော်လဲ တော်တော်ထန်နေလို့ စောင်ခြုံထဲမှာပဲ အပေါ်ကနေတက်လိုးတော့တာပဲ။ အဲဒီအချိန်အထိစောင်ကိုသူကဆွဲဆွဲထားပြီးလိုက်ခြုံထားတုန်း။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကလဲ
ဘေးနားမှာ ကျွန်တော်တို့အဲဒီလိုလုပ်နေတာကို မြင်နေရဲ့သားနဲ့ ထွက်မသွားပဲ ဗွီဒီယိုကိုတစ်လှည့် ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်လှည့်ကြည့်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်မိန်းမစောက်ဖုတ်လေးကအရည်တွေရွှဲလွန်းလို့ အသံတွေတောင်မြည်နေပြီ။ ကျွန်တော်လဲ စောင်ခြုံပြီးလုပ်နေရတာကို အားမရတာနဲ့ စောင်ကိုမသိမသာလေး ဖယ်ဖယ်ပြီးလုပ်တယ်။ မိန်းမက အဲဒါကိုသိလို့ စောင်ကိုလိုက်ကိုင်ထားပေမယ့် ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ရင်လဲသူက အသာအယာလေးလွှတ်ပေးပြီး လိုးတာကိုပဲခံစားနေတယ်လေ။ စောင်လည်းအကုန်ဖယ်ပြီးတဲ့အခါကြတော့ ကျွန်တော်လဲ အပေါ်ကနေမှောက်လိုးနေရာကနေ လိုးနေရင်းနဲ့သူ့ပေါင်ကို ကားခိုင်းလိုက်တယ်။ ပေါင်လေးကားပြီးလိုးနေရာကနေ သူ့ကိုယ်ပေါ်ကနေကျွန်တော်ခွာလိုက်ပြီး လက်ထောက်ထားလိုက်တယ်။ ဒိုက်ထိုးသလိုပုံစံမျိုးနဲ့ သူ့တံခေါက်ကွေးနှစ်ဖက်စလုံးကိုကျွန်တော်ထောက်ထားတဲ့လက်နဲ့မတင်သလိုလုပ်ထားပြီး သူ့အဖုတ်လေးကို အပေါ်ကိုကြွလာအောင်ပင့်တင်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူငယ်ချင်းက သူ့နို့တွေ ကျွန်တော့်လီးကြီးဝင်နေတာတွေကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရပြီလေ။ .ကျွန်တော်လဲထန်လာပြီး တစ်ချက်ချင်းထိထိမိမိလေးအဆုံးအထိထိုးသွင်းလိုက် အ၀နားအထိပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်နဲ့ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်လေးလိုးလိုက်တယ် မိန်းမကလဲဖီးတွေတော်တော်ကိုတက်နေလိုက်တာ အရည်တွေကိုရွှဲနေတာပဲ။ အဲဒီနေ့ကထူးခြားချက်က အရည်တွေရွှဲလွန်းလို့ အသံတွေမြည်နေတာကိုသတိထားမိတယ်။ အဲဒီလို စီးစီးလေးချော့ပြီးလိုးနေရင်းနဲ့ သူ့ကို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရှိတဲ့ဖက်ကိုစောင်းခိုင်းလိုက်ပြီး သူ့ဘယ်ခြေကိုအပေါ်ထောင်ကိုင်ထားပြီး တစ်စောင်းလိုးတယ်။ ကျွန်တော့်လီး ကိုတော့ မထုတ်ပဲနဲ့ ပုံစံပြောင်းလိုးနေတာပေါ့။ သူငယ်ချင်းဖက်ကိုသူလှည့်နေတဲ့အချိန်ကြတော့ သူငယ်ချင်းကလဲဘယ်နေနိုင်တော့မလဲ အားရပါးရကို ကြည့်တော့တာပဲ။ သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော်လုပ်နေတာထက် မိန်းမရဲ့မျက်နှာနဲ့ သူ့နို့ကြီးလှုပ်နေတာကိုပိုပြီးကြည့်တယ်။ မိန်းမကလဲ ဖီးတွေတက်နေတော့ အရမ်းလဲ မအော်နိုင်ပဲ ကြိတ်ပြီးတော့အသံတိုးတိုးလေးထွက်နေရတာပေါ့ သူ့အသက်ရှူသံတွေကတော့ အရမ်းကိုထန်နေမှန်းသိသာတယ်။ သူ့ကို စောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းနဲ့ မိန်းမနဲ့က အရမ်းနီးသွားပြီ ကျွန်တော်ကတော့ ဒူးထောက်ပြီးသူ့ကို တစ်စောင်းလိုး နေတာပေါ့။ အဲဒီလိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ သူ့နို့ကြီးတွေယမ်းနေတာကို ကြည့်ရတာ ဖီးတက်တာရယ် သူငယ်ချင်းကလဲ သူ့နို့တွေကို အရမ်းကြည့်နေတာရယ်ကြောင့် တစ်ချက်တစ်ချက်မှာ ပြင်းပြင်းလေးဆောင့်ဆောင့်ပြီးလိုးပြစ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လဲ ဖီးတွေအရမ်းတက်လွန်းလို့ မပြီးအောင်မနဲအောင့်ထားရတယ်။ သူငယ်ချင်းကလဲ laptop ကို ပေါင်ပေါ်တင်ပြီးသာယူကြည့်နေတာ မျက်လုံးကတော့ မိန်းမရဲ့မျက်နှာနဲ့ နို့တွေဆီပဲရောက်နေပြီလေ။ အဲဒီအချိန်မှာ မိန်းမဆီကလဲ ရှက်တဲ့အမူအယာတွေမတွေ့ရတော့ဘူး ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကလဲ ကြည့်တာမကျွတ်တော့ဘူး။ ....ဒီလိုလုပ်နေရင်းမိန်းမကလဲအရမ်းဖီးတွေတက်နေတော့ ရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားရင်းနဲ့ တစ်စောင်းလိုး နေရာကနေ သူ့ခါးလေးကိုဆွဲမလိုက်ပြီး သူ့ကို လေးဖက်ထောက်ပြီးကုန်းခိုင်းလိုက်တယ်။ မိန်းမကလဲအလိုက်သင့်လေးဖင်ကိုကောက်ပေးပြီး ခါးလေးကိုကော့နေအောင် ကုန်းပေးတော့ ကျွန်တော်လဲသူကုန်းပေးတဲ့ပုံလေးကိုအရမ်းထန်သွားပြီး လီးကြီးကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးထိုးထဲ့လိုက်တာ အားကနဲနေအောင်အော်ပြီးတော့ မိန်းမလဲအရမ်းကောင်းသွားတယ်။ သူကလဲ ဖင်လေးကို ကော့နေအောင်ကုန်းပေးတော့ လီးကလျှောကနဲလျှောကနဲဝင်သွားလိုက်တာ မိန်းမလဲအရမ်းကိုအရသာရှိနေပြီ။ လေးဖက်ထောက်ကုန်းပြီး လိုးတဲ့အချိန်ကြမှ သူ့ဆီက အော်သံတွေလဲပိုထွက်လာတော့တယ်။ အဲဒီလိုပုံစံနဲ့ အသာလေးဆွဲထုတ်လိုက် အဆုံးအထိဖိပြီးထိုးသွင်းလိုက်နဲ့လုပ်နေတာ ကျွန်တော်လဲ အရမ်းပြီးချင်လို့ ထိန်းပြီးတော့လုပ်နေရတယ်။ တစ်ချက်ခြင်းမှန်မှန်လေးပဲပေါ့။ မိန်း မက သူ့အပေါ်ပိုင်း ကို ကုတင်ပေါ်မှာဝပ်နေအောင်နေပြီး
ဖင်လေးကိုထောင်နေအောင် ကုန်းပေးထားတဲ့အနေအထားကို ကျွန်တော်ကသူ့ခါးလေးကိုကိုင်ပြီး ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရှိတဲ့ဖက်ကို နည်းနည်းလေးလှည့်ပေးလိုက်တယ်။ သူငယ်ချင်းကိုလည်း မိန်းမအရမ်းထန်နေတယ်ဆိုတာကို မေးငေါ့ပြီးအချက်ပြလိုက်တယ်။ မိန်းမကလဲ သူ့ကိုအဲဒီလိုသူ့ကို သူငယ်ချင်းဖက်ကို နဲနဲလှည့်ပေးလိုက်တာကို အလိုက်သင့်ပဲပါလာတယ်။ သူငယ်ချင်းပေါင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ laptop နဲ့ သူ့မျက်နှာနဲ့က ထိလုနီးပါးဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်အဲဒီလိုသူ့ကို ကုန်းခိုင်း ပြီးလိုးနေတော့ အနောက်ကနေတစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်းဆောင့်လိုက်တိုင်း ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနဲ့ထိလုနီးပါး ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ သူငယ်ချင်းလက်နဲ့ သူ့လက်နဲ့ကလည်း ထိနေပြီ။ အဲဒီအခြေအနေမှာ မိန်းမကလဲဖီးအရမ်းတက်နေပြီး လံုး ၀ကိုမရှက်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေ ဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်တော်လဲဖီးတွေတက်လွန်းလို့ အချက်တိုင်းထိအောင် ဆုံးကာနီးအထိဆွဲထုတ်လိုက် အဆုံးအထိသာသာလေးဆောင့်လိုးပေးလိုက်နဲ့ မပြီးအောင် ထိန်းလုပ်နေရတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်နေရင်း သူငယ်ချင်းရဲ့ laptop နဲ့ မိန်း မနဲ့ သွားသွားထိနေတော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက သူ့ laptop ကို ဘေးချထားပြီး အားရပါးရ ကြည့်နေတယ်။ သူ့ပုံစံကလည်း ထန်တဲ့ပုံစံအရမ်းကိုပေါက်နေပြီ။ ကျွန်တော်လည်း လုပ်နေရင်းနဲ့ တစ်ချက်တစ်ချက်ပြင်းပြင်းလေးဆောင့်လိုက်ရင် မိန်း မရဲ့ခေါင်းက သူ့ဗိုက်နဲ့သွားသွားတိုက်နေပြီ။ .အဲဒီလိုလုပ်နေရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ကလဲမိန်းမကို သူ့ဖက်ကိုလှည့်လှည့်ပေးတာပေါ့။ မိန်းမရဲ့နို့ကြီးတွေကလည်း သူငယ်ချင်းရဲ့ပေါင်ကိုသွားပွတ်မိနေတဲ့အခါကြတော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းက သူ့ရဲ့လက်တွေကို သူ့ပေါင်ပေါ်ပြန်တင်ထားပြီးမိန်းမရဲ့နို့နဲ့ ထိအောင်လုပ်နေပြီးသူ့ပုံစံကတော့တော်တော်ကိုမျက်နှာပျက်ပြီးဖီးအရမ်းတက်နေတဲ့ပုံစံပေါက်နေတယ်။ မိန်းမကလဲ သူ့နို့တွေကိုအဲဒီလိုမထိတထိလုပ်ပြီး နို့သီး ထိပ်လေးကိုပွတ်ပွတ်ပေးနေတာကိုပိုထန်ပြီးခွင့်ပြုထားတော့ သူငယ်ချင်းကကျွန်တော့်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီး သူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ မေးငေါ့ပြီး လှမ်းမေးတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း မေးငေါ့ပြီးဆက်သာလုပ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးနဲ့အချက်ပြန်ပြလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လည်းဖီးတွေအရမ်းတက်ပြီး မနည်းထိန်းလုပ်နေရတယ် ပြီးချင်နေပြီ။ မိန်း မကလဲ ကျွန်တော်နောက်ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းဆောင့်နေတာကို အားမရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ သူကနောက်ပြန် ပြန်ဆောင့်နေတယ် အဲဒီလိုပြန်ဆောင့်တာ ကျွန်တော်လိုးတာကို ပိုထိစေချင်လို့လား ဒါမှမဟုတ် သူ့နို့တွေပိုရမ်းပြီး သူငယ်ချင်းလက်နဲ့ပိုပြီးပွတ်မိအောင်လားဆိုတာတော့မပြောတတ်ဘူး။ သူငယ်ချင်းကလဲဖီးတွေအရမ်းတက်နေတယ် မိန်း မကလဲတစ်စတစ်စပိုထန်လာနေပြီ ပေါ်တင်တွေလဲ ဖြစ်လာနေတော့ သူငယ်ချင်းကို သူ့လီးအပြင်ထုတ်လိုက်ဖို့ လုပ်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအချက်ပြလိုက်တော့ သူငယ်ချင်းလက်က မိန်းမရဲ့နို့တွေကိုလည်းလိုက်ထိနေရင်းနဲ့ သူ့ဘောင်းဘီဇစ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြုတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှ သူ့မှာအောက်ခံဘောင်းဘီမ၀တ်ထားပဲ ဂျင်းဘောင်းဘီတစ်ထပ်ထဲပဲဝတ်ထားတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတာ။ ဒါဆိုရင် ခုနကမိန်းမရဲ့နို့တွေက သူ့ပေါင်တွေ လက်တွေနဲ့တင်မဟုတ်ပဲ တောင်နေတဲ့သူ့လီးနဲ့ပါပွတ်မိနေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ဇစ်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ တောင်နေတဲ့သူ့လီးကြီးက အပြင်ကိုငေါက်ကနဲထွက်လာပြီး မိန်းမရဲ့နို့တွေနဲ့ သွားထောက်မိပြီးပွတ်နေတယ်။ အဲဒီလိုလဲမြင်လိုက်ရရော ကျွန်တော်လဲတော်တော်ထန်သွားပြီး သူ့လီးကြီးနဲ့ မိန်းမနို့တွေပိုထိမိအောင် သူ့ခါးလေးကိုညွှတ်သွားအောင် လက်နဲ့ ကိုင် ဖိပြီး ခါးလေးကိုဆွဲဆွဲပြီးလိုးပြစ်လိုက်တယ်။ ထင်ရှားတာကတော့ မိန်းမကအဲဒီအချိန်မှာတော်တော်ကိုထန်ပြီးအော်လာတယ်။ ပုံစံတွေကိုပြောပြရရင် သူငယ်ချင်းက ခုတင်ခေါင်းရင်းက အမှီကိုမှီပြီး ခြေဆင်းထားတယ် မိန်းမရဲ့ဘယ်ဖက်လက်က သူငယ်ချင်းရဲ့ ညာဖက်ခြမ်းပေါင်ဘေးနားမှာလက်ထောက်ထားပြီးကန့်လန့်ဖြတ်လေးကျွန်တော့်ကို ကုန်းပေးထားတယ်။ မိန်းမရဲ့
ညာဖက်လက်က သူငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်ဖက်တင်ပါးနားမှာ ကျွန်တော်ကသူ့နောက်မှာဒူးထောက်လျှက်နဲ့ နောက်ကနေလိုးနေတာ။ အဲဒီတော့မိန်းမရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးက သူငယ်ချင်းရဲ့လီးပေါ်ကနေ ကန်လန့်ဖြတ်ဖြစ်နေတော့ ဒီကောင့်လီးက မိန်းမရဲ့နို့တွေကိုထောက်ထားသလိုဖြစ်ပြီး မိန်းမကလဲဖိပြီးတော့ကိုလိုက်ပွတ်နေတာ။ ကျွန်တော်လဲဖီးတွေစွတ်တက်ပြီးခပ်ပြင်းပြင်းလေးနောက်က ဆောင့်တဲ့အခါမိန်းမကအရမ်းကိုအော်လာပြီး သူငယ်ချင်းရဲ့လီးပေါ်ကိုမှောက်ချလိုက်ပြီး သူ့လီးကိုဆုပ်ထားလိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ သူငယ်ချင်းလဲဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲ ခုတင်ခေါင်းရင်းနောက်မှီကိုမှီ ခေါင်းကိုလှန်ချပြီး မျက်နှာကိုအပေါ်မော့ပြီး ရှူးရှူးရှဲရှဲတွေဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီမြင်ကွင်းက ကျွန်တော့်ဘ၀မှာပထမဆံုး ကြုံလိုက်ရတဲ့ထန်စရာအကောင်းဆုံး မြင်ကွင်းပဲ။ သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး သူငယ်ချင်းပါးစပ်က " အ " ဆိုပြီးအသံပြင်းပြင်းတစ်ချက်ထွက်လာလို့ လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြမှ မိန်းမရဲ့နို့တွေဆီကို သူ့လီးက လရည်တွေပန်းထွက်လာတာကို မြင်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီအချိန်အထိ မိန်းမက သူ့ငယ်ချင်းရဲ့လီးကိုဆုပ်ထားတုန်းပဲ။ နောက်သူလဲပြီးသွားရောခဏနေပြီး ကုတင်ကနေထသွားတော့တာပဲ။ ကျွန်တော်လဲဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲ မိန်း မကို ပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီး လီးကိုအသာလေးစိမ်ထားပြီးသူ့ကို လီးကြီးကိုင်ရတာဖီးတက်လား လရည်တွေပန်းထွက်လာတော့ ဘယ်လိုနေလဲဆိုပြီး မေးကြည့်တာပေါ့။ ထူးခြားတာက သူငယ်ချင်းလဲအဲဒီလို လရည်တွေပန်းထွက်လာတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာပဲ မိန်းမကလဲ အရမ်းကိုပြီးသွားတယ်။ သူလဲပထမဆုံးအတွေ့အကြုံမှာ အရမ်းကိုထန်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီညက ဒီကောင်ပြန်သွားတဲ့အထိ မိန်း မကအခန်းထဲကထွက်မလာတော့ဘူး ။ မျက်နှာပူလို့တဲ့။
အန်တဦီး အမေရဲ့ မောင်၊ ကျနော်ဦး လေးက အောက်ပြည်အောက်ရွာမှာ စက်လှေတွေပိုင်သတဲ့၊ သူ့မိန်းမ ကျနော်ရဲ့ အန်တီတော်စပ်သူကလဲ စီးပွားရေးမှာ မခေ၊ ကုန်ခြောက်ဆိုင်ဖွင့်လို့ အနီးအနားကရွာတွေကို အကြွေးစနစ်နဲ့ ကုန်ခြောက်တွေဖြန့်ချီနေတာ မြောင်းမြတစ်ခွင်မှာ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်သတ်ရင် နာမည်ကြီးလင်မယားတွေ၊ သူတို့ညားဖြစ်ကြတာကလဲဒီလို အပျိုလူပျိုဘဝကထတည်းက အန်တီလေးက သူရဲ့ကုန်ခြောက်တွေကို ဦးလေးရဲ့ စက်လှေနဲ့ တင်ပြီး ရွာတွေကို အကြွေးစနစ်နဲ့ ဖြန့်ချီခဲ့တာ၊ စီးပွားဖက်တွေလို့ဆိုရမယ်၊ ဒါကြောင့်လူကြီးတွေက စီးပွားလဲပေါင်း လူချင်းပါ ဆုံဖက်သွားအောင် အိမ်ထောင်ချပေးလိုက်ရော၊ အခုတော့ ဦးလေးတို့လင်မယားက အသက် ၃၅ နှစ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့ (၅) နှစ်အရွယ်နဲ့ (၃) နှစ်အရွယ် သားနှစ်ဦးတောင် ထွန်းကားနေခဲ့ပြီ၊ ကျနော်အဖေက အစိုးရတာဝန်နဲ့ အဲဒီမြို့တာဝန်ကျတော့ ဦးလေးတို့ အိမ်နဲ့ မနီးမဝေး ၂ အိမ်ကျော်မှာ နေရတာပေါ့၊ ဦးလေးက အိမ်မှာနေတယ်လို့ကို သိပ်မတွေ့ရ၊ အချိန်ရှိသရွေ့ စက်လှေတွေရှိတဲ့ ဆိပ်ကမ်းမှာပဲနေတာများတယ်၊ နောက်ပြီးစက်လှေတွေနဲ့လဲ လိုက်သွားတတ်တော့ တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက် နှစ်ရက်လောက်ပဲ အိမ်မှာ ပြန်အိပ်တတ်တာပေါ့၊ အဲဒီလိုဖြစ်နေကြတော့ ဆိုင်အလုပ်သမားတွေ အဝင်အထွက်များတဲ့ အန်တီတို့အိမ်မှာ လာနေဖို့ ကျနော်ရဲ့ မိဘများထံခွင့်တောင်းလို့ ကျနော်ကို သူ့တို့အိမ် ခေါ်ထားတတ်တယ်လေ၊ ကျနော်လဲတော်တော်ပျော်ပါတယ်၊ အန်တီတို့က ကုန်ခြောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ စားစရာသောက်စရာ သရေစာက အတော်များ ခလေးတွေကလဲ ချစ်စရာကောင်းဆိုတော့ မိဘတွေအိမ်တောင် သိပ်မပြန်ဖြစ်တော့ဘူး၊
အန်တီအကြောင်းကို နဲနဲပြောပြရဦးမယ်၊ အန်တီက အသားဖြူဝင်းဝင်းလေး၊ အရပ်ကတော့ သာမာန်မိန်း မတွေအရပ်လောက်ပဲ ၅ ပေနဲ့ ၂ လက်မလောက်၊ ခလေးက နှစ်ယောက်မွေးထားပြီးတော့ ကိုယ်လုံးက အရမ်းမဝဘဲ ပြည့်ပြည့်လေး၊ စိုစိုပြည်ပြည်ထွားထွားကားကားနဲ့ နှစ်သားမွေးထားတော့ နှစ်သွေးလှနေတယ်လို့ပဲ ဆိုရမယ်၊ အန်တီနာမည်က တင်တင်ဦး၊ ကျနော်ကတော့ အန်တီဦးလို့ခေါ်တတ်တယ်၊ အန်တီဦးတို့ အိမ်မှာနေတုန်း ကျနော်အတွက် အလုပ်အရှုပ်ဆုံး အချိန်က ညနေပိုင်းပါ၊ ကျနော်က ၄ နာရီကျော်ရင် ကျောင်းကနေအိမ်ပြန်ရောက် ညနေ ၅ နာရီဝန်းကျင်ဆို အန်တီဦး ကုန်ခြောက်ဆိုင်က ပြန်လာပြီ၊ အန်တီဦး အိမ်ကိုရောက်လာရင် မီးဖိုခန်းထဲကို ဝင်လို့ စီမံစရာတွေကိုစီမံတယ်၊ ၆ နာရီကျော်ရင်ရေချိုးပြီ၊ အန်တီဦးတို့အိမ်ကပျဉ်ကာ လျှာထိုခင်း နှစ်ထပ်အိမ်၊ မိသားစုတွေက အောက်ထပ်မှနေကြပြီး ကျနော်ကတော့ အပ်ါထပ် အန်တီဦးတို့ အိပ်ခန်းအပေါ် တည့်တည့်မှာ၊ ကျနော်ရဲ့ အိပ်ခန်းနောက်ဖက် ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် အောက်မှာရေချိုးတဲ့နေရာ၊ ဘေးပတ်ပတ်လည်ကို အလုံအခြုံကာရံထားပေမယ့် အမိုးမရှိတော့ တစ်ယောက်ယောက် ရေချိုးရင် အပေါ်ထပ်ကနေ မြင်နေရတာပေါ့၊ အန်တီဦးရေချိုးတာကို အမှတ်တမဲ့ကနေ အမှန်တစ်ကယ်ချောင်းကြည့်မိတဲ့ အဖြစ်ကိုရောက်သွားခဲ့ရတယ်၊ ပြတင်းပေါက်တော့ ဖွင့်မကြည့်ရဲဘူး အိမ်ကာထားတဲ့ ပျဉ်ပြားကြားနေ ချောင်းကြည့်ရတာ၊ မချောင်းခင်း အခန်းတံခါးကိုတော့ သတိတရ ပိတ်ရသေးတယ်၊ တော်ကြာတစ်ယောက်ယောက် အခန်းထဲဝင်လာရင် အဆူခံရမှာလေ၊ အန်တီဦးက ရေချိုးတိုင်း အတော်လေးပါးလွှာတဲ့ ထမိန်အဟောင်းနဲ့ ရေချိုးတတ်တော့ ချောင်းကြည့်ရတဲ့ ကျနော်မှာ ရင်တုန်ပန်းတုန်နဲ့ ရင်ခုန်နှုန်းတွေ မြန်မိရောပေါ့၊ ရေစိုနေတဲ့ ကိုယ်လုးံ ကို အပေါ်စီးကနေ မြင်ရတာ ရင်သားနဲ့ ဖင်တွေဟာလဲ လုံးထွက်နေတာ၊ လုံချည်လေးကို အသာဖြေချလိုက်ပြီး ရင်သားနှစ်ကို ဆပ်ပြာတိုက်နေတာကို တွေ့လိုက်တိုင်း ကျနော်လဲ လိင်တံကိုလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်လို့ ရှေ့နောက် ခပ်သွပ်သွပ်လေး လှုပ်ရှားမိတာပေါ့၊ အန်တီဦးရေးချိုးလို့ပြီးသွားတိုင်းလဲ ရေစိုထမိန်ကိုလဲရင် မျက်တောင်မခတ်ပဲ ချောင်းကြည့်ဖြစ်တာ၊ တစ်ခါတလေ ဗိုက်သားဖွေးဖွေး ဖင်လုံးဖွေးတွေအထိတောင် မြင်ရလိုက်ရတာ အသဲတစ်အေးအေးဗျာ၊ ဂွေလှိမ့်နေတာကိုလဲ မပြီးအောင် ထိမ်း ထားရသေးတာ၊ နောက်ထပ် ဇာတ်ဝင်ခန်းက ကျန်သေးတယ်လေ၊ အန်တီဦးက ရေချိုးပြီးသွားရင် အိမ်ခန်းထဲကို ဝင်တော့ ကျနော်လဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ မှောက်၊ ပေါက်နေတဲ့ကြမ်းကြားကနေ ဆက်ချောင်းတာ၊ ရေသုတ်တာတွေ မှန်တင်ခုံရှေ့မှာ သနပ်ခါးသွေးပြီးလိမ်းတာတွေက မထူးခြားသေးဘူး၊ အကောင်းဆံုး မြင်ကွင်းက အဝတ်အစားဝတ်တာပဲ၊ အခန်းထဲမှာ ခလေးတွေမရှိရင် ရင်လျားထားတဲ့ လုံချည်ကို ခါးမှာပြင်ဝတ်လိုက်ပြီး အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ အတွင်းခံဝတ်တယ်၊ အင်္ကျီဝတ်တတ်တယ်၊ အာလုံးလဲပြီးရော ကျနော်လဲ ဂွေလှိမ့်လို့ပြီးသွားလို့ သုတ်ရည်တွေလဲ ထွက်သွားရော၊ နောက်တော့ ကျနော်လဲရေချိုးပြီး ည ၇ နာရီဝန်းကျင်မှာ ညစာကို အတူစားကြတာပေါ့၊ အဲဒါက ကျနော်ရဲ့ တစ်နေတာလုပ်ဆောင်မှုတွေထဲက လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပါ၊ ညစာအတူစားဖြစ်ရင်လဲ ကျနော်ကသာ စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်နေတာ အန်တီဦးက ဘာမှမသိ၊ ကျနော်ကတော့ အန်တီဦးကျောခိုင်းသွားရင် အတွင်းခံတွေ ဝတ်မထားတတ်တဲ့ ဖင်လုးံ တုန်တုန်ကြီးတွေကို ကြည့်ရင်း ရင်တွေခုန်နေတာ၊ အိပ်ရေးတွေလဲ ပျက်၊ ဒူးတွေလဲချောင်၊ မျက်ကွင်းတွေလဲ ကျပေါ့၊ ဂွေတွေလှိမ့်တာများတော့ ခုတင်ဘေးနံရံမှာ သုတ်ရည်တွေပေလို့ ခြောက်နေတဲ့နေရာတွေက အများသား၊ တစ်ခါတစ်လေ အန်တီဦးက
အခန်းလာရှင်း ပေးတိုင်း ပြောလေ့ရှိတာက “လူပျိုနံ့ရတယ် အခန်းထဲဘာတွေ လုပ်နေသလဲ” တဲ့၊ ဘာကိုဆိုလိုမှန်းမသိပေမယ့် ကျနော်ရောယောင်ပြီး ရှက်နေတာပေါ့၊ ပြီးရင် “ငါ့တူ လူပျိုဖြစ်နေပြီ” ဆိုတာလဲ မကြာခဏ ပြောတတ်သေးတာ၊ မနက်မိုးလင်းတော့ အိပ်ရာကနိုး ရင် အန်တီဦးလဲ ချက်ရပြုတ်ရ ဆိုင်ကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်၊ ကျနော်လဲ ကျောင်းသွား၊ မအားတတ်ကြဘူး၊ ခလေးတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ အဖွားတွေနဲ့ ကျန်ခဲ့တာပေါ့၊ ကျောင်းတက်နေရတဲ့ အချိန်တွေမှာ အချိန်တွေက ကုန်လွယ်လွန်းလိုက်တာ၊ စိတ်တွေက စောနေခဲ့ပြီး ညနေအိမ်ပြန်ရောက်ဖို့သာ စိတ်စောနေခဲ့တာပေါ့၊ ကျောင်းမှာ ကောင်မလေးတွေကို တွေ့နေရပေမယ့် အန်တီဦးရဲ့ ရင်သားနဲ့ ဖင်လုံးတွေကိုသာ စွဲစွဲလန်းလန်း မြင်ယောင်မိနေတာ၊ ဒီလိုနဲ့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွေရောက်တော့ ရွာတွေကို ပေးထားတဲ့ ကုန်ခြောက်ဖိုးအကြွေးတွေ လိုက်သိမ်းဖို့ အန်တီဦးခရီးထွက်ရင် လိုက်သွားရတယ်၊ ပထမဦးဆုံးသွားရမယ့်ရွာက ဟိုင်းကြီးကျွန်းနားအထိတောင်၊ ညနေ ၅ နာရီလောက်ထဲက သင်္ဘောစစီးရတာ၊ သင်္ဘောက တစ်ထပ်သင်္ဘောလေး၊ သင်္ဘောပေါ်မှာက ကုန်တင်တာများပြီး ခရီးသယ်တွေက နဲ့တော့ ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စုရယ်၊ ကျနော်နဲ့ အန်တီဦးက သင်္ဘောဝမ်းဗိုက် ကုန်တင်ပေါက်ပေါ်မှာ နေရာရတော့ အခင်းလေးတွေခင်းပြီး ထိုင်လိုက်လှဲလိုက် စကားပြောလိုက်နဲ့ပေါ့၊ တစ်ညအိပ်ခရီးဆိုတော့ ပျင်းစရာ၊ အန်တီဦး ကတော့ ကျနော်ကို ကျောင်းအကြောင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်း ကျောင်းစာအကြောင်းတွေ မေးလိုက်ပြောလိုက်နဲ့ပေါ့၊ ဒီလိုနဲ့ သင်္ဘောပေါ်မှာတင် ထမင်းချိုင့်နဲ့ ထည့်လာတဲ့ ထမင်းကိုစား၊ ပျင်းရိစရာ ညဦးပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ရင်း ည ၉ နာရီကျော်တော အိပ်ရုံပဲ ရှိတော့တာပေါ့၊ ကုန်ပေါက်နေရာပေါ်မှာက ကျနော်တို့ နှစ်ဦးထဲဆိုတော့ အိပ်မယ်လဲလုပ်ရော အန်တီဦးက သူသယ်လာတဲ့ တစ်ယောက်အိပ် ခြင်ထောင်လေးနဲ့ မုဒုံစောင်ပါးလေးကို ထုတ်လို့ ခြင်ထောင်ကိုလဲ မရမက အဆင်ပြေအောင်ထောင်လိုက်သေးတာ၊ နောက်တော့ ကျနော်နဲ့အန်တီဦး ခြင်ထောင်လေးထဲမှာ ပူးပူးကပ်ကပ်ပဲ လှဲအိပ်ကြတာပေါ့၊ သင်္ဘောရဲ့ စက်သံကလဲ ဆူညံတော့ အိပ်လို့မရ၊ လေကလဲတိုက်တော့ ချမ်းသေး၊ နောက်တော့မှ တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း သိတိထားမလာတာ အန်တီဦး ရဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့လေးပဲ၊ ဒီကိုယ်သင်းနံ့ကြောင့် စိတ်ထဲမှာပြန်မြင်ယောင်လာတာက အန်တီဦးရေချိုးနေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေပဲ၊ အဲဒီတော့ ကျနော်လိင်တံက အလိုလိုပဲ မာကျောထောင်မတ်လာခဲ့ပြီ၊ အန်တီဦးသိသွားမှာ စိုး ရိမ်တော့ ကျောခိုင်း လိုက်ပြီး တစ်ဖက်လှည့်အိပ်ရင်း လိင်တံကို ပေါင်ကြာမှား ညှပ်ထားမိတယ်လေ၊ ဒီလိုနဲ့ တော်တော်လေးကြာလာတော့ လေကတိုက်လို့အေးလာတယ်၊ အန်တီဦးက တစ်ထည်တည်း သယ်လာတဲ့ မုဒုံစောင်ပါးလေးကို ကျနော်ကိုလဲ ခြုံပေးတာပေါ့၊ စောင်ကသေးနေတော့ နှစ်ဦးသားအတွက်က မလုံခြုံတော့ အန်တီဦး က ကျနော်ကို ကျောခိုင်းလို့ဘေးတိုက်အိပ်လိုက်ပြီး ကျနော်ကိုလဲ သူနောက်ကျောကို မျက်နှာမူခိုင်းပြီး ကပ်အိပ်ခိုင်း တော့တာ၊ ကျနော်တော့ ဒုက္ခရောက်ပြီ ပေါင်ကြားထဲက ထောင်နေတဲ့ လိင်တံကို အန်တီဦးဖင်ကို သွားမထိုးမိအောင် ကိုယ်လုံးကို ခွာထားရင်း စောင်ကိုခြုံတော့ စောင်သေးသေးနဲ့ အဆင်မပြေပြန်၊ နောက်တော့ အန်တီဦးက လက်နောက်ပြန်နဲ့ ကျနော်ရဲ့ ခါးကို ဆွဲလိုက်ပြီး သူနောက်တင်ပါးကို ကပ်ခိုင်းလိုက်တော့ နှစ်ယောက်သား စောင့်အောက်ကိုတော့ ရောက်သွားပါရဲ့ ကျနော်လိင်တံက အန်တီဦးရဲ့ ဖင်ကို သေသေချာချာ ထောက်မိနေပြီ၊ အဲဒီတော့မှာ အန်တီဦးဆီက အသံထွက်လာတော့တယ် “ငါ့တူ လူပျိုဖြစ်နေပြီပဲ” တဲ့၊ ခဏလေးငြိမ်သက်သွားပြီးနောက်မှာ အန်တီဦးရဲ့ လက်က ကျနော်လက်ကို လှမ်းယူလို့ သူကိုယ်လုံးကို ဖက်ထားခိုင်း လိုက်ပြီး ကျနော်လက်ဖဝါးတွေကို သူ့ရဲ့ ရင်သားပေါ်မှာ တင်လိုက်ပြီး သူလက်က အပေါ်ကနေ ဖိအုပ်လို့
ထားတာပေါ့၊ ပြီးတော့ ကျနော့်ကိုပြောသေးတာ “အိပ်တော့” တဲ့၊ ဘယ်လိုမှ အိပ်မရပါဘူးဗျာ၊ စက်သံက ဆူဆူညံညံ စိတ်တွေက ဂယောက်ဂရက်၊ ရင်တွေက သင်္ဘောစက်သံနဲ့အတူ တစ်ဒုန်းဒုန်း၊ လိင်တံကလဲ ပြန်ကို မပျော့နိုင်တော့ဘူး၊ ဖင်ကိုတည့်တည့် ထောက်ထားမိနေတာ၊ ပိုဆိုးတာက အန်တီဦးက ညောင်းလို့ နဲနဲလှုပ်လိုက်ရင် ဖင်က လိင်တံကို ပွတ်မိသွားတော့ ထိပ်တွေတောင် ကျင်သွားတယ်၊ လိင်တံက တောင်ပါများတော့ နာလို့တောင်လာပြီ၊ ခဏနေတော့ အန်တီဦးလဲ အပေါ့သွားလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီး ထထွက်သွားတော့ ကျနော်ရဲ့ လိင်တံက စောင်အောက်မှာ ထောင်ထောင်တန်းတန်းကြီး ကျန်ခဲ့ရော၊ အန်တီဦး ပြန်လာလို့ အိပ်ရင် ခုနကလိုများ အိပ်ခွင့်ရပါတော့မလားလို့တောင် စိုးရိမ်မိလာတယ်၊ ပြန်ရောက်လာတော့ အန်တီဦးလဲ ခြင်ထောင်ထဲကိုဝင်လာပြီး စောင်အောက်ကို အသာလေးတိုးဝင်လာတော၊ ကျနော်လဲ မျက်စိမှိတ်လို့ ကြိုးစားအိပ်နေတာပေါ့၊ ရင်ထဲမှာလဲ ပျော်သွားတယ် အရင်အတိုင်းပဲ အိပ်ပြန်ပြီ၊ ဒီတစ်ခါပြန်အိပ်ဖြစ်တော့ ကျနော်လိင်တံက အန်တီဦးရဲ့ ဖင်ကြားတည့်တည့်မှာပေါ့၊ သင်္ဘောကလဲ ပင်လယ်ဘက်ကို ထွက်နေတော လှိုင်းတွေတဲ့ လူးလားပြီး ကျနော်တို့နှစ်ဦးလဲ ခြင်ထောင်ထဲမှာ တစ်လှုပ်လှုပ်နဲ့လေ၊ ဖင်ကြားကို ကျနော်ရဲ့ လိင်တံက အဆက်မပြတ်ပွတ်နေတော့တာ၊ ကြာလာတော့ လှိုင်း ကြောင့်လား အန်တီဦးပဲ ကိုယ်တိုင်ပဲ လှုပ်နေသလားမသိတော့ဘူး ၊ အန်တီဦးရဲ့ ခါးက အသာလေးရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်နဲ့ လှုပ်နေတော့ ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖီလင်ဗျာ၊ ကျနော်လက်တွေကလဲ အင်္ကျီပေါ်ကနေ အန်တီဦးရဲ့ ရင်သားတစ်ဖက်ကို ညှစ်ကိုင်ထားမိပြီ၊ အလုံးအထည်က ကျနော်ရဲ့ လက်ဝါးထက်တောင် ကြီးနေပြီး လက်ဝါးနဲ့တောင် မအုပ်မိဘူး၊ အဲလို ရင်သားကို ညှစ်လိုက်ရင် ခါးအောက်မှာ အန်တီဦးရဲ့ ခါးကကော့လို့ ဖင်ကကျနော် လိင်တံရှိရာကို ပိုပြီးတိုးကပ်လာသလိုပဲ၊ မီးအလင်းရောင်ကလဲနဲ ခြင်ထောင်ကလဲ ထောင်ထား စောင်အောက်မှာ လှုပ်ရှားနေကြတာဆိုတော့ ကျနော်တို့ဦးကို ဘယ်သူမှ သတိမထားနိုင်လောက်ဘူးလို့ ထင်မိတယ်၊ အန်တီဦးရဲ့ လက်တွေက စောင်ထဲမှာ ခါးအောက်ပိုင်းကို ဆင်းလာပြီး အရင်ဆုံး ကျနော်လိင်တံကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်လိုက်တာ ခံလိုက်ရတယ်၊ နောက်တော့အန်တီဦးက သူ့ရဲ့ ထမိန်ကိုအပေါ်ကို ဆွဲတင်လိုက်ပြီး ကျနော်ရဲ့ ပုဆိုးကိုလဲ သူပဲ ဆွဲလှန်လိုက်တာပေါ့၊ အဲဒီတော့မှာ အသားချင်းထိမိလို့ အန်တီဦး အတွင်းခံဘောင်းဘီ ဝတ်မထားတော့ဘူးဆိုတာကို သိလိုက်တော့တယ်လေ၊ အန်တီဦးက သူ့ရဲ့ လက်နဲပဲ ကျနော်ရဲ့ လိင်တံကိုင်လို့ သူ့ရဲ့ ဖင်ကြားထဲကို ဖိထည့်လိုက်တော့တာ၊ ဇိမ်ပဲဗျာ လိင်တံက ဖင်ကြားထဲမှာ လုံးဝ ညှပ်နေတော့တာ၊ ကျနော်လဲ တတ်သလောက်မှတ်သလောက်နဲ့ ရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်ကလေး လုပ်မိတော့တာပေါ့၊ အန်တီဦးက ခါးကိုခွက်လို့ ဖင်ကိုအစွမ်းကုန် ကော့ပေးထားတော့တာပေါ့၊ နောက်တော့ အန်တီဦး ပေါင်လေးတစ်ချောင်း အသာကြွပြီး လက်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲတော့ မသိ၊ ကျနော်ရဲ့ လိင်တံထိပ်ခေါင်းက ပူနွေးစိုစွတ်နေတဲ့ အပေါက်ကလေးထဲကို ရောက်သွားသလိ ခံစားလိုက်ရတယ်၊ ကျနော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း တုန်းပါ့၊ အဲဒီအချိန်အထိ ကျနော်လိင်တံထိပ်ခေါင်းက ဖင်ထဲဝင်သွားတာလား ပိပိထဲ ဝင်သွားတာဆိုတာကို သေသေချာချာမသိခဲဘူး၊ နောက်တော့မှ လက်တစ်ဖက်က ပိပိအမွှေးတွေကို စမ်းကြည့်ရင်း လက်နဲ့ ကိုင်ကြည့်တာ လိင်တံက ပိပိထဲမှာဆိုတာကို သိလိုက်တော့တယ်၊ အန်တီဦးရဲ့ အမွှေးတွေက အတော်ကို ထူထဲပြီး ပျော့ပြောင်းနေတော့တာ၊ ဆီးခုန်ကလဲ ဖောင်းဖောင်းတင်းတင်းကြီး ဆိုတာကိုလဲ လက်နဲ့ အသေအချာ ကိုင်မိလိုက်တော့တယ်၊ အန်တီဦးရဲ့
ခေါင်းက ကျနော်မျက်နှာနားကို တိုးလို့ကပ်လာတော့ ကျနော်လဲ လုပ်မိလုပ်ရာ ပါးကိုနမ်းမိလိုက်ရော၊ အန်တီဦးရဲ့ လက်က ကျနော်နဲ့ တင်ပါးကို သူဖက်နဲ့မကပ် ကပ်အောင် ဆွဲပေးနေရင်း ကျနော်တို့နှစ်ဦးသား စောင်အောက်မှာ အသာလေး ညှောင့်နေကြတော့တာပေါ့၊ လိင်တံကတော့ ထိပ်ခေါင်းလောက်ပဲ ပိပိထဲကိုဝင်နေပြီး ကျန်နေတဲ့ လိင်တံတစ်ချောင်းလုံးက အန်တီဦးရဲ့ဖင်နှစ်လုံးကြားမှာ အလျားလိုက်ညှပ်နေခဲ့တာပေါ့၊ ဘယ်လောက်ပဲ ဝင်နေနေ ဘယ်လိုပဲညှပ်ညှပ် ကျနော်တော့ ကောင်းနေတော့တာပဲ၊ ကောင်းနေတယ်သာပြောရတာ သင်္ဘောပေါ်မှာ အားရပါးရလုပ်လို့လဲမရ၊ ကုန်ပေါက်ကိုပိတ်ထားတဲ့ ပျဉ်ပြားကြီးတွေကလဲ မညီမညာဆိုတော့ ကြာတော့ ခါးရိုးတွေနာလာရော၊ လိင်တံကလဲ ထိပ်ဖျားလောက်ပဲဝင်နေ၊ ပိပိထဲလဲ အဝလောက်မှာပဲ ပြူတစ်ပြူတစ်ဖြစ်နေတော့ ကျနော်ရော အန်တီဦးပါ နှစ်ယောက်လုံးအားမရတော့ဘူး၊ ပုံစံပြောင်းလိုက်ရင်လဲ ခြင်ထောင်အပြင်ပဲ ရောက်ကုန်မလား၊ ခြင်ထောင်ကြိုးပဲ ပြတ်ကျကုန်မလား သိတော့ဘူး ၊ ဒါကြောင့် အန်တီဦး က ဒီတိုင်းလေးပဲ ထည့်ထားပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေး နေရင်း အိပ်တော့လို့ပြောလာတယ်၊ ကျနော်လဲ ပြောတဲ့ အတိုင်းနေတာပဲ၊ အိပ်လို့လဲ မရ လိင်တံက ဘယ်လိုမှ ပြန်မကျ တင်းမာနေဆဲပဲ၊ နောက်တော့ အန်တီလေးက ကျနော်ရဲ့ လိင်တံကို ပိပိထဲကနေထုတ်လိုက်ပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်လှည့်လို့ အိပ်တော့တာပေါ့၊ ကျနော်လဲ အဲလိုလှည့်လာတော့ ပါးကိုနမ်းလိုက်ပြီး လက်တွေက ရင်သားပေါ်မှာ ထားလို့ ဖိပွတ်နေမိတော့တာ၊ အကျီက ရှေ့ကြယ်သီးနဲ့ ဆိုတော့ လက်နဲ့ စမ်းရင် ကြယ်သီးတွေလဲ ဖြုတ်မိလိုက်တော့ မီးရောင်မှိန်မှိန်အောက်မှာ ဝတ်ထားတဲ့ ဘော်လီရဲ့ အပေါ်ပိုင်းက ရင်သားတွေဖွေးကနဲ ပေါ်လာပါလေရော၊ ဒါကြောင့် ကျနော်လဲ အန်တီဦးကို နို့ဆို့ချင်တယ်လို့ ပြောမိလိုက်တော့ ခဏတော့ တွေဝေနေပြီး နောက်တော့ ဘော်လီချိတ်တွေကို ဖြုတ်ပေးတာပေါ့၊ ကျနော် ညနေတိုင်းချောင်းကြည့်ခဲ့ရတဲ့ ရင်သားဖြူဖြူထွားထွား နှစ်ခု အခုတော့ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ရပြီ၊ ခလေးတစ်ရောက်လို နို့သီးခေါင်းကပိုပဲ မဲပြီးစို့တော့ အန်တီဦး ကတောင်တားယူရတယ်၊ “တစ်ခြားနေရာကို လျှာနဲ့ လျှက်လို့ရတယ်” လို့ပြောတော့တာ၊ ကျနော်လဲ မလုပ်တတ်တော့ အန်တီဦး ပြောတဲ့ အတိုင်းလိုက်လုပ်တော့တာပေါ့၊ ကြာလာတော့ အန်တီဦးရဲ့ အသက်ရှုထုတ်လိုက်တဲ့လေတွေက ကျနော်ရဲ့ ဆံပင်ပေါ်ကို ကျနော်ပြီး ကျနော်ရဲ့ ခေါင်းကို လက်နဲ့ ကိုင်ရင်း ရင်သားတွေနဲ့ ဖိကပ်ထားတယ်လေ၊ အန်တီဦးရဲ့ ပေါင်တစ်ဖက်ကလဲ ကျနော်ကိုခွထားရင်း ခါးကိုရှေ့ ကော့လို့ ပိပိကို ကျနော်ရဲ့ ကိုယ်လုံးနဲ့ ဖိပွတ်နေတော့တာ၊ အန်တီဦးက အဲဒီလိုကော့ပြီး ပွတ်နေတော့ ကျနော်လက်တွေက အောက်ကိုဆင်းသွားပြီး ပိပိထဲကို လက်ညှိးထိုး ထဲ့ကြည့်လိုက်တာ ပိပိကတော့ အပေါက်ကျယ်နေပြီ အရည်တွေက အတော်ကိုရွှဲနစ်နေတော့တာလေ၊ ကြားဖူးနားဝနဲ့ လုပ်တတ်သလောက်လုပ်ရင်း လက်ညှိးကို ပိပိထဲမှာ ရှေ့တိုး နောက်ဆုပ်တွေလုပ်လိုက် ပိပိရဲ့ အပြင်မြောင်းထဲ ပွတ်လိုက်နဲ့ လုပ်နေတော့တာ၊ လက်နဲ့ ပိပိတစ်ခုလုံးကိုပွတ်နေရင်း သတိထားမိလိုက်တာက အန်တီဦးရဲ့ အစိက တော်တော်ကြီးနေတယ်လို့ ထင်နေမိရတယ်၊ လက်သန်းထိပ်လောက်တောင် ရှိလောက်မယ်လို့ ထင်မိတာပေါ့၊ ကိုင်လို့ကောင်းကောင်းနဲ့ အစိကိုပဲ ကိုင်လိုက်ပွတ်လိုက်လုပ်နေတာ အန်တီဦးလဲ တစ်အစ်အစ်နဲ့ အံကျိတ်လို့ ငြီးသံတွေထွက်လာပြီ၊ ကျနော်လဲ လက်ညှိးကို ပိပိထဲကိုထည့်ထားပြီး လက်မနဲ့ပဲ အစိကြီးကို ပွတ်နေမိတော့တာပေါ့၊ တော်တော်လေးကြားသွားတော့ အန်တီဦးရဲ့ ကိုယ်လုံးက တောင့်င်းတောင့်တင်းကြီးဖြစ်သွားပြီး ကျနော်ကို တင်းနေအောင်ဖက်ထားပြီးနောက် ငြိမ်ကျသွားတော့တာ၊ ဘာဖြစ်သွားမှန်းတော့ ကျနော်လဲမသိဘူး၊ အစိကြီးကို ဆက်ပွတ်တော့ တုန်တက်သွားပြီး ကျနော်လက်ကို ပိပိကနေဆွဲဖယ်လို့ လက်ညိုးကို သူ့လက်နဲ့ သုတ်ပေးတော့တာပေါ့၊
ပြီးတော့ အန်တီဦး က ကျနော်ကို ဖက်ထားရင်း သက်ပြင်းတွေ အခါခါချလို့ မမောဖြေနေပုံပဲ၊ ပြီးတော့ ကျနော်ကို ခပ်တင်းတင်းဖက်လို့ နှခမ်းခြင်းနမ်းတော့ ကျနော် အသက်ရှူ တွေ ကျပ်သွားပြီးမောသွားတော့တယ်၊ နောက်တော့ အန်တီဦးက ကျနော်လိင်တံကို သူ့လက်နဲ့ကိုင်လိုက် ပွတ်ပေးတယ်လေ၊ အထိအတွေ့ကိုက အတော်ကွာခြားတာပဲ၊ အရင်တုန်းက ကိုယ်လက်နဲ့ ကိုယ်ကိုင်ပြီး ဂွေလှိမ့်တာနဲ့ အန်တီလေးကိုင်ပေးတဲ့ အထိအတွေ့ တော်ကြီးကို ကွာခြားနေတော့ လိင်တံက ရွစိရွစိနဲ့ ကောင်းလိုက်တာဗျာ၊ ဒါပေမယ့် တစ်ခုဆိုးတာက အန်တီဦးက ကျနော်ကို အရည်ထွက်သွားတဲ့ အထိလုပ်မပေးဘူး၊ ဂွေလှိမ့်ပေးနေတာတွေရပ်လိုက်ပြီး “နောက်မှ ပြီးအောင်လုပ်ပေးမယ် အခုအိပ်ကြမယ်” တဲ့၊ ဘာကြောင့်မှန်းတော့ နားမလည်ဘူး၊ ပြောတဲ့အတိုင်းတော့ နားထောင်းလိုက်ပြီး အန်တီဦးဖက်ပြီး အိပ်လိုက်တော့တယ်လေ၊ မနက်မိုးလင်းခါစမှာ သင်္ဘောက ဆိပ်ကမ်းကပ်လို့ ဆင်းခဲ့ကြတယ် ပြီးတော့ ရွာထဲက အကြွေးရစရာရှိနေတဲ့ ကုန်ခြောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ အိမ်ကိုသွားကြပြီး ကိုယ်လက်သန့်ရှင်းရေးလုပ် ရေချိုးအဝတ်အစားတွေလဲပြီးနောက် ဆိုင်ရှင်နဲ့ မနက်စာစားရင်း စကားပြောကြတာပေါ့၊ မနက် ၉ နာရီလောက်တော့ စက်လှေနဲ့ ရွာနီးချူပ်စပ်က အခြားရွာလေးတွေကို သွားလို့ အကြွေးလိုက်တောင်းကြတယ်လေ၊ ညနေ ၄ နာရီထိုးတော့မှာ တည်းခိုမယ့် ရွာက အိမ်ကို ပြန်ရောက်လာပြီး အနားရတော့တယ်၊ အိမ်ရှင်က ကျနော်နဲ့ အန်တီဦးတို့ ညအိပ်ဖို့ အခန်းကျယ် တစ်ခန်းပေးထားတယ်လေ၊ ဒီရွာမှာ ညအိပ်ရတော့မှာပေါ့၊ ညနေပိုင်းရေချိုးပြီး အဝတ်အစားတွေလဲတော့ အန်တီဦးရဲ့ ရင်သားတွေကို ကျနော်တစ်ကြိမ်တွေခွင့်ရခဲ့သေးတာ လိင်တံတောင် တော်တော်မာတောင်သွားသေးတယ်၊ အန်တီဦးကလဲ အဲဒါကိုသိတော့ ကျနော်လိင်တံကို လက်နဲ့ ကိုင်လိုက်ပြီး ပါးကိုနမ်းရင်း “ ညရောက်မှ” တဲ့၊ ရင်ခုန်လိုက်တာလေ၊ နောက်တော့ အန်တီဦးက အိမ်ရှင်နဲ့ စကားပြောရင်း ကျန်ခဲ့ပြီး ကျနော်ကတော့ ရွာထဲလျှောက်ကြည့်တော့တာပေါ့၊ ဘာမှတော့ ထူးထူဆန်းဆန်းမရှိပါဘူး၊ အိမ်ခြေ ၁၀၀ ကျော်လောက်ရှိတဲ့ ရွာကြီးပါ၊ လမ်းဆုံးတော့ လယ်ကွင်းနဲ့ ဆားကွင်းတွေပဲတွေ့ရတယ်၊ ရွာလယ်မှာတော့ တောသူတွေ ရေခပ်ဆင်းနေကြတာပေါ့၊ ၆ နာရီခွဲကျော်လို့ မှောင်တော့မှပဲ အိမ်ကို ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီး အန်တီဦးက ညနေစာ ထမင်းအတူစားဖို့ စောင့်နေလေရဲ့၊ ညနေစာစားပြီးတော့ အန်တီဦးတို့က အလုပ်ကိစ္စစကားဆက်ပြောကြ၊ ကျနော်ကတော့ အတော်ပျင်းနေပြီ၊ ည ၈ နာရီကျော်တော့မှ အိမ်ရှင်ကို နှုတ်ဆက်လို့ အပေါ့သွားလိုက်ပြီး အိမ်ခန်းထဲဝင်ခဲ့ကြတော့တယ်၊ အိပ်ခန်းထဲမှာက ဟိုဖက်ဒီဘက် ခြင်ထောင်နှစ်လုံး ထောင်ပြီး အိပ်ရာခင်းလိုက်တာပေါ့၊ နောက်တော့ အခန်းတံခါးပိတ် မှန်အိမ်မီးကို မှုတ်လိုက်ကြပြီး ကျနော်ကို သူ့အိပ်ရာဖက်ကို လက်ဆွဲလို့ ခေါ်ပါလေရော၊ မှောင်သွားတော့မှ သတိထားမိတာ ကျနော်ဘေးဘက် ကပ်ရပ်မှာ အခန်းတစ်ခန်းကရှိနေသေးတာကိုး၊ ကျနော်တို့ နှစ်ဦး အချိန်အတော်ကြာအောင် ဖက်ထားရင်း နှခမ်းချင်းနမ်းမိကြတော့တယ်၊ အန်တီဦးက ကျနော်ကို နမ်းတဲနည်းတွေ သင်ပေးနေတာပေါ့လေ၊ နမ်းနေရင်းနဲ့လဲ အန်တီဦး ရဲ့ လက်က ထောင်မတ်နေတဲ့ လိင်တံကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ပြီး ရွရွလေးပွတ်ပေးနေတာပေါ့၊ အန်တီဦးက သူလုံချည်ကို ခါးအထက်ဆီလှန်တင်လိုက်တယ် ပြီးတော့ကျနော်ရဲ့ ပုဆိုးကိုချွတ်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ ကိုယ်လုံးပေါ်သို့ ကျနော်ကို ဆွဲတင်လိုက်တော့တယ်၊ ဆီးခုန်ချင်းထိကပ်လို့ အန်တီဦးရဲ့ ကိုယ်ပေါ်ကို ရောက်သွားခဲ့ရပြီ၊ အင်္ကျီကိုလှန်တင်လိုက်တော့ ဘယ်အချိန်ထဲက ဘော်လီကိုချွတ်ထားမှန်းတောင်မသိ ရင်သားနှစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရရော၊ အန်တီဦးရင်သားတွေက ကြီးတယ်လို့ဆိုရမယ်၊ ခလေးနှစ်ယောက်ကို နို့တိုက်ထားခဲ့ပေမယ့် ရင်သားတွေက တင်းတင်းရင်းရင်းပဲ ရှိနေသေးတာ၊
နို့သီးခေါင်းတွေကတော့ ရှည်ထွက်နေပြီ၊ ကျနော်လဲ ညက သင်္ဘောပေါ်မှာ ပြောပြထားခဲ့တဲ့အတိုင်း ရင်သားတွေကို နမ်းပေးလိုက်တော့ နို့သီးခေါင်းတွေ မာကျောလာလေရော၊ ပြောရရင် ကျနော်က စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီး ဒါပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတောင် မသိ၊ အန်တီဦးရဲ့ ဦးဆောင်စေခိုင်းတဲ့ အတိုင်းပဲ လုပ်ရတော့မယ်လေ၊ ရင်သားတွေကိုနမ်းပေးနေတုန်း အန်တီဦးရဲ့လက်တွေက ကျနော်ရဲ့ခေါင်းကို မသိမသာအောက်ဖက်ကို တွန်းနေတာခံနေရတယ်၊ အန်တီဦးရဲ့ ကိုယ်လုံးကလဲ ခေါင်းရင်ဖက်ကို တိုးသွားတော့ ကျနော်မျက်နှာက အန်တီဦးရဲ့ ပေါင်ကြားထဲက ပိပိနေရာကိုရောက်သွားရော၊ ကျနော်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို မသိဘူး ၊ မီးရောင်ကလဲ မရှိတော့ ဘာကိုမှာ ပီပီပြင်ပြင်မမြင်ရဘူးလေ၊ အန်တီဦးရဲ့ လက်က ကျနော်ခေါင်းကို ကိုင်ထားရင်း ဖိလိုက်တော့ ပိပိကြီးနဲ့ ကျနော်မျက်နှာ အပ်သွားတော့တာ၊ ပြီးတော့မှ သူ့ရဲ့ အစိကို ပြူးထွက်လာအောင် လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အစိဘေးသားတွေကိုဖြဲပေးပြီး လျှာနဲ့လျှက်ပေးလို့ လေးသံလေးနဲ့ ပြောတာပေါ့၊ ကျနော်လဲ လုပ်မိလုပ်ရာနဲ့ နို့သီးခေါင်းလောက်ရှိနေတဲ့ အန်တီဦးရဲ့ အစိကို လျှာနဲ့ စုပ်လိုက် လျှက်လိုက်နဲ့ စလုပ်တော့တာ၊ အစိကိုစုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ အန်တီဦးရဲ့ လက်တွေက ကျနော်ရဲ့ ဆံပင်ထဲ လက်နဲ့ ထိုးဆွနေပြီး ခါးကကော့တက်လာတော့တာ၊ အစိရဲ့ ဘေးသားနုလေးတွေကို လျှာနဲ့ လျှက်လိုက်ရင် အစိနဲ့ လျှာ မထိ ထိအောင် နေရာလိုက်ရွှေ့နေတာပေါ့၊ အန်တီဦးလဲ အစိကိုလုပ်ပေးခံရတာ အတော်ကြိုက်ပုံပေါ်တယ်၊ ပိပိထဲက အရည်တွေထွက်လိုက်တာ ဒလဟောပဲ ကျနော်ရဲ့ မေးစေ့မှာ အရည်တွေပေကျံနေပြီလေ၊ အစိကိုလျှက်ပေးနေရင်း လက်ညှိုးကို ပိပိထဲထိုးထဲ့လိုက်တယ်၊ ခလေးနှစ်ယောက်တောင် ဒီနေရာကမွေးထားတာ ဆိုတော့ ကျယ်နေပြီ၊ ဒါကြောင့် နောက်ထပ်လက်ခလယ်ပါထိုးထည့်ပြီး ရှေ့နောက် လှုပ်ရှားပေးတာပေါ့၊ အန်တီဦးကတော့ အောက်နှခမ်းကို သွားနဲ့ ကိုက်ထားတာကို အမှောင်ထဲမှာ မြင်နေရတာပေါ့၊ ကျနော်လဲ မထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီး ပိပိထဲက လက်နှစ်ချောင်းကို ပြန်ထုတ်၊ ဘေးသားတွေကိုဆွဲဖြဲလိုက်တော့ ပိပိရဲ့ အပေါက်ဝက ဟလာလာပြီ၊ လျှာကိုအထဲကို ရောက်နိုင်သမျှ သွင်းလိုက်ပြီး ပိပိရဲ့ အဝနားမှာ ငှက်တွေတောင်ပံခတ်သလို လျှာကို ခပ်မြန်မြန်လေး လှုပ်ရှားပေးလိုက်တာ အန်တီဦး ဖင်ကြီးက အိပ်ရာပေါ်ကနေ တစ်တောင်လောက်ကြွတက်လာပြီး လက်တွေက ကျနော်ခေါင်းကို ပိပိနဲ့ ဖိကပ်လို့ ငြိမ်ကျသွားပါလေရော၊ ကျနော်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲလဲ အန်တီဦး ရဲ့ ပိပိထဲက ညှီစို့စို့ အရည်တွေဝင်ကုန်ပြီ၊ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း မသိတော့ အန်တီဦးက သူ့ကိုယ်လုံးပေါ်ကို ကျနော်ကိုဆွဲခေါ်တော့တယ်၊ ကျနော်လဲ ပေါ်ပြန်ရောက်ရော အန်တီဦးက ပေါင်ကိုလဲ ကားထား ပိပိကလဲ ကျယ်နေဆိုတော့ ကျနော်ရဲ့ လိင်တံဟာ လက်နဲ့တောင် ထိန်းပြီးထည့်စရာမလို၊ ပိပိထဲကို တစ်ဆုံးဝင်သွားရော၊ အန်တီဦးဆီက “ ဟယ် ဝင်သွားပြီ” လို့ ပြောသံကြားလိုက်ရတယ်၊ ပြီးတော့ “ပြန်ထုတ်လိုက်ဦး” လို့ ပြောတော့ ဘာကြောင့်မှန်းတော့ မသိ လိင်တံကို ပိပိထဲကနေထုတ်လိုက်တော့တယ်၊ ကျနော်ကို ပတ်လက်အိပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး အန်တီဦးက ခေါင်းရင်းဘက်ကို ဖင်ပေးလို့ လေးဘက်ထောက်ထားရင်း ကျနော်လိင်တံကို သူ့ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်တော့တာ၊ ကောင်းလိုက်တာဗျာ တစ်ခါမှ မခံစားဘူးတဲ့ အရသာ ကိုယ်ဟာကို ဂွေလှိမ့်ရတာနဲ့လဲမတူ၊ အန်တီဦးလက်နဲ့ ကိုင်ပြီး လုပ်ပေးတဲ့ အရသာမျိုးလဲ မဟုတ်၊ အာခံတွင်းနွေးနွေးလေးထဲမှာ လိင်တံထိပ်ခေါင်းကို နှခမ်းနဲ့ စုပ်ထားပြီး ခေါင်းပတ်ပတ်လည်ကို လျှာနဲ့ ပတ်နေတော့တာ၊ ထိပ်က အပေါက်လေးကို လျှာထိပ်နဲ့ ထိုးလိုက်ရင်များ အသဲတွေအေးသွားပြီး ကျင်သွားတာတောင် ခံစားလိုက်ရတယ်၊ နောက်တော့ သူ့ရဲ့ တံတွေးတွေနဲ့ လိင်တံတစ်ချောင်းလုံးကို စိုစွတ်အောင်လုပ်ပြီး ပါးစပ်နဲ့ စုပ်လို့ အထက်အောက်
လှုပ်ရှားတော့တာ၊ ကျနော်လဲ ထိန်းမရချင်တော့ဘူး၊ လေးဘက်ထောက်ထားတဲ့ အန်တီဦးရဲ့ ဖင်နောက်ကနေ ပိပိထဲကို လက်ညှိးထိုးထည့်ပြီး ဇိမ်ခံလိုက်တာ ခဏပဲကြာတယ်၊ သုတ်ရည်တွေက အန်တီဦးရဲ့ ပါးစပ်ထဲပန်းဝင်သွားရောဗျာ၊ ကျနော်လဲ အားလည်းနာ ကြောက်လဲကြောက် ဘာအပြောခံရမလဲလို့ စောင့်ကြည့်နေတာ၊ အန်တီဦး က ဘာမှ မပြောပဲ ကျနော်ရဲ့ သုတ်ရည်တွေကို မျိုချလိုက်လေရော၊ ပြီးတော့မှ ကျနော်ရဲ့ ဘေးမှာ အတူလာလှဲပြီး “ကောင်းလိုက်တဲ့အရသာ” လို့ ပြောသံကြားလိုက်ရတယ်လေ၊ ပြီးတော့ ပြောသေးတာ “နင်ဦးလေးက ပိပိကို သူ့ပါးစပ်နဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ လုပ်မပေးခဲ့ဘူး…. အန်တီက အဲလို အလုပ်ခံချင်နေတာကြာပြီ…. အရမ်းခံလို့ကောင်းတာပဲ” လို့ ပြောပြီး ကျနော်ကို နဖူးလေးနမ်းလိုက်ရင်း ရင်ခွင်ထဲမှာထည့်လို့ ဖက်ထားပါလေရော၊ ကျနော်လဲ ဦးလေးနဲ့ အန်တီဦးတို့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အကြောင်းကို သိချင်တော့ “ဦးလေးက အိမ်မှာ နေ့တိုင်း ပြန်မအိပ်တတ်ဖူးနော်” လို့ အစပျိုးပြီးမေးလိုက်တော့ “နင့်ဦးလေးက စက်လှေကပ်တဲ့ ရွာမှာ မိန်းမနောက်တစ်ယောက် ရနေပြီ” ပြောတော့တာ၊ တစ်ကယ်ပြောတာလား ရွဲ့ပြောတာလားတော့မသိ၊ ကိုယ်ဦးလေး အရင်းဆိုတော့ ဆက်မမေးရဲတော့ဘူး၊ တော်ကြာအမျိုးမကောင်းကြောင်းတွေပါ ပါလာတော့မယ်၊ ကျနော်လဲ အခု အန်တီဦးနဲ့ သာယာနေတာလေး ပျောက်သွားမှာ စိုးတော့ တိတ်တိတ်ကလေး နေလိုက်မိရော၊ အန်တီဦးရဲ့ ကိုယ်လုံးက ပြည့်ပြည့်တင်းတင်းနဲ့ဆိုတော့ ဖက်ထားရတာ နွေးပြီးအိနေတာပဲ၊ စဉ်းစားကြည့်မိလိုက်တာ အန်တီဦးက သူ့ယောင်္ကျားနဲ့ မပြည့်ဝတော့တာတွေ၊ သူ့ယောင်္ကျားဆီက မရခဲ့တာတွေကို ရအောင် ကျနော်ကို ပုံစံသွင်းပြီး သင်ပေးရင်း ခံစားနေတဲ့ပုံပေါ်တယ်၊ ကျနော်လဲ အန်တီဦးအတွက် မွေးပြီး အစားခံရသလို ဖြစ်နေခဲ့ပြီ၊ အိပ်လို့လဲ မရ အတူတူဖက်ထားရင်း မိနစ် ၂၀ ကျော်လောက်ပဲ ကြာမယ်ထင်တယ်၊ ကျနော်လိင်တံက ပြန်လည်မာကျောလာပြန်ပြီ၊ အန်တီဦးကလဲ အဲဒါကိုသိတော့ လက်နဲ့ လိင်တံကို ကိုင်ပေးပြီး ဆွနေပါလေရော၊ လိင်တံကတော်တော်လေးကို မာတောင်လာတဲ့ အချိန်ရောက်တော့ “ဒီတစ်ခါတော့ အပေါ်ကနေ တက်လုပ်ပေးတော့” လို့ ပြောတာပေါ့၊ အန်တီဦးရဲ့ ပါးစပ်နဲ့ လုပ်ပေးခံရတာ ကောင်းခဲ့ပေမယ့် လိင်တံကိုလဲ ပိပိထဲကို တစ်ဆုံးထိုးသွင်းပြီး လုပ်လိုက်ချင်နေတယ်လေ၊ ကျနော်အန်တီဦးရဲ့ ကိုယ်လုံးပေါ်ကို တက်လိုက်ပြီး ပေါင်ကြားထဲကို ဝင်လိုက်တယ်၊ အန်တီဦးက ကျနော်လိင်တံကို ကိုင်ပြီး ပိပိအဝကို တေ့ပေးလိုက်တော့ ကျနော်လဲ အားပါးတရ ထိုးသွင်းလိုက်တော့တာပေါ့၊ အရည်တွေကလဲရွှဲ ခလေးမွေးဖူးထားတဲ့ ပိပိဆိုတော့ ရှောရှောရှူရှူပဲ တစ်ဆုးံ ပဲ ဝင်သွားတော့တာ၊ ရှေ့တိုးနေက်ဆုပ်နဲ့ လုပ်နေသော်လည်း စိတ်ထဲမှာ ဘယ်ဖက်လဲမထိ ညာဖက်လဲမထိ ချောင်ချောင်ချိချိကို ဖြစ်နေတယ်လေ၊ ဒါကို အန်တီဦးက သိတော့ အောက်ကနေ ပေါင်ကိုစိပေးလိုက်တော့ နဲနဲကျပ်သွားပြီး လှေကြီးထိုးရိုး ရိုးနဲပေါ့၊ ပထမတစ်ကြိမ်ကလဲ အန်တီဦးရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာပြီးထားတော့ ယခုတစ်ကြိမ် ကျနော်လဲ တော်တော်နဲ့ ပြီးချင်စိတတ်တွေ မဖြစ်မိဖူး၊ ပိပိက ကျယ်နေလို့ ဂလိုင်ခေါက်နေရသလို ဖြစ်နေလို့ထင်တယ်၊ အန်တီဦးက ခဏရပ်ခိုင်းတယ်၊ ပြီတော့ ဒူးထောက်ပြီး လေးဖက်ထောက်နေပေးတော့ နောက်ကနေသွင်းခိုင်းတဲ့ ပုံစံ၊ ကျနော် လိင်တံသွင်းဖို့ကို အရင်ဆုးံ အပေါက်ရှာနေရတာပေါ့၊ ပိပိက ပေါင်ကြားထဲမှာ ညှပ်နေတော့ တော်တော်နဲ့ မတွေ့၊ လိင်တံထိပ်နဲ့ စမ်းပြီး တေ့မိတဲ့ အပေါက်ကို ထိုး ထဲ့လိုက်တာ၊ တော်တော်တော့ ကျပ်နေပြီး အရင်ထက်ပိုလို့တောင် ဖီလ်းဖြစ်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့် အန်တီဦး ကျနော်ပေါင်ကို လက်နဲ့ လှမ်းရိုက်ပါလေရော၊ အဲဒီတော့မှ လက်နဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်တာ လိင်တံကဖင်ထဲကို ဝင်သွားတာကိုး၊ ဖင်ထဲကို လုပ်ရတာ ခြောက်တော့ ခြောက်သွေ့နေတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျပ်နေတော့ ကျနော်အတွက် ပိုလို့ ကောင်းနေတော့တယ်၊ အန်တီဦးကလဲ ဖင်ကို ညှစ်ပေးထားပုံရတော့ ကျနော်လဲ စိတ်တွေကိုထိန်းမရတော့ဘူး၊ အချက် ၂၀ လောက် လုပ်ပြီး သုတ်တွေကို ဖင်ထဲကိုပဲ
ပန်းလွှတ်လိုက်တော့တာပေါ့၊ ပြီးတော့ လိင်တံကို ဖင်ထဲက မချွတ်ပဲ အန်တီဦးရဲ့ ကျော်ပေါ်ကို ထပ်လျှက် မှောက်သွားပါလေရော၊ အန်တီဦးက အောက်ကနေ “လူဇိုး….လုပ်မယ်လုပ်တော့လဲ ဖင်ထဲကို” တဲ့၊ “နာလို့လား” လို့ ကျနော်က မေးလိုက်တော့ “ကောင်းတော့ကောင်းတယ် နဲနဲအောင့်တယ်” တဲ၊ အဲဒီညက ကျနော် အန်တီဦးကို ၄ ခါလောက် ပိပိနဲ့ ဖင်ကို တစ်လှည့်စီ လုပ်ဖြစ်လိုက်ကြပြီး ည ၁၂ နာရီကျော်တော့ အပြန်အလှန်ဖက်ထားရင်း အိပ်ပျော်သွားကြရော၊ မနက် ၅ နာရီလောက်ရောက်တော့ ကျနော်ရုတ်တရက် နိုးလာပြီး အန်တီဦးက ဘေးမှာ မရှိတော့ဘူး၊ လိင်တံက မာတောင်နေပြန်ပြီး နွေးနွေးထွေးနဲ့ အထိအတွေ့ တစ်ခုကို ခံစားနေရာသလို ဖြစ်နေလို့ မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ၊ အန်တီဦးက ကျနော်ပေါင်ကြားထဲမှာ လှဲနေရင်း လိင်တံကို ပါးစပ်ထဲမှာ ထည့်လို့ လုပ်ပေးနေပြန်ပြီ၊ အန်တီဦးက တော်တော်ထန်တာပဲ၊ သူ့ယောင်္ကျား ကျနော်ဦးလေးနဲ့က မတွေ့ရတာ ကြာလို့ တော်တော်ဆာလောင်နေပုံရတယ်၊ နောက်တော့ ကျနော်ရဲ့ အပေါ်တက်လာပြီး ခါးပေါ်မှာ ခွထိုင်ပြီး လိင်တံကို ပိပိအဝတေ့လို့ ဖိပြီးထိုင်ချလိုက်တော့ လိင်တံက ပိပိထဲ ဝင်သွားပြန်ရော၊ အန်တီဦးဟာ မျက်စိကိုမှိတ်လို့ ကျနော်အပေါ်ကနေ စည်းချက်မှန်မှန်နဲ့ ဆောင့်နေတော့တာ ထင်တောင်မထင်ရဘူး၊ အန်တီဦး အမောခံနိုင်းပြီး ဆက်တိုက်လုပ်နိုင်သားပဲ၊ ကျနော်လဲ သိပ်မကြာပါဘူး ပိပိထဲမှာ တစ်ကြိမ်ပြီးသွားပြန်ရော၊ ပြီးသွားတော့ အန်တီဦးက ကျနော်ရဲ့ ပါးကို နမ်းလိုက်ပြီး အဝတ်အစားတွေကို ပြင်ဝတ်လိုက်ပြီး အိပ်ရာကထလို့ အိပ်ခန်းထဲက ထွက်သွားတော့တယ်လေ၊ ကျနော်ကတော့ မောမောနဲ့ နောက်ထပ်တစ်ရေး ပြန်အိပ်ပျော်သွားရတာပေါ့၊ မနက် ၈ နာရီလောက်မှ ကျနော်နိုးလာပြီး အန်တီဦးက သနပ်ခါးလေး အဖွေးသားနဲ့ ကျနော်ကို “သားကြီး ထတော့” လို့ လာနိုး တော့တယ်၊ အန်တီဦးရဲ့ ပါးလေးကို နမ်းလိုက်တာ အိပြီး မွှေးနေတာပဲ၊ ပြီးတော့မှာ အန်တီဦးက ကျနော်ကို “သားကြီးအဖြစ် မွေးပြီးစားလိုက်ပြီ” လို့ ပြုံးစိစိနဲ့ ပြောတယ်လေ၊ ဒီနေ့ ကျန်နေတဲ့ ရွာတစ်ရွာကို အကြွေးသွားတောင်းပြီး ညနေရောက်ရင် အိမ်ပြန်ရတော့မယ်၊ ၉ နာရီကျော်တော့ စက်လှေနဲ့ အတူသွားလိုက်ကြလေ၊ စက်လှေပေါ်မှာ လူက ချောင်နေပေမယ့် အန်တီဦးက ကျနော်နားကပ်ထိုင်လို့ လက်မောင်းကို သူ့မရဲ့ ရင်သားနဲ့ ဖိထားတော့တယ်လေ၊ လက်ကလဲ ကျနော်ရဲ့ ပေါင်ပေါ်တင်ထားပြီး လူလစ်ရင် လိင်တံထိပ်ကို လက်နဲ့ မထိတစ်ထိ လုပ်နေတော့ လိင်တံက မာတောင်လာလို့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ ညှပ်ထားရရောပေါ့၊ အန်တီဦးကတော့ ကျနော်ဒုက္ခရောက်အောင် စနောက်နေသလိုပဲ ပြုံးစိစိနဲ့ပေါ့၊ တည်းခိုတဲ့ရွာကို ၁၂ ကျော်မှာ ပြန်ရောက်လာပြီး နေလည်စာထမင်းစားလို့ တစ်ရေးမအိပ်ခင် တစ်ချီလောက်တော့ စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်လိုက်ကြသေးတာ၊ အခုအချိန်အထိတော့ နှစ်ယောက်လုံးက တက်ကြွနေတာ၊ နှစ်ဦးသား ဆိတ်ငြိမ်လုံခြုံတဲ့ နေရာမှာ မတွေ့လိုက်နဲ့ တွေ့တာနဲ့ အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ကြပြီ၊ ညနေ ၅ နာရီလောက်မှာ သင်္ဘောဆိပ်ကို ဆင်းလို့ မြို့ကိုပြန်ကြတော့တာပေါ့၊ အပြန်ခရီးမှာလည်း အလာတုန်းကအတိုင်း မထိတစ်ထိ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ပဲ နေခဲ့ကြရတယ်လေ၊ နောက်နေ့မနက် မြို့ကိုရောက်တော့ အန်တီဦးက ဆိုင်ကိုသွားတယ် ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ညနေမှာပြန်ရောက်လာပြီး မီးဖိုချောင်ကိစ္စတွေလုပ်တာပေါ့၊ အားလုံးပြီးသွားရင် ရေချိုးတယ်၊ ကျနော်လဲ ပုံမှန်ချောင်းကြည့်ဖြစ်တုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ် ထူးခြားတာက ချောင်းတယ်ဆိုတာထက် ပေါ်တင်ကို တံခါးဖွင့်ပြီးကြည့်တော့တာ၊ ခြံတွေက အကျယ်ကြီးတွေ သစ်ပင်တွေ ခြုံနွယ်တွေ ရှိနေတာကြောင့် နောက်အိမ်တွေ မြင်မှာတော့ မစိုးရိမ်ရဘူးလေ၊
ကျနော်ကြည့်နေမှန်းကို အန်တီဦး က သိနေတော့ ရေချိုးလို့ ဆက်ပြာတိုက်ရင် ရင်လျားလံုး ချည်ကို အသာလေးလျောချလိုက်ပြီး ရင်သားဖွေးဖွေးလုံးလုံးတွေကို အချိန်အကြာကြီး ဆပ်ပြာတိုက်ပြတော့တာ၊ အိမ်မှာဆိုတော့ လူကသိပ်မပြတ် နေ့ဖက်တွေတော့ မတွေ့ဖြစ်ကြ၊ ဦးလေး အိမ်ပြန်မအိပ်တဲ့ ညတိုင်း ကလေးတွေ အိပ်သွားရင် အန်တီဦး က ကျနော်ရဲ့ အခန်းကိုတက်လာတတ်သလို့၊ တစ်ခါတလေလဲ အန်တီဦးတို့ အိပ်ခန်းမှာ ကျနော်သွားအိပ်ပြီး လိင်ဆက်ဆံဖြစ်ကြတာပေါ့၊ ဦးလေးမရှိတဲ့ ညတွေဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆောင်တော်ကူး ညတွေပေါ့၊ ပိပိထဲကိုလုပ်တာထက် ဖင်ထဲကို လုပ်ဖြစ်တာများတယ်လေ၊ အန်တီဦးလဲ ဖင်ထဲကို အလုပ်ခံရတာ အရသာတွေ့နေခဲ့ပြီ၊ ဒါပေမယ့် သုတ်ရည်တွေကိုတော့ ပိပိထဲကိုသာ ဝင်စေချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတော့ ပြီးခါနီးတိုင်း ပိပိထဲကို ပြောင်းထည့်ပြီး သုတ်ရည်တွေ ပန်းထည့်ရတာပေါ့၊ အန်တီဦးကြိုက်တာက သုတ်ရည်တွေ ပိပိထဲကို နွေးကနဲ ဝင်လာတာကိုတဲ့၊ ဒီလိုနဲ့ အန်တီဦးနဲ့ နေခဲ့ပြီး ၆ လအကြာမှာ အန်တီဦးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာတော့တယ်၊ အန်တီးဦးပြောတာကတော့ ကျနော်ရဲ့ ရင်သွေးလို့ ပြောပေမယ့် ဦးလေးကတော့ သူမိန်း မကို လူဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက် မိတ်ဆွေတွေကြားမှာ ဂုဏ်ယူဝင်ကြွားလို့ လက်မထောင်နေခဲ့တာပေါ့လေ.....။
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ၀ါသနာရှင်များ ဖတ်မှတ်သိမ်းဆည်းရလွယ်ကူအောင် မပျောက်ပျက်သွားရလေအောင် အချစ်နယ်ကျွံ
http://bluegyidr.blogspot.sg/မှ ကူးယူပြီး PDF ဖိုင်ပြုလုပ်ပေးလိုက်သည်။
More Documents from "Aung Min Thin"
October 2019 4,838
Rangkuman Materi Pkn Sesuai Kisi-2 Us Sd 2018
Iec 62217 Paper-e-13